(No. 66 , October 16, 2020)
၁။ ကရင်ပါတီများနှင့် ကရင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို တခဲနက် မဲပေးရန် KNU တိုက်တွန်း
၂။ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) သည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၊ NLD ပါတီ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအခြေစိုက် မည်သည့်ပါတီနှင့်မျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်
၃။ ကရင်အမျိုးသားအလံတော်ကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို NLD ကန့်ကွက်၊ NLD ကိုယ်စားလှယ် လောင်း အချို့လည်း အသုံးပြုမှုရှိနေ
၄။ “၀”အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် COVID-19 ကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်း ပါတီ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ပြောကြား
၅။ ကရင်ပါတီ(KNDP) ကို ကရင်လူငယ်ကွန်ရက် ဝန်းရံကူညီ
၆။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရပ်သားများ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမည့်အလားအလာများ မြင်တွေ့နေရပြီး ပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွား လာခြင်း မဖြစ်ပေါ်စေရေး တပ်မတော်နှင့် RCSS တို့ အပစ်ရပ်ပေးရန် ရှမ်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆို
၇။ သောင်းနှင့်ချီသော မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ဝန်းရံသူများ ဘီလူးကျွန်းနှင့် ရေးမြို့နယ်တွင် လှည့်လည်အင်အားပြ
၈။ မူဆယ် SNDP စည်းရုံးရေး ဆိုင်းဘုတ်များဖျက်ဆီးခံရ
၉။ တောင်သူများအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ထပ်တိုးရန် တပ်မတော်က လျှောက်ထားသည့်အမှု ပလပ်ခံရ
၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စု ၇ စုကို မဲဆန္ဒနယ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌစာတင်
၁၁။ ရသေ့တောင်တွင် လက်နက်ကြီးကျ ရွာသား ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
၁၂။ ရေမဲပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်သူကိုသာ မဲထည့်မည်ဟု ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်များပြော
၁၃။ ဖားကန့် စည်ပင် ဥက္ကဌ တင်မြောက်ရာတွင် တရားမျှတမှုမရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ကန့်ကွက်စာတင်
၁၄။ ရွာသားများစစ်ဘေးရှောင်နေစဉ် နေအိမ်များမွှေနှောက်ခံရ
၁၅။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သည့်အပေါ် ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူပေးရန် ကန်ပက်လက် အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းများတောင်းဆို
၁၆။ စစ်တွေရောက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် သုံးဦးနဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး အဖမ်းခံရ
၁၇။ ပလက်ဝမြို့ကို တပ်မတော်လုံခြုံရေးယူပြီး ဆန်အိတ်ပေါင်း ၁၇၀၀ ပို့ဆောင်ပေးနေပြီ
၁၈။ ကျောက်မဲတွင် ပစ်ခတ်သံငြိမ် သော်လည်း စစ်ရှောင် ၃၅၀၀ ကျော် ထိရှိလာ
၁၉။ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်မည်ကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများစိုးရိမ်
၂၀။ ရခိုင်မှာ ထိုးစစ်တွေ ချက်ချင်းရပ်ဖို့ Free Burma Rangers အဖွဲ့တောင်းဆို
၂၁။ မတူကွဲပြားမျိုးနွယ်များ၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်ဟု ကမန်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီဆို
၂၂။ တောင်ကုတ် NLD အမတ်လောင်းတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ် မိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်
၂၃။ ဖားကန့်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မဲပေးမည့်စာရင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာရင်းထက် လူဦးရေ ထက်ဝက်ခန့်တိုး
၂၄။ မြောက်ဦးတွင် FDA ဝန်ထမ်း ၁ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
၂၅။ မူဆယ်မြို့နယ် မိုင်ယု ၁၀၅ မိုင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ဖောက်ခွဲရေးသုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည့် Remote Mine Receiver များ ဖမ်းဆီးရမိ
၂၆။ ကိုဗစ်ကာလ လုံခြုံစွာ မဲပေးနိုင်ရေး အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု လူငယ်များပြုလုပ်
၂၇။ လွိုင်ကော် အဝေးပြေးစခန်းမှ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်နောက်လိုက်များအား ဆန်နှင့်ဆီ ထောက်ပံ့
၂၈။ ဘူးသီတောင်မြို့ပေါ်ရှိ NLD အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် ၅ ခုဖျက်ဆီးခံရ
ကရင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပါတီများနှင့် ကရင်အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို တခဲနက် မဲပေးရန် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNUက ယနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက်)တွင် ထုတ်ပြန်သည့် တစ်နိုင်ငံ လုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူ စာချုပ် (NCA) ၅ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကြေညာချက်တွင် တိုက်တွန်း လိုက်သည်။
ကရင်အမျိုးသားများ၏ မိမိကံကြမ္မာ ဖန်တီးရေးမှာ ကရင်အမျိုးသားအားလုံး မတူညီသည့် အခြေအနေအောက်တွင် ပါဝင် သွားရန် လိုအပ်ခြင်းကြောင့် ယခုလို တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူး က ကေအိုင်စီသို့ ယခုလို ပြောသည်။ ၎င်းက“ရွေးကောက်ပွဲက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာ ရှိနေတယ်။ ၂၀၀၈ အောက်မှာ ရှိနေပါစေ ကိုယ့်အတွက် ပွင့်လာတဲ့ Space (နေရာ) လေးတစ်ခုကို ပါဝင်ပြီးတော့ ချဲ့ထွင်ဖို့လိုအပ်သလို ကျနော်တို့ ၂၀၀၈ ရဲ့ ပြင်ပမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း ကျနော်တို့ရရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေး နွေးပွဲ တွေမှာ ကရင်တွေ လိုလားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ တန်းတူရည်တူ ကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ သူ့ထောင့် ကိုယ့်ထောင့် ပါဝင်ပြီးတော့ လုပ်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ကရင်တိုင်းရင်းသား အပါအဝင်တစ်နိ်ုင်ငံလုံး၏ ဘုံရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်မှုတွင် လွှတ်တော်တွင်း လွှတ်တော်ပြင်ပ ဟန်ချက်ညီညီသွားနိုင်ရန် ကရင်ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကရင်အမျိုးသား ကိုယ်စားလှယ် များအနေဖြင့် နေရာတစ်ခုရရှိသွားပါက ဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲသည့်နေရာများတွင် ပါဝင်သွားရန်လည်း ပဒိုစောတာဒိုမူးက ဆက်ပြောသည်။ ထို့အပြင် တခြားသောပါတီတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် ကရင်အမျိုးသား ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများအနေဖြင့် လည်း ကရင်အမျိုးသားများ၏ ဘုံရည်မှန်းချက်အတိုင်း ပါဝင်နိုင်မည့် မိမိအခန်းကဏ္ဍများကိုလည်း မြင့်တင် သွားရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း KNU ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဖြည့်စွက် တိုက်တွန်းသည်။ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ခိုင်မာခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိ နှိုင်းမှုများတွင် အခြား သော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ပါဝင် ပတ်သက် သူများအားလုံး ကြိုးပမ်းသွားရန်လည်း KNU ၏ NCA (၅)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တိုက်တွန်း ထားသည်။
ယနေ့ ကျရောက်သည့် NCA (၅)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့မှ သဝဏ်လွှာ များ အသီးသီးပေးပို့ ခဲ့ကြသလို အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ကလည်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e1%8 0%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%8
ပြည်နယ်လေးခုရှိ ပေါင်းစည်း တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်သာ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး USDP ပါတီ၊ NLD ပါတီ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအခြေစိုက် မည်သည့်ပါတီနှင့်မျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) က အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) နှင့် နီးစပ်မှုရှိပြီး ငွေကြေးများပင် ရယူသုံးစွဲထားကြောင်း Online နှင့် မြေပြင်အခြေအနေတွင် စွပ်စွဲထုတ်လွှင့်မှုများ ရှိနေသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ပြန် ရှင်းလင်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက ပြောကြားသည်။ “အဓိက ကတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုး ရေးနဲ့ နီးစပ်တယ်။ ငွေရေးကြေးရေး သုံးစွဲတယ်။ သူတို့နဲ့ မဟာမိတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ပြောလာတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြည်သူတွေကို ချပြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက ပြော ကြားသည်။ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) သည် ကချင်တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ ဖျက်သိမ်းပြီး ပေါင်းစည်းတည် ထောင်သည့် ပါတီဖြစ်ရာ KSPP ကဲ့သို့ ပြည်နယ်လေးခုရှိ ပေါင်းစည်းတိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်သာ လက်ရှိတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း KSPP ပါတီ ဒုဥက္ကဌ (၁) ဒေါ်ဒွဲဘူက ဆိုသည်။
KSPP ပါတီနည်းတူ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ မွန်ပြည်နယ်ရှိ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ချင်းပြည်နယ်ရှိ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ကယားပြည်နယ်ရှိ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီများသည် ပေါင်းစည်းတိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖြစ်သည်။ “သူတို့လည်း ပူးပေါင်းထားတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ကချင်ပါတီတွေ ပူးပေါင်းထားတယ် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်းတော့ ချိတ်ဆက် လက်တွဲ မှု၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု ရှိပါတယ်။ သို့သော် USDP ပါတီတို့၊ NLD ပါတီတို့ နောက်တိုင်းမှာ အခြေစိုက်တဲ့ တစ်ခြားပါတီတို့၊ သူရဦးရွှေမန်းပါတီတို့၊ ပြည်သူ့ပါတီတို့ UDP ပါတီတို့ ဘယ်သူနဲ့မှ မဟာမိတ်မရှိပါဘူး။ အခုပြိုင်ဆိုင်တဲ့ နေရာမှာလည်း သူတို့နဲ့ အဓိက ပြိုင်ဆိုင်ရတာပါ” ဟု ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မည့် KSPP ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်စည်းရုံး ရေးပွဲများတွင် ပြည်သူလူထုက အဆိုပါကိစ္စရပ်များအပါအဝင် မေးမြန်းမှုများရှိသလို ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (KIA) က နောက်ခံပေးထားသည်ဆိုသော စွပ်စွဲမှုများလည်း ကြုံတွေ့ရသည်ဟု အဆိုပါ ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ KSPP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတူးဂျာ၏ ရုပ်ပုံများ၊ ပါတီပေါင်းစည်းမှုတွင် ပါဝင်သည့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခက်ထိန်နန်၏ ရုပ်ပုံများ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတံဆိပ်များ အသုံးပြု၍ Online တွင် လွှင့်တင်ဖော်ပြမှုများ ရှိသလို၊ ၄င်းတို့ တိုင်းရင်းသားပါတီကို မဲပေးလျှင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အာဏာရသွား မည်ဟု ပြောဆိုမှုများက KSPP ပါတီ၏ စည်းရုံးရေးကို များစွာထိခိုက်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။ “ပါတီတစ်ခုထက်တော့ မကပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကို ဒီလိုမျိုး မဟုတ်မမှန်တွေ တင်နေတာကတော့။ ပါတီကြီးတွေ ပါသလို ပါတီငယ်တွေလည်း ပါပါ တယ်” ဟု ဒေါာဒွဲဘူက ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပါတီက ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ထပ်မံ ပူးပေါင်းလာမှုကြောင့် ကချင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီသည် ကချင်ပါတီ လေးပါတီ တရားဝင် ဖျက်သိမ်းပြီး ပေါင်းစည်းထားသည့်ပါတီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။https://news-eleven.com/article/195607
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP)၏ ပန်းတနော် မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် ၏ မဲဆွယ် ဗီနိုင်းနှင့်အတူ ကရင်အမျိုးသားအလံတော် လွှင့်ထူခဲ့ခြင်းအပေါ် ပန်းတနော် NLD က မြို့နယ်ရွေး ကောက် ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ ထံ တိုင်ကြားမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု KPP တာဝန်ရှိသူများက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းကျေးရွာ အုပ်စု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်က KPP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်၏ ဗီးနိုင်း ဆိုင်း ဘုတ်တင်သည့်နေရာတွင် ကရင်အမျိုးသား အလံတော်လွှင့်ထူခဲ့ခြင်းများရှိသည့်အပေါ် အများထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေ ရန် အသုံးပြုသည့်အတွက် အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ တိုင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အထူးသဖြင့် ကရင်အမျိုးသားတွေပေါ့၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့က မေးတယ်။ သူ့ပါတီအလံရှိရဲ့သားနဲ့ ကရင် အမျိုးသား အလံ ထိုးတယ်ပေါ့၊ အဲ့တော့ ကော်မရှင်ကို အကြောင်းကြားပေါ့လို့ပြောတော့ ကော်မရှင်ကို တိုင်တာပါ”ဟု ပန်းတနော်မြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းညွှန့်သိန်းက ပြောသည်။ ထိုသို့တိုင်ကြားခဲ့မှုအပေါ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် တွင် ပြုလုပ်သည့် မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် စုံညီလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပါတီအလံအစား ကရင် အမျိုးသားအလံတော်ကို အသုံးမပြုရန် အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု မြို့နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်သန္တာမြင့်က ပြောသည်။
ပန်းတနော် KPP အနေဖြင့် ပါတီအလံကိုသာ လွှင့်ထူခဲ့သော်လည်း ပါတီအလံကုန်သွားသည့်အတွက် ယခုလို အသုံး ပြုမိခြင်းဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာသွားမည်ဟု ပန်းတနော် တိုင်း-၂ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း စရဲသူရိန်ဟန်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။“ဗီနိုင်းနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေတင်တော့ ပါတီအလံပဲ လွှင့်တယ်။ ပါတီအလံကုန်သွား တော့ ကရင်အလံ လွှင့်လိုက် တာ။ တခြားပါတီအချို့လည်း ကရင်အမျိုးသားအလံကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ သုံးတာတွေ့ရတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ကရင်အမျိုးသားအလံတော်သည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သည် ကရင် တစ်မျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုသည့်အတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားပါတီ ( KNP) ဒုဥက္ကဋ္ဌ မန်းထိန်ဝင်းစိန်က မှတ်ချက်ပြုပြောသည်။
“ကရင်အမျိုးသား အလံတော်က တစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်ပါတီမှ မသုံးသင့်ဘူး၊ pamphlet (လက်ကမ်း စာစောင်)မှာ ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူသုံးနေတာ တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ” ဟု ၎င်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ကရင်အမျိုးသားအလံ တော်သည် ၁၉၃၇ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူး ဥပဒေအရ တရားဝင်အလံ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ http://kicne ws.org/2020/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%
“၀” အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် COVID-19 ကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဆိုင်နပ်က
ပြောကြားသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် “၀”အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ “၀” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ဟိုပန်နှင့် မက်မန်းမြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒနယ်အပြည့်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကာ ကျန်မြို့နယ်များဖြစ်သော တန့်ယန်း၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းပျဉ်း၊ မိုင်းတုံတို့တွင်လည်း ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း နေရာ ၂၀ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ခွဲပြီး လှုပ်ရှားကြတာပေ့ါ။ ကျွန်တော်က မက်မန်းဘက်မှာကျတယ်။ တချို့အဖွဲ့တွေက ဟိုပန်တို့ တန့်ယန်းတို့ပေ့ါ။ အဓိကတော့ COVID-19 ကြောင့် သိပ်အလုပ်မတွင်ဘဲ နှောင့်နှေးတာပေ့ါ။ နောက်ပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးပေါ့။ ဒါက ခက်ခဲတယ်။ COVID-19 ရဲ့ အခြေအနေက သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ နောက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပေါ့။ တောင်ပေါ်ဒေသပေါ့။ တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တော့ ပါတီတွေလည်း သိပ်မများဘူးပေါ့။ မက်မန်းမှာ လေးဦးပေါ့။ ပြည်သူ တစ်ဦး၊ အမျိုးသား တစ်ဦး၊ ပြည်နယ် နှစ်ဦးပေါ့။ ရှမ်းရှေ့ ရှမ်းမြောက်များတယ်။ “၀”တိုင်းပေ့ါ။ နေရာပေါင်း ၃၀ နီးပါး လောက်ရှိမယ်ပေါ့။ UDP ခေါ်တဲ့ နှင်းဆီပါတီရယ်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နဲ့ NLD ပါတီပေါ့။ လေးပါတီရှိတယ်။ လုပ်လို့ရတာ တွေတော့ အကုန်လုပ်ပါတယ်။ ပိုစတာထောင်တာတို့ စီတန်းလှည့်လည်တာတို့ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေတာတို့ပေ့ါ။ မက်မန်း မှာလည်း တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာလှမ်းတော့ စီတန်းလှည့်လည်တာမရှိဘူး။ ပါတီဆိုတော့ ဒေသကိုအခြေခံတယ်။ မက်မန်း အနေနဲ့ နိုင်ခြေကတော့ ၅၀၊ ၅၀ ပါပဲ။ ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ ငါးဦးနဲ့ ခုနစ်ဦး ထင်ထားတာပေ့ါ။ ၂၀ ဦးမှာပေါ့။ တကယ် လို့ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် မူဝါဒမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှာ ဝင်ပါမယ်။ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်ဆိုရင် ဘယ်ပါတီနဲ့မဆို ကျွန်တော်တို့က ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်ပေါ့။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့ပဲ။ ဖွံ့ဖြိုး ရေးပဲ တောင်းဆိုတာများတယ်။ ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ၊ ပညာရေး အဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ဒီဘက်မှာ ဒါတွေပဲ မျှော်လင့်တယ်” ဟု “၀” အမျိုးသားပါတီ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဆိုင်နပ်က ပြောကြားသည်။
“၀” တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ ကွဲပြားနေလျှင် မဲမပေးတော့ဟု ပြည်သူလူထုတောင်းဆိုချက်အရ “၀” အမျိုးသား ပါတီ ကို “၀” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ “၀” အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ “၀” လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီတို့ကို ပူးပေါင်း၍ “၀” အမျိုးသားပါတီကို တည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် “၀” ပါတီပေါင်းစည်းရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး “၀” အမျိုးသားပါတီသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီအမှတ်စဉ် (၁၂၈) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/195427
ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(KNDP)၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရေး အတွက်ဝန်းရံကူညီအားဖြည့်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကရင်လူငယ်ကွန်ရက်(KYN) ဆက်သွယ်ချိတ် ဆက်ရေး တာဝန်ခံ စောသန့်သောင်(စဝ်သိုင့်သုဂ်)က ပြောသည်။ ၎င်းက “ပါတီစည်းရုံးရေးတွေဆင်းရင် ကျနော်တို့လိုက်သွားပြီး လိုအပ်တာကူညီပေးတယ်။ လူငယ်တွေကို လာ join ခိုင်းတယ်။ online နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Challenges ခေါ်တဲ့ (အက) Video clip တို့၊ ဓာတ်ပုံတို့နဲ့ ဝန်းရံလုပ်ဆောင် နေတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့က ပြောသည်။ KYN အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း အောက်တိုဘာ ၄ရက်နေ့မှ စတင်ကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ပြီးဆုံးသည့် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် နေ့အထိ ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီ KNDP အတွက် မြေပြင်တွင် လှုပ်ရှားဝန်းရံနေကြောင်း စောသန့်သောင်က ဆက် ပြောသည်။
ယင်းသို့ ကူညီပေးရခြင်းမှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပါတီများအောင်နိုင်ပြီး လွှတ်တော်များထဲတွင် ကရင့်အရေး အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးမည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် ကရင်ပြည်သူအသံများ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် ဝန်းရံ ပေးသွားမည်ဟု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကရင်လူငယ်ကွန်ရက် (KYN)က ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကရင်အမျိုး သား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(KNDP)ကို ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင်ပါတီ သုံးပါတီနှင့် ဖလုံစဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ပါတီဝင် တချို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ရက်နေ့တွင် တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
KNDP သည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၇ခုတွင် သံတောင်မြို့နယ်မှလွှဲ၍ ကျန်မြို့နယ် ၆မြို့နယ်တို့တွင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး လည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ Karen Youth Network – KYN ကို ကရင်၊ ကရင်နီ(ကယား)၊ မွန်ပြည်နယ်များ၊ တနင်္သာရီ၊ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီးများ၊ တောင်ငူ-သံတောင်၊ အထက်မြန်မာပြည် အပါအဝင် နယ်မြေဒေသ (၁၁)ခုမှ ကရင် လူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူငယ်ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80 %80%e1% 80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%8
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရပ်သားများ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမည့် အလားအလာများ မြင်တွေ့နေရပြီး မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း မဖြစ်ပေါ် စေရေးအတွက် တပ်မတော်နှင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) တို့အနေဖြင့် တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ပေးရန် ရှမ်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄၀ ကျော်နှင့် ဒေသခံများက တောင်းဆိုသည်။ တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ပေးရန် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌသို့ လိပ်မူ၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံများက အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် စာရေးသားပေးပို့ကာ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် RCSS တို့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစ၍ တိုက်ပွဲများဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်သည် COVID-19 ရောဂါကြောင့် ပြည်သူလူထုများမှာ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် စားဝတ်နေရေး စသည့်ကဏ္ဍများတွင် အထွေထွေအကျပ်အတည်းများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံများ က JMC-S ဥက္ကဋ္ဌ (ရှမ်း) သို့ ပေးပို့သော အပစ်ရပ်ပေးရန် တောင်းဆိုစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုသို့ အထွေထွေ အကျပ် အတည်းများ ကြုံတွေ့နေရသည့်အပြင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံများ၏ အသက်အန္တရာယ်အတွက်လည်း ထပ်မံပူပန်နေရ ပြီး တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူ ၂၆၀၀ ကျော် ရှိလာကာ အဆိုပါစာရင်းတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကလေးငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ယင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။မကြာမီကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးအား ရပ်တန့်ရွှေ့ဆိုင်းရမည့် အနေအထားနှင့် အရပ်သားပြည်သူများ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမည့် အလားအလာများ မြင်နေရပြီး မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း မဖြစ်ပေါ်စေရန် တပ်မတော်နှင့် RCSS တို့က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲ ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရန် ၎င်းတို့က တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံဝိုးကျေးရွာ၊ ခန့်ခဲရွာ၊ ကုန်းဟတ်ရွာ အစရှိသည့် ရွာများတွင် တပ်မတော်နှင့် RCSS တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါတိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံများမှာ သာသနိက အဆောက်အဦများတွင် လာရောက်ခိုလှုံ နေရ သဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အစိုးရက ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် အခက်အခဲ နှင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်းလည်း ပုံဝိုးရွာနှင့် ဟဲကွီရွာ ဒေသခံအချို့က JMC-S (ရှမ်း) ဥက္ကဋ္ဌ ထံ စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသော ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ မရပ်တန့်နိုင်ဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါက စစ်ဖြစ်ရာဒေသအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများနှင့် စီးပွားရေးများ ဆိုးရွား စွာထိခိုက်မှုရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ https://news-eleven.com/article/195523
မွန်တိုင်းရင်းသား အများစုနေထိုင်ကြသည့် ဘီလူးကျွန်းနှင့် ရေးမြို့ပေါ်တို့တွင် သောင်းနှင့်ချီသော မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ဝန်းရံသူလူငယ်များက အောက်တိုဘာလ (၁၂-၁၃ ) ရက်နေ့များတွင် လှည့်လည် အင်အားပြခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၏ အလံ၊ စတစ်ကာ၊ နဖူးစည်းနှင့် Mask များ ကိုယ်စီတပ်ဆင်၍ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ကား များဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်သီချင်းများဖွင့်လှစ်သီဆိုကာ မြို့ပေါ်နှင့် ကျေးရွာများသို့လှည့် လည်ကာ မွန် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စည်းရုံးမှုအင်အားကို ဝန်းရံပြသခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မွန်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက မွန်သတင်း အေဂျင်စီ သို့ ပြောသည်။ အထူးသဖြင့် မွန်လူငယ်များဆုံရပ် MYF မှ ဦးစီး၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် ကျေးရွာအသီးသီး ရှိ မွန်လူငယ်များက မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအား ဝန်းရံကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလဖြစ်နေ သည့်အတွက် မြို့နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သွားလာကူးလူးခြင်း မပြုကြဘဲ မြို့နယ်အတွင်းရှိ မွန်လူငယ်များက ဝန်းရံလှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ဘီလူးကျွန်းတွင် အဓိကပြိုင်ဖက်ဖြစ်နေကြသည်မှာ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ချောင်းဆုံမြို့နယ် အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ /၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ် ဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိထားသူ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဌ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးနှင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခဲ့ဖူးသူ NLD ပါတီဝင် လက်ရှိမွန်ပြည်နယ် စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းကျော်လွင်တို့က ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ ရေးမြို့နယ်တွင်လည်း အဓိက ပြိုင် ဖက်ဖြစ်နေသည့် မွန်ပါတီမှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး နှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်းတို့က ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပြန်လည်အရွေးခံကြမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မော်လမြိုင်ခရိုင် ၆ မြို့နယ်၌ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ(NLD)သာ အဓိကပြိုင်ဖက်များ ဖြစ်နေကြောင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။ http://burmese.mo nnews.org/2020/10/13/%e1%80%9e%e1%80% b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်တွင် အောက်တိုဘာလအတွင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(SNDP) ပါတီ ဆိုင်းဘုတ် ၂ နေရာ ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
မူဆယ်မြို့နယ် မန့်ဟိုင်းကျေးရွာနှင့် တာလုံ ကျေးရွာတွင် စိုက်ထူထားသည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ကြောင်း မူဆယ်မြို့ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် စိုင်းဘိုးအောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။“ ဖျက် ခံရတာ မန့်ဟိုင်းမှာ၂ကြိမ်၊ တာလုံမှာ ၂ ကြိမ် ဖျက်ခံရတယ်။ ပထမကြိမ် ဖျက်လို့ကျနော်တို့ ပြန်ထောင်တယ်။ ထပ်ဖျက် တယ်။ ဓားနဲ့လာခုတ်သွားတာပါ”ဟု စိုင်းဘိုးအောင် က ပြောသည်။ ထို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်ဆီးခံရသည့် နေရာသည် သျှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်သည့်နေရာ ဖြစ်သည့်အတွက် ပြဿနာ မဖြစ်စေလိုမှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကို မတိုင်ကြား ကြောင်း စိုင်းဘိုးအောင် ကပြောသည်။
“ကိုယ့်လူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာပဲ ကျနော်တို့ပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ပြောချင်တာကတော့ စိတ်ဓာတ် တွေပြုပြင်စေချင်တယ်”ဟု စိုင်းဘိုးအောင်က ထပ်လောင်းပြောသည်။ မူဆယ်ခရိုင်အတွင်း SNDP အနေဖြင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်နေရာကို ဒေါ်နန်းငွေငွေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေရာကို စိုင်းအောင်မြင့် က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် မူဆယ်မြို့ ပြည်နယ် အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်ကို စိုင်းဘိုးအောင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ် ကို နန်းဟန်နု က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://burme se.shannews.org/archives/18878
မြေယာအငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးဖြစ်တဲ့ ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်က ကရင်နီတောင်သူ တွေပေါ် နောက်ထပ် ပြစ်ဒဏ်ထပ်တိုးချမှတ်ပေးဖို့ တပ်မတော်က ပြင်ဆင်ချက် လျှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကယား ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်က ဒီကနေ့ ပလပ်လိုက်ပါတယ်။ တပ်မတော် အမြောက်တပ်ရင်း အမတ အမှတ် (၃၆၀) ကနေ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါဆိုရှေးတောင်သူ ၁၇ ဦးအမှုတို့ကို ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် တရားရုံးကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ်နဲ့ ငွေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာမှာ ချုပ်ရက်နဲ့ ပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီး စစ်တပ်ဘက်က မကျေနပ်လို့ တရားရုံးမှာ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ချက်တက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ခရိုင်တရားရုံးကိုတက်ရာမှာခရိုင်က ပလပ်လိုက်သလို ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှာ ထပ်မံ လျှောက်ထားခဲ့ရာမှာလည်း ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးအမိန့်ချရာမှာလည်း ပလပ်လိုက်တာလို့ တောင်သူတွေရဲ့ရှေ့နေ ဦးစောခူးတလေ က ပြောပါတယ်။“အမှုက ၆ မှုရှိမယ်။ ၄၄၇ နဲ့က ၄ မှု၊ နောက် ၆၁ နဲ့က ၂ မှု၊ အဓိကကတော့ ဒီ မူလ တရားရုံးက ချမှတ်တဲ့အမိန့်က တရားစီရင်ရေးကို တော်တော်ယိမ်းယိုင်စေတဲ့ အခြေအနေအထိမရှိဘူးပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဝင်ရောက်ပြီးမှ စွက်ဖက်ဖို့ မသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ အဲလိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှ စီရင်ချက်ချလိုက်တာ။”ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကနေပြီး အခုလို အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဟာ မှန်ကန်သင့်မြတ် ကြောင်းလည်း ဦးစောခူးတလေက ပြောပါတယ်။
မြေယာအငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွိုင်ကော်အခြေစိုက် အမြောက်တပ် ၃၅၆ တပ်ရင်းနဲ့ ခလရ ၂၅၀ တပ်ရင်းတို့ကလည်း ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးအပါအဝင် တောင်သူ ၁၈ ပေါ် နောက်ထပ် ပြစ်ဒဏ်ထပ်တိုးချမှတ် ပေးဖို့ တပ်မတော်က လျှောက်ထားတဲ့အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကယားပြည်နယ်တရားရုံးက ဩဂုတ် ၁၄ ရက်က ပလပ်ခဲ့ပါ တယ်။ လွိုင်ကော်နဲ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြေယာအငြင်းပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်က တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဒေသခံတောင်သူပေါင်း ၄၁ ဦး ရှိပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/417068
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်နှစ်ခုတွင် ပါဝင်နေသည့် ကျေးရွာအုပ်စု ၇စုကို မဲဆန္ဒနယ်မြေအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက် ရုပ်သိမ်းပေးရန် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ လက်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ စောချစ်ခင်က အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က အကြောင်းကြား တင်ပြထားသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင်ထံ ကေအိုင်စီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ စာရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါတင်ပြထားသည့် အကြောင်းကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာမဖတ်ရသေးကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့သည်။“လောလော ဆယ် အဲဒီစာက ရောက်တော့ ရောက်နေပြီး။ ကျနော်က အဲဒီစာ မဖတ်ရသေးဘူး။ ဝင်တဲ့အနေအထားပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲတော့ အဲဒါက မပြောတတ်သေးဘူး။ အချိန်စောနေသေးတယ်။ ကျနော်တို့လည်း စာကိုသေချာ ဂဃနဏ မဖတ်ရသေးတော့လေ။”ဟု ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင် နိုင်က ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။
ယင်းကျေးရွာအုပ်စု ၇ စုမှာ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)နှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် လှိုင်းဘွဲမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)တွင် ပါဝင်ပြီး ထိုဒေသတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ ရှိနေသည့်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိခြင်း၊ ကိုဗစ်ကြောင့် အချို့ကျေးရွာများတွင် ဝင်ရောက်ရန် ပိတ်ဆို့ခံရပြီး ကွင်းဆင်းစည်းရုံးရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လွန်စွာခက်ခဲခြင်း စသော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများ၏ တင်ပြချက်အရ မဲဆန္ဒနယ်မြေအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ရုပ်သိမ်းပေးရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တင်ပြထားသည့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၇ စုမှာ ရေတံခွန်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တာလယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝင်းစောကျေးရွာအုပ်စု၊ မဲလရောကျေးရွာအုပ်စု၊ သမိုကျေးရွာအုပ်စု၊ မိကြောင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ရင်းဘိုင်းကျေးရွာအုပ်စုများဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းဒေသအတွင်း စည်းရုံးရေးဝင်ရန်နှင့် မဲထည့်ရန် အသိပညာပေးမှု ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်ရေး ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဒေသခံအချို့ကို ကမ်းလှမ်းထားပြီး ကွင်းဆင်းရန် အစီအစဉ်ရှိသည့်အတွက် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းတွင် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-KNDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ သဘောထားမပါဝင်ကြောင်း ၎င်းမဲဆန္ဒနယ်၌ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် KNDP ဥက္ကဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆို သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%82%90%e1%8
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြာပင်ရင်းကျေးရွာအတွင်း အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီဝန်းကျင်အချိန် က လက်နက်ကြီး ကျရောက် ပေါက်ကွဲသည့်အတွက် ရွာသား ၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ အဆိုပါ လက်နက်ကြီး ထိမှန်သူများမှာ ပြာပင်ရင်းကျေးရွာသားမှာ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် ဦးမောင်မြထွန်း၊ အသက် ၅၆ နှစ် အရွယ် ဦးဘချို၊ အသက်၂၈ နှစ် အရွယ် ကိုမောင်မြခိုင်၊ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် ကိုသန်းစိန်မောင်တို့ ဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ကိုသန်းစိန်မောင်က “ကျနော်တို့ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီလောက်မှာ ပထမ ရွာထဲကို လက်နက်ကြီး တလုံးလာ ကျတယ်။ ကျနော်တို့ ရွာသားတွေက စာသင်ကျောင်းထဲမှာ စုပြီး ဝပ်နေကြတဲ့အချိန် နောက် ထပ် ၃ လုံး လာကျတယ်။ အဲဒီမှာ ကျည် အစ တွေ လာမှန်တာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော်နှင့် AA တို့သည် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်ကတည်းက ရသေ့တောင်မြို့နယ် ထီးဆွဲရွာအနီး စိုးမိုးကုန်းများ သိမ်း ပိုက်နိုင်ရေးအတွက် အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲများဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြာပင်ကျေးရွာသားများက ၎င်းတို့ ရွာထဲသို့ ကျရောက် သည့် လက်နက်ကြီးကျည်ဆန်များမှာ ရသေ့တောင် အခြေစိုက် တပ်မတော် တပ်ရင်းများမှ ပစ်ခတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြော ဆိုသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီမှ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန်းအား အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ် သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရရှိခဲ့ပါ။ ဒဏ်ရာ ရရှိသူများကို သွားရောက် သယ်ဆောင်ပြီး ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူ ရသေ့တောင်မြို့ခံ ကိုဘက္ကာက “ဒဏ်ရာ ရသူ ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာ ပြင်းတယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့ စက်လှေနဲ့ ရသေ့တောင် ဆေးရုံကို ပို့ ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ လက်နက်ကြီး ထိမှန်ခဲ့သူ ပြာပင်ရင်း ကျေးရွာသား ၄ ဦးမှာ ဦးခေါင်း၊ ဝမ်းဗိုက်၊ ခြေထောက်၊ လက်မောင်း စသည့် နေရာများတွင် လက်နက်ကြီးအစအန ထိမှန်သည့်ဒဏ်ရာများဖြင့် ရသေ့တောင် ဆေးရုံ၌ တက်ရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူ နေရကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယမန်နေ့က ရသေ့တောင်မြို့နယ် ထီးဆွဲကျေးရွာအနီး AA တပ်ဖွဲ့များ စိုးမိုးထားသည့် တောင်ကုန်းများကို တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်း၊ AA တို့ အောင်သာစည်၊ ကျောက်တန်း စသည့် ကျေးရွာများဘက်သို့ ဆုတ်ခွာသွား ကြောင်း၊ ၎င်း ကျေးရွာများကို AA တို့က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း တပ်မတော်နှင့် AA တို့၏ တိုက်ပွဲကြောင့် ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်တို့တွင် စစ်ရှောင် အရေအတွက် ၃ သောင်းကျော် ထပ်မံတိုးပွားလာကာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်များတွင် စစ်ရှောင် အရေအတွက် ၂၂၀၀၀၀ ကျော်ထိ များပြားလာကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ် များ အစည်းအရုံး (REC) က အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news /2 020/10/4/231634.html
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရေမဲပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် ပါတီနှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များကိုသာ မဲပေးမည် ဟု တစ်နှစ်ကျော်ကြာ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြစ်နေဆဲ ဖားအံမြို့၊ သံလွင် မြစ်အနောက်ဖက်ခြမ်း ရှိ ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင် များက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ရေတွင်းကုန်း(ကောဝ်ထိုင့်ဍာ်)ရွာမှ နန်းထူးလိုင်က “ရေသန့်ဝယ်သောက်ရတာ ၁ နှစ်ပြည့် သွား ပြီးပေါ့။ ရွာက ရေတွေဟာ ဟိုးအရင်ကအတိုင်းပြန်သန့်လာပြီးတော့ တသက်လုံး ပြန်သောက်သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးနိုင် မယ့် လူကို မဲထည့်ပေးမယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင်ပြောသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းက ဘားကပ်၊ အောက်ကော့ရင်း၊ ရသေ့ပျံ၊ ပန်းကုန်း စသည့် ကျေးရွာအုပ်စုများ အ တွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် ဒေသခံများအသုံးပြုသောက်သုံးနေသော သောက်သုံးရေကန်၊ ရေတွင်းများအတွင်းပုံမှန် မဟုတ် သည့် ရေများမဲနက်လာခြင်းနှင့်အတူ ငါးများသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ လက်ရှိအချိန်အထိလည်း ဖားအံမြို့နယ်၊ အနောက်ဖက်ခြမ်းဒေသရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၇ ရွာကျော် တို့တွင် ၁ နှစ် ကျော် ကြာ သောက်ရေသန့်များကိုသာ ဝယ်သောက်နေရဆဲဟု ရေတွင်းကုန်းရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး စောငွေလွန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြော သည်။ နတ်ကုန်းရွာမှ လူငယ်တစ်ဦးကလည်း “ကျနော်တို့ ဒေသမှာ အခုထိကြုံတွေ့နေရတာကတော့ ရေကိစ္စပေါ့နော်။
သောက်သုံးလို့ရ၊ မရ အာမခံတဲ့ Data အဖြေ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ မတွေ့ရသေးဘူး။ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာရင် အစိုးရ သစ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုတာဝန်ခံ လုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်။ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကိုပဲ ရွေးချယ် မဲပေးသွားမှာပါ။” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အစိုးရဌာန တာဝန်ရှိသူအချို့မှ ရေများသည် သောက်သုံး၍ရကြောင်း ထိုရွာများအတွင်း စာကပ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်းများရှိခဲ့ သော်လည်း ရေရှည်တွင် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်လာပါက တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံဖြေရှင်းပေးမည့်သူမရှိသဖြင့် သောက်မရဲသေး ကြောင်းလည်း ဒေသခံများက ပြောဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါ ရေမဲမှုဖြစ်ပွားသည့်ဒေသတွင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ၏ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၃ ရပ်၌ ပါတီ ၉ ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၃ ဦးအပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုစုပေါင်း ၃၃ ဦး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု သိရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော KNDP ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ရှိပါက ရေမဲပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု ပြည်နယ် လွှတ်တော်၊ ဖာပွန်အမှတ်(၂) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နော်သဇင်တုပ်က ဖြေကြားသွားခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020 /10/%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%b 2%e1%80%
ဖားကန့်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဌအသစ်တင်မြောက်ရာတွင် တရားမျှတမှုမရှိသောကြောင့် ကန့်ကွက်ရှုံ့ချ ကြောင်း ဖားကန့်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က တင်ပြထား သည်ဟုသိရသည်။ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌနေရာ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ ဖားကန့် မြို့ပေါ် ၅ ရပ်ကွက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည်စုံသည့် ၈ ဦးအား ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီများရှေ့၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ဦးနော်ဆန့် ၃ မဲ၊ ဦးမင်းမင်စိုးနှင့် ဦးမြင့်အေး ၂ ဦးက တန်းတူ ၂ မဲစီ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရွေးချယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
မဲအများဆုံးရရှိသူ ဦးနော်ဆန့် က ဥက္ကဌရာထူးနေရာကို ဆက်ခံရမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ ၂မဲ သာရရှိသော ဦးမင်းမင်းစိုးကို ဖားကန့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သောကြောင့် ဒေသခံတစ်ချို့က ကန့်ကွက်နေကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံ ဦးလမောင်လတောင် က ယခုလိုပြောဆိုသည်။“အခုသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံက မဲများဆုံးရရှိသူကို ဥက္ကဌ မခန့်ဘဲ ၂မဲသာရရှိတဲ့သူကိုမှ ဥက္ကဌ ပြန်ခန့်လိုက်တယ် ဆိုတာက တရားမျှတမှုမရှိဘူဆိုတာ အရမ်းပေါ်လွင်နေတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါကို ဒီမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတစ်ချို့က သဘောမတူဘဲ ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ ၃မဲနဲ့နိုင်တဲ့ ဦးနော်ဆန့်ကို ဥက္ကဌ မခန့်အပ်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကိုသိချင်တယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။ လက်ရှိ ဖားကန့်မြို့နယ်စည်ပင်ဥက္ကဌအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည့် ဦးမင်းမင်းစိုး မှာ NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ဖားကန့် မရှီကထောင်ရပ်ကွက် စီးရုံးရေးမှူး ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးလမောင်လတောင်က ပြောဆိုသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ် စည်ပင်ကော်မတီ ဥက္ကဌအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ရန် ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏ မဲရလဒ်နှင့်အမည်စာရင်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရထံသို့တင်ပြခဲ့ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးမင်းမင်းစိုးကို ဥက္ကဌအဖြစ်ခန့်အပ်ရန်နှင့် ဦးနော်ဆန့်ကို အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်သာ ပြန်လည်ခန့်အပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရွေးချယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦး Tangbau La Seng က ပြောသည်။“သူရဲ့ ဥပဒေအရဆိုရင်တော့ မဲပိုများတဲ့သူကို ဥက္ကဌ ခန့်ရမှာတော့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ရွေးချယ် ပြီးစီးကြောင်းကို ပြည်နယ်အစိုးရကို တင်ပြခဲ့တယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရကနေ ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ပြန်ပြီးစီစစ်လည်းတော့ မသိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ၃မဲနဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့ ဦးနော်ဆန့်ကိုဘဲ ဥက္ကဌအဖြစ်ထင်ခဲ့တာ။ အခုက အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။
မဲများတဲ့ သူကိုကအဖွဲ့ဝင်စာရင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။ ၂မဲသာရရှိတဲ့ သူကိုက ဥက္ကဌ ပြန်ခန့်တယ် ဆိုတာက ကျနော်တို့ လည်း နားလည်ရခက်နေတယ်။ အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ ဒေသခံတွေကြား အချင်းချင်းပြောစရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း ဒါကိုသေသေချာချာ ဖြေရှင်းပေးသင့်တယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။ မဲအများဆုံးရရှိသော ဦးနော်ဆန် ကို ဥက္ကဌနေရာမပေးဘဲ ၂ မဲရသော ဦးမင်းမင်းစိုးကို ဥက္ကဌ ခန့်သည့်ကိစ္စကို ဖားကန့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း တချို့က ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ https://b urmese.kachinne ws.c om/2020/10/13/l1-
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ၁၀ ရက်ခန့်အကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့သော ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ နမ့်မဟင်ရွာတွင် ရွာသား များ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေစဉ် နေအိမ်များ မွှေနှောက် ခံရကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။ အောက်တို ဘာလ ၁၄ ရက်က စစ်ရှောင်ရွာသားများ နေအိမ်ခဏတဖြုတ်ပြန်သွားကြည့်ရာ ရွာလုံးကျွတ်နေအိမ်များ ထိုသို့ မွှေနှောက်ခံ ထားရသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း စစ်ရှောင်ရွာသူတဉီးကပြန်လည်ပြောပြသည်။“တိုက်ပွဲငြိမ်နေလို့ကျမတို့ တအိမ်တယောက် ၂ ယောက် လူစုပြီး အိမ်ပြန်သွားကြည့်တယ်။ ဗမာစစ်သားတွေရွာထဲမှာရှိနေတုန်းဘဲ။ ကျမတို့ကျွဲနွားဝက်တွေကို သူတို့ သတ်စားကြတာ ရွာအ၀င်ကတည်းက အရိုးတွေ အသေတွေအကြွင်းအကျန်တွေ တွေ့ရတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ မွှေနှောက် ခံထားရတယ်ကျမတို့အိမ်တွေ။ အိမ်တိုင်းနီးပါးဘဲ။ ကျမတို့အကြာကြီးမနေရဲကြဘူး ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုအမြန်ပြန်လာကြ တယ်”– ဟု စစ်ရှောင်ရွာသူက သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောပြသည်။
တာလုံရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းရှိရာ တာလုံရွာအသွားလမ်းတွင်ရှိ စစ်ဒဏ်သင့် နမ့်မဟင်ရွာသည် အိမ်ထောင် စု ၃၅ စု ၊ လူဉီးရေ ၁၅၀ ကျော်ရှိပါသည်။လက်ရှိတွင် ရွာလုံးကျွတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်စစ်ရှောင်ခိုလှုံနေကြရကြောင်း စစ် ဘေးရှောင်များအား အစားအသောက်အသုံးအဆောင်သွားရောက် ကူညီထောက်ပံ့သော ကျောက်မဲမြို့ခံ အလှူရှင် လူငယ် အဖွဲ့က သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။ အဆိုလူငယ်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်လူငယ် တဉီးက “တိုက်ပွဲမရှိတော့လို့ ရွာပြန်နေ ကြဖို့ စစ်တပ်က ရွာသားတွေကိုခေါ်တာ။ အဲတာရွာသားတွေက ရွာပြန်အခြေအနေကြည့်တော့ ကျနော်တို့ပါလိုက်သွား တယ်။ အိမ်တိုင်းလိုလို ပစ္စည်းတွေ အစားအသောက်တွေကိုမွှေနှောက်ထားတာ ရွာထဲမှာ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ရောယူနီဖောင်း ၀တ်တွေနဲ့ရော ဗမာစစ်သားတွေရှိနေတယ်။ ရွာလမ်းတချို့ထဲဆို သူတို့ပေးမ၀င်ဘူး ရွာသားတွေကို။ မိုင်းဗုံးတွေ ထောင်ထား တယ်။ အဲ့ကြောင့်ရွာသားတွေရော ကျနော်တို့ပါအမြန်ပြန်ထွက် လာတယ်။”ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။
တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွါးသည့်အဆိုပါ နမ့်မဟင်ရွာ၊ ခန်ခိုင်းရွာ၊ လုံဝိုင်၊ နားဖင့်၊ နားအော်၊ နားချမ် ရွာများအတွင်း အစိုးရတပ်မတော် တပ်မ ၂၂၊ ၇၇၊ ၈၈ လက်အောက်ခံတပ်များအပြင် ခမရ ၅၀၁ တပ် စုစုပေါင်း ၁၀ တပ်ရင်းထက်မနည်း လှုပ်ရှားနေကြောင်း စစ်ရှောင်ရွာသား ပြောပြချက်အရသိရသည်။ အစိုးရတပ်မတော်သည် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ အပစ်ရပ်ကြောင်း ကြေညာပြီးနောက်တရက် အဆိုပါဒေသတွင်လှုပ်ရှားနေသော RCSS/SSA တပ်များအား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ပစ်ခတ် မှုများကြောင့် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်မားနေချိန် စစ်ဘေးရှောင်ရွာသား ၃၅၀၀ ကျော်အထိရှိလာပြီး ကျောက်မဲမြို့ရှိ ဘုန်းကြီး ကျောင်း ၇ ကျောင်းတွင် စစ်ရှောင်ခိုလှုံနေခဲ့ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18899
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ အသက်မပြည့်သေးသူ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအား မုဒိမ်းမှုကျူး လွန်ခဲ့သည့်အပေါ် ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် ကန်ပက်လက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်နေ့က ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကာ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကန်ပလက်မြို့၊ အမှတ် (၁) မြို့မရပ်ကွက်နေ အသက်(၁၇) နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ကန်ပလက်မြို့ ၊ မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ(၁၃)ရက်နေ့က အလိုမတူပဲအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီး အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ သော်လည်း ချက်ခြင်းလက်မခံခဲ့ကြောင်း ယင်းအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသော ခေါ်နူးစုမ်ကျေးလက်ဒေသ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (KRDO) မှ ဦးကီးဘူ ကပြောသည်။“ အဓိကဒီသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို အမှုဖွင့်ပေမယ့် အမှုကိုတော်တော်နဲ့ မဖွင့်ပေးဘူး ၊ နောက်တခုက သူတို့ပိုက်ဆံနဲ့ကျေးအေး ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ပြစ်မှုကျုးလွန်တဲ့သူကရဲဆိုတော့ ရဲတွေအနေနဲ့ ဒီဟာကို သေချာဥပဒေအတိုင်း ကိုယ်တွယ်မှုအားနည်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်”ဟု ဦးကီးဘူကပြောသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးကို စောင့်ရှောက်ရမည့်အစား လူသားမဆန်စွာ အသက်မပြည့်သေးသည့် ကလေးသူငယ်အား မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်းသည် ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်း တရားဥပေဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ လုံခြုံရေးကို အလွန်စိုးရိမ်မိကြောင်း ကန်ပက်လက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယခုကဲ့သို့ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူနှင့် ငွေကြေးအသုံးပြုပြီး အမှုကိုဖုံးဖိရန် ကြိုးပမ်းသူများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရန်နှင့် ပြည်သူလူထု၏ လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိစေရေးအတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့် ပြစ်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်သူ များအား ကလေးသူငယ် ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဆင့်ဆင့်သို့ ကန်ပက်လက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုထားသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ကန်ပလက်မြို့ အမျိုးသမီး အဖွဲ့၊ လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့တို့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်တွင်ကန်ပလက်မြို့ ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်နေကြောင်းသိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76292
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ် ဇီးတောတောရဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိနေတဲ့ ပလက်ဝ မြို့နယ်က ရဟန်းတစ်ပါး၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲက အသက်မပြည့်သေးသူ နှစ်ဦး နဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကို အောက်တို ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရဲက ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် က RFA ကို ပြောပါတယ်။ ပလက်ဝမြို့နယ် သူဌေးကုန်းကျေးရွာက အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မောင်ကျော်ဇော်လှ၊ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မောင်သန်းဝင်း၊ အသက် ၂၀ အရွယ် မောင်နေဆန်းဦးနဲ့ အဲဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ ရဟန်းတော် ဦးပညာသာမိတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဲဒီနေ့ညနေပိုင်းက စစ်တွေမြို့ကိုပြန်လာမယ့် ကျောင်း ထိုင် ဆရာတော်ကို ကြိုဖို့သွားစဉ် လမ်းမှာစစ်ဆေးရေးလုပ်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီး အဖမ်းခံခဲ့ရ တာလို့ မောင်ကျော်ဇောလှရဲ့ အမေ ဒေါ်ဘီချာဘီက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ မောင်ကျော်ဇော်လှဟာ ၈ တန်းတက်မယ့် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ မောင်သန်းဝင်းဟာလည်း ၉ တန်း တက်မယ့် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မောင်နေဆန်းဦးကတော့ သာမာန်လက်လုပ်လက်စားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ရွာအနီးအနားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကတည်းက မိသားစုနဲ့အတူ အဲဒီ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကို ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း သူဆိုပါတယ်။ သူတို့ကိုဘာကြောင့် ဖမ်းဆီးသွား တယ်ဆိုတာကို မသိရသလို အခုအချိန်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ အဆက်အသွယ်လည်း မရသေးတဲ့အတွက် စိုးရိမ်နေကြပြီး အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ ရဲစခန်းတွေကို ဆက်သွယ်ပေမယ့် တစ်စုံတစ်ရာ မသိရသေးဘူး လို့လည်း ဇီးတောတောရကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးခေမာစာရက RFA ကို မိန့်ပါ တယ်။
အခုလို စစ်ဘေးဒုက္ခသည် သုံးဦးနဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးကို ဖမ်းဆီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်ဘက်ကို RFA က ဆက် သွယ်မေးမြန်းနေဆဲပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ တပ်တော်မတော်က အခုလိုအရပ်သားတွေကို အေအေအဖွဲ့ဝင် ဒါမှမဟုတ် အေအေ အမာခံတွေဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးတာ ၂၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင် သူ များအဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းအရ သိရပါတယ်။ RFA က စုဆောင်းရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၉ နှစ်ဆန်းပိုင်းကနေ ဒီနေ့အချိန်အထိ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ် သေဆုံးသွားသူ စုစုပေါင်း ၃၂ ဦး အထိရှိပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/soldiers-arrest-three-young-men-and-one-monk-in-sittwe-10152020055009.html
ပလက်ဝမြို့ ကို ဆန်အိတ် ၁၇၀၀ အိတ်အပြင် အခြားစားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကုန်ပစ္စည်း အချို့ကို ကုန်တင်ကားအစီး ၂၉ စီးနှင့် တပ်မတော်လုံခြုံရေးယူကာ ပို့ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ကပြောသည်။
စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “မနေ့ကတည်းက စပို့နေတယ် ရောက်တာတော့မရောက်သေးဘူး လမ်းလုံခြုံရေး အခြေအနေ အရ ဖြည်းဖြည်းဘဲ သွားနေရတော့ ဒီနေ့တော့ ရောက်မယ်ထင်တယ် ဒါမှမဟုတ် မနက်ဖြန်တော့ ရောက်မယ်ထင်တယ် ဒီနေ့ရောက်အောင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကား ၁၂ စီးနဲ့ ဆန်အိတ် ၁၇၀၀ ပါတယ် နောက်ပြီး ဒေသ ကုန်သည်တွေ ဆောက်လုပ်ရေး ကိစ္စအတွက် ဘိလပ်မြေ သံ၊ သံချောင်း အပြင် အခြား စားနပ်ရိက္ခာအပြင် အဝတ်အထည်တွေလည်း သည်သွားတယ် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ကား ၁၇ စီးနဲ့သယ်တယ် စုစုပေါင်း ကားအစီး ၂၉ စီးနဲ့သည်သွားတယ်”ဟုပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကပ်ဘေးနှင့် စစ်ပွဲတို့ကြောင့် အသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့် အတွက် ရောင်း စရာ ဆန်မရှိတော့ဘဲ စားသောက်ကုန်များ၏ ဈေးနှုန်းမှာလည်း အဆမတန် မြင့်တတ်သွားခဲ့ပြီး ဒေသခံများ အခက်ခဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရသည်။ လက်ရှိပလက်ဝမြို့နယ်ကို ပို့ပေးသည့် ဆန်များကို ပြည်ထောင်စု လူကယ်ပြန်မှ ထောက်ပံ့ပေးသည့် ဆန်အိတ် ၇၅၀ အိတ်ပါဝင်ပြီး ကျန် ၉၅၀ အိတ်ကို ပြည်သူလူထု လှူထားသည့် ပိုက်ဆံဖြင့်ဝယ်ယူထား ကြောင်းလည်း စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ကပြောသည်။ https://www.chinworld.org/2020/10/13/%e1%80%95 %e1%80%9c% e1%80%80%e1%80%ba%e1%80
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်း RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ရှောင် ၃၅၀၀ ဝန်းကျင် ရှိလာကြောင်း လူမှု ပရဟိတ အဖွဲ့များထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည် တပ်မတော်(RCSS/SSA)နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲများငြိမ်နေသော်လည်း ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ကအထိ စစ်ရှောင်ရွာသားများ ထပ်မံရောက်ရှိလာကြောင်း ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း (နောင်ပိန်)မှ စိုင်းနေအောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။“တိုက်ပွဲက တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်ကြောင်း တွေ က ကျေးရွာကိုဖြတ်ပြီးသွားလာနေတော့ သူတို့ကြောက်လို့ ရှောင်လာတာ ပါ။ စစ်ရှောင် အားလုံး ၃၅၀၀ ကျော်ရှိပြီ” ဟု စိုင်းနေအောင် က ဆိုသည်။
အဆိုပါ စစ်ရှောင် ၃၅၀၀ ကျော်သည် ကျောက်မဲမြို့နယ် တောင်ထိပ်ရွာမှ ၆၄၈ ဦး၊ နားဆောင်း ရွာသား ၁၇၀ ဦး၊ ပုံဝိုးကျေးရွာ ၇၁၈ ဦး၊ ကွန်ဟင်ကျေးရွာ ၃၉၇ ဦး၊ ကောင်းလန်းကျေးရွာ ၂၈၆ ဦး၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာ ၃၈၆ ဦး၊ နောင်ကွမ်ကျေးရွာ ၉၅ ဦး၊ ဟဲကွီကျေးရွာ ၁၂၅ဦး၊ ကောင်းမှူးခံ ကျေးရွာ ၂၅၀ ဦး နှင့် အုမ်ဟစ်ကျေးရွာတွင် ၄၃၀ ဦးတို့ ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ရပ်ရွာများအတွင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားစခန်းချသော အစိုးရတပ်မတော်သည် ယနေ့ချိန်ထိ တပ်ဆုတ်ပေး ခြင်းမရှိသဖြင့် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးမည်ကို စိုးရိမ်ရကြောင်း စစ်ရှောင်များက ပြောသည်။ “ တိုက်ပွဲကတော့ငြိမ် နေတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ကြောင်းတွေက ရွာနားမှာရှိနေသေးတယ်။ ကျနော်တို့ မပြန်ရဲသေးဘူး။ နောက်ထပ်အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ပြန်မယ်” ဟု ပုံဝိုးကျေးရွာတွင် စစ်ရှောင်နေသည့် အမျိုးသားတဦးက ပြောသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုကြောင့် လူစုလူဝေးခြင်း ခရီးသွားလာခြင်းများကန့်သတ်ထားသဖြင့် အလှူရှင်များကူညီထောက်ပံ့မှု ပေးရန် မလာနိုင်သောကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ နေထိုင်စားသောက်မှု အစစအရာရာ အခက်အခဲရင်ဆိုင်နေ ရကြောင်းလည်း စစ်ဘေးရှောင်များကို ကူညီသည့်အဖွဲ့များက ပြောသည်။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ရန် ရက်ပေါင်း ၂၄ ရက်သာကျန်နေသည့်အချိန်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အသီးသီး မဲဆွယ်နေသည့် ကာလ လည်း ဖြစ်သဖြင့် စစ်ရှောင်လူထု နေရပ်ပြန်နိုင်ရန် အစိုးရတပ်မတော်အနေဖြင့် တပ်ဆုတ်ခွာပေးရန်လည်း လူထုက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလကလည်း သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းနောင်မြို့နယ် အတွင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSPP/SSA)နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်သဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည် ။https://burmese.shannews.org/ar chives/1 8886
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) တို့အကြားဖြစ်ပွားနေသော စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် မကျင်းပနိုင်မည်ကို အထူးစိုးရိမ်မိသည် ဟု ခူမီးချင်းမျိူးနွယ်စုအဖွဲ့အစည်းများက အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစ၍ ယနေ့ချိန်ထိ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့် တပ်တော်(AA) အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့် ရွေးကောက်
ပွဲအပေါ် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားမည်ကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေစိုက် ခူမီချင်းမျိူးနွယ်စုအဖွဲ့အစည်း (၇) ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခူမီးချင်းမျိူးနွယ်စုများရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ (KACC) မှပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုစောမြက “ကျနော်တို့နယ်မှာ အေအေ တွေလည်း လှုပ်ရှားနေတုန်းဆိုတော့လေ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေလည်း ကောင်း ကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေးမှုတွေလည်း ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တွေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းနှောင့်နှေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ အစိုးရတပ်ဖက်ကလည်း သွားလာဖို့ လုံခြုံရေးအရ ကန့်သတ်ထား တာတွေရှိတယ် အဲဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မှာကို ကျနော်တို့အထူးစိုးရိမ်မိတယ်’’ဟုပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ချင်းပြည်နယ်တွင် မဲဆန္ဒရှင်အများဆုံးရှိသည့် မြို့နယ်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၆၂၈၄၅) ဦးရှိသည်ဟု ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှ ဒုတိယအကြိမ်မဲ စာရင်းကြေညာချက်အရသိရသည်။ လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၅) ခုရှိသည့် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် နိုင်ငံရေးပါတီ (၆) ခုမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၄ ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
“ တကယ်လို့ ပလက်ဝမြိ့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုကပျောက်သွားမယ်၊ ပလက်ဝနယ်က ချင်းပြည်နယ်လူဦးရေရဲ့ ၅ ပုံ ၁ ပုံက ပလက်ဝနယ်မှာရှိတယ်၊ အဲဒီ ၅ ပုံ ၁ ပုံသော ကိုယ်စားပြုမှုကို ပျောက်သွားမယ် ပြီးတော့ စစ်မက်ဖြစ်ပွားတာလည်းပိုစိုးသွားနိုင်တယ် ဘာလို့လည်းဆိုရင် ပြောပေးဆိုပေးဖို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့လေ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုလည်း တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းတော့ ကျသွားနိုင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတောင် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိူးလေ နောက်တစ်ခုက အော် ငါတို့ကိုကျတော့ ဝိုင်းဖယ်ခံရပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိူးလည်းဝင်သွား နိုင်တယ်လေ’’ဟု ကိုစောမြ ကပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76293
အခုလို ကပ်ဘေးကာလ လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ထိုးစစ်တွေ ချက်ချင်းရပ်ဖို့ တပ်မတော် ကို Free Burma Rangers အဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ NLD အစိုးရအနေနဲ့လည်း ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေး နွေးရေး အမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အခုလို ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မနေ့ကစလို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ကို တပ်မတော်ရဲ့ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ပွဲတွေကြောင့် တစ်ပူပေါ် နှစ်ပူဆင့်ဆိုသလို ဒေသခံ ၁,ဝဝဝ ကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက် နေတဲ့ Free Burma Rangers အဖွဲ့ တည်ထောင်သူ David Eubank က – လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ ဒီတိုက်ပွဲတွေ ချက် ချင်းရပ်ဖို့ တပ်မတော်ကို တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်က တိုက်ခိုက်နေတာတွေ ရပ်စဲစေလိုပါတယ်။ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုတွေ၊ တပ်အင်အားတွေ တိုးမြှင့်ပြီး၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်တွေ ထိခိုက် သေကျေအောင် လုပ်နေတာတွေကို ရပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်ထဲမှာပဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေလို အရပ်သား တွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်က စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျုးလွန်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ သိမ်းကျုံးပစ်ခတ်မှုတွေ ခြေလျင်တပ်တွေရဲ့ တိုက် ခိုက်မှုတွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကျုးလွန်ခဲ့တာပါ။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျုးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှု မြောက်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အခြေအနေတွေကို ပိုပြီးတော့သာ ဆိုးရွားလာစေပါတယ်။”“ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေအားလုံး ရပ်ဆိုင်းထားဖို့”ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် အန်တိုနီယို ဂုတားရတ်စ်က ဒီနှစ် မတ်လက တိုက်တွန်းထားတာပါ။
ဒီတိုက်တွန်းမှုကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ တပ်မတော်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် တရားဝင်ကြေညာထားတဲ့ AA အဖွဲ့လှုပ်ရှားရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တော့ မပါဝင်ခဲ့သလို၊ AA အပါအဝင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ကလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာထားပြီး၊ တိုက်ခိုက်လာရင်တော့ ခုခံစစ်လုပ် သွားမယ် လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။ vFree Burma Rangers အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသတွေမှာ လူသားချင်းစာနာမှု ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတာ ၂၇ နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ Free Burma Rangers အဖွဲ့ ခွဲ ၁ဝဝ ကျော် သင်တန်းပို့ချပြီးဖြစ်သလို၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း အဖွဲ့ခွဲပေါင်း ၃ဝ ကျော် ရှိပါတယ်။ အခုလို ကပ်ဘေးကာ လမှာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သူတွေ အထူးသဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက်မှုပေးနိုင်အောင်လည်း အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့ Free Burma Rangers အဖွဲ့က ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/Free-Burma-Rangers-calls-to-end-fighting-in-
၂၀၂၀ ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မတူကွဲပြားမျိုးနွယ်စု များ၏ ပြဿနာကို သဟဇတဖြစ်စေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း ကမန်အမျိုးသားတိုး တက်ရေးပါတီမှ ထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်လှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။ “ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီအနေနဲ့ သံတွဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကသော်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သော်လည်းကောင်း အနိုင်ရခဲ့လို့ရှိရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးစုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းလိုစိတ်၊ ဆောင်ရွက် လိုစိတ် ကျနော်တို့ ကမန်မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အကျပ်အတည်းကို ပါဝင်ပူး ပေါင်းဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ဒေသခံတွေက တာဝန်ပေးလာလို့ အောင်နိုင်မှုမျိုးသာရှိမယ်ဆိုရင် ဒီတာဝန်ကိုထမ်း ဆောင် သွား မယ်ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ဦးတင်လှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ပါတီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့နယ်အတွင်းမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)နေရာနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်နေရာ အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တာမွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တို့တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာစီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီသည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ်နှင့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ငွေကြေး အခက်ခဲ အရ မဲဆန္ဒနယ်လျှော့ချခဲ့ရ ကြောင်း ဆိုသည်။
ပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် သံတွဲမြို့နယ်တွင် ကမန်တိုင်းရင်းသား တစ်သောင်း ကျော်ရှိပြီး ကမန်လူမျိုး များအနေဖြင့် ပါတီအားမဲပေးမည်ဆိုပါက အနိုင်ရရှိနိုင်ကြောင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်လှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် က တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရာတွင်လည်း သံတွဲမြို့နယ်မှ ကမန်ကျောင်းသားများအား “ဘင်္ဂလီ”ကျောင်းသား များဟုဆိုကာ ပညာရေးဌာနမှ စာရင်းထုတ်ပြန်ပြီး သီးခြားစာမေးပွဲဖြေဆိုခိုင်းခဲ့ခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ကမန်လူမျိုးများ က ပြောသည်။ ထိုသို့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးမရှိစေချင်သည့်အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊မီးလင်းရေးတို့တွင်လည်း တန်းတူ ညီမျှဖြစ်စေချင်ကြောင်း ကမန်အမျိုးသားပါတီအား ဝန်းရံထောက်ခံသူ မဆောင်းနှင်းဝေက ဆိုသည်။
ကမန်လူမျိုးများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာအား ကိုးကွယ်ကြသော်လည်း ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည် နယ် စစ်တွေ၊ ရမ်းဗြဲနှင့် သံတွဲမြို့နယ်တို့တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး တချို့မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အရေး အခင်းနောက်ပိုင်းတွင် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ http://www .mizzimaburmese.c om/article/74452
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ်က NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဖမ်းထားတာ ၁ ရက်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပေမယ့် ဘာသတင်းမှမကြားသေးတာကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို မိသားစုတွေက စိုးရိမ်နေကြပါ တယ်။ အဖမ်းမခံရဘဲ လွတ်လာသူတွေက AA ဘက်က ဖမ်းသွားတာလို့ပြောပေမယ့် ရခိုင့်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကတော့ ဒီကိစ္စကို ဘာသတင်းမှ မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒေါ်နီနီမေမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ချစ်ချစ်ချော နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ် တော်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဦးမင်းအောင်တို့ သုံးဦးကို မဲဆွယ်သွားနေတုန်း တောင်ကုတ်မြို့နယ် ဖောင်းခါးကျေးရွာမှာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မယ်သီက သမီးဖြစ်သူရဲ့ အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ “အမေကြီးက သမီးပဲအားကိုးရတယ်လေ။ အားကိုးရပြီး သူလုပ်ချင်တာ ကို ခွင့်ပြုထားတာ။ အခုလို အခက်အခဲဖြစ်လာတော့လည်း အားကိုးစရာမရှိဘူးပေါ့။ လူကြီး သူကြီးတွေကိုလည်း အန်တီ တောင်းပန်ပါတယ်။ ပါတီက သမီးနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း အမြန်ဆုံးလွတ်စေချင်တယ်။ အခုဖမ်းဆီးသွားတဲ့ အဖွဲ့က ကလေးတွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ညီအကိုမောင်နှမတွေလို သဘောထားပြီး ဒီကလေးတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ် ပေးပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်” ဒေါ်နီနီမေမြင့်ရဲ့ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ကိုလင်းနိုင်ကတော့ ဇနီးရဲ့ သတင်း ခုထိဘာမှ မသိရသေး တာကြောင့် စိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဦးမင်းအောင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မြတ်ဝတ်ရည်ကတော့ နေထိုင်မကောင်းတာ ကြောင့် RFA ကို ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အဖမ်းခံရတဲ့စဉ် အတူရှိနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ NLD ပါတီဝန်းရံသူတွေဖြစ်တဲ့ မအေးအေးနိုင်၊ ကိုသန့်ဇင်ဖြိုးတို့ သုံးဦး ပြန်လွတ် လာပါတယ်။ ပြန်လွတ်လာတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မချစ်ချစ်ချောရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ကိုယ်စား လှယ်လောင်း မအေးအေးနိုင် ကလည်း သူတို့သုံးယောက်လုံးကို အမြန်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ပြန်လွတ်လာတဲ့ သူတွေကို မနေ့က တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ ရဲစစ်ချက်ရယူခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကုတ်မြို့ နယ် ရဲစခန်းမှူးကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ အစည်းအဝေးတက်နေလို့ဆိုပြီး ဖြေဖို့ ငြင်းဆန်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ အရေးပေါ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးကို ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းထောက် တွေက မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒီကိစ္စကို မပြောဖို့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေက မှာထား တယ်လို့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/family-members-of-three-NLD-candidates-abduct ed-in-Rakhine-10152020105102.html
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲပေးနိုင်မည့် လူဦးရေသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲထက် လူဦးရေ ထက်ဝက်ခန့် တိုးလာကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှ သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖားကန့်မြို့နယ်တစ်ခုလုံး မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မဲဆန္ဒရှင် ၈၉၄၈၈ ရှိခဲ့သော် လည်း လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၁သိန်း ၈သောင်းကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ ဦးအောင်ကျော်သူ က ပြောသည်။“လောလောဆယ် ကျနော်တို့စာရင်းတော့မပိတ်သေးဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း ဘယ်လိုအခြေနေရှိလဲဆိုတော့ တစ်ချို့မဲဆန္ဒရှင်တွေက မဲစာရင်းကိုသွားမကြည့်ကြဘူး။ အဲလိုသွားမကြည့်ကြတော့ မဲ စာရင်းမှာပါမှန်းမသိ မပါမှန်းမသိ အဲတော့ ပြန်ပြန်ပြီးလျှောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ အဲကြောင့် တစ်ချို့မဲစာရင်းတွေက ထပ် တယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့က မဲစာရင်းကိုပြန်စစ် မဲစာရင်းမှာမပါဘူး။ သေချာပြီ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပြဌာန်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီ ပြီဆိုမှ မဲစာရင်းထဲကိုထည့်မယ်။ အဲတော့ ခုစီစစ်ဆဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက် တိတိကျကျတော့ မသိရသေးပါဘူး။ လောလော ဆယ်တော့ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ၁သိန်း ၈သောင်းကျော်ရှိတယ်။” ဟု ဖားကန့်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အရာရှိ ဦးအောင်ကျော်သူကပြောသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် မဲစာရင်းထက်ဝက်ခန့်တိုးလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ KNC မှ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်သားလှယ်လောင်း ဦး ဂျန်မာနောင်လတ် က ယခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုသည်။“ဖားကန့်မှာ မဲထည့်ခွင့်ရှိသည့် ဌာနေလူထုတွေက ကျနော်သိရသလောက် ၃သောင်းလောက်ဘဲရှိတယ်။ ဒီရွှေ့ပြောင်းကိစ္စက ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရက ၂၀၂၀ လုပ်လာတယ်။ အဲဒါကို NLD ကလည်း အလိုက်သိ သူတို့မဲရဖို့ ကျနော်တို့ KNC တွေ ဒီလောက်ထိကန့်ကွက် နေတဲ့ကြား ထဲကကို အတည်ပြုဖြစ်အောင်ပြုပေးတယ်။ ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း ခံနေရတယ်လေ။ တိုင်းရင်း ဒေသမှာ ဒီရွှေ့ပြောင်းက လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။”ဟု ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဂျန်မာနောင်လတ် ကပြောသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံသားများ မဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေရန် မိမိရောက်ရာဒေသတွင် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ နေထိုင်သူ သည် မဲပေးနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ ရက်ပေါင်း ၉၀ သို့ လျှော့ချလိုက်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်မူများရှိခဲ့ သည်။ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီများသည် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ(KSPP)၊ ကချင်အမျိုးသား ကွန်ကရက်ပါတီ(KNC)၊ ညီညွှတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (USDP)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ တိုင်းလိုင်ရှမ်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(TNDP) စသည့် ပါတီ ၆ ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန မှ သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/15/l2-9/
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန FDA မှ ဝန်ထမ်း ၁ ဦးမှာ အောက်တို ဘာလ ၁၄ ရက် ည ၉ နာရီကျော်အချိန်ခန့်က မြို့ဝင်ကားဂိတ်၊ ငွေတောင်ပေါက်တံတားတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူမှာ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် ကိုဦးကျော်တင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ မြောက်ဦး ကားဂိတ်ဘက်မှ ၎င်းနေထိုင်ရာ လက်ကောင်ဈေးရပ်ကွက်သို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာရောက်စဉ် လမ်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် မြောက်ဦးမြို့နယ် အုတ်ဖိုကန် ဇာတိ ဖြစ်ပြီး FDA ရုံးတွင် စာရေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်မှာ ၃ နှစ်ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမောင်သန်းရွှေက “မနေ့ည ၉ နာရီ ကျော်မှာ ကားဂိတ်ကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ တဦးတည်း ပြန်လာတဲ့အခါ တံတားနားမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းသွားတာ။ သူက အုတ်ဖိုကန်အနီး က FDA ရုံးမှာ စာရေးအဖြစ် တာဝန်ကျနေတာ ” ဟု ပြောသည်။ ၎င်းနှင့် ဆွေမျိုးတော်သူတဦးဖြစ်သည့် အုတ်ဖိုကံကျေးရွာ နေ ဒေါ်မသောင်းဌေးက “ သူ့မှာ ဝန်ထမ်း အထောက်အထား ကဒ်တွေ အစုံရှိတယ်။ FDA တာဝန်ရှိ အထက်လူကြီးတွေကို လည်း တိုင်ကြားထားတယ်။ သူ့တို့ကလည်း ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ ထောက်ခံထားတယ်။ နောက်ပြီး ကျေးရွာ လူကြီးတွေကလည်း ထောက်ခံထားတာ ရှိတယ် ” ဟု ပြောသည်။
ကိုဦးကျော်တင်ကို လက်ရှိတွင် မြောက်ဦးမြို့မ ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး မည့်သည့် ပုဒ်မနှင့် အရေးယူမည်ကို မသိရ သေးကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။ ၎င်းက “ ဒီနေ့ ရဲစခန်းကို သွားတော့ အချုပ်ထဲမှာ သားကို တွေ့ခဲ့တယ်။ ရဲဘက် ကတော့ သူ့ကိုချုပ်ထားအုံးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်။ ပုဒ်ပုဒ်မနဲ့အရေးယူမယ် ဆိုတာကိုတော့ မပြောဘူး။ သားကို မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားလည်း မရခဲ့ဘူး ” ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲကာလအတွင်း လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံ အရပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံရမှုများရှိကာ စစ်ဆေးရေးကာလအတွင်း သေဆုံးမှုများ ရှိသည့်အတွက် ၎င်း အတွက် အလွန်စိုးရိမ်မိကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။ မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာစိန်က အရပ်သားများကို သံသယနှင့် ဖမ်းဆီးရာတွင် ဥပဒေလုပ်ထုံးနှင့် အညီဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ထောက်ပြ သည်။ ဦးထွန်းသာစိန်က “ အရပ်သားပြည်သူတွေ ဖမ်းခံရတဲ့ အပေါ်မှာ ကျနော်တို့လည်း စိုးရိမ်မှု မြင့်တက်နေတယ်။ ဒေသခံ တွေကို သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးရင်လည်း တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းက အလုပ်ပဲ လုပ်စေချင်တယ် ” ဟု ဆိုသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီမှ မြောက်ဦးမြို့မရဲစခန်း စခန်းမှူးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ဆက်သွယ်၍ မရှိခဲ့ပါ။ https://burma.irrawaddy.co m/news/2020/10/15/231718.html
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ် မိုင်ယု ၁၀၅ မိုင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က ဖောက်ခွဲရေးသုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည့် Remote Mine Receiver များ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြစ်စဉ်မှာ ယာဉ်အမှတ် SHN-1G/—– ဖူဆိုအဖြူရောင် ၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာဉ်သည် မိုင်ယု ၁၀၅ မိုင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်အတွင်း သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဌာနတွင် အစစ်ဆေးခံရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ရာမှ နမူနာ စစ်ဆေးရန် ကားပေါ်ရှိ အမျိုးသားဝတ် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတိုများ ထည့်ထားသည့် ဂျက်ဖာကိုယူ၍ နမူနာစစ်ဆေးရာမှ ဂျက်ဖာအတွင်း ၀ိုင်ယာကြိုးနှင့် ဆော့ကက်များ သိုဝှက်သယ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရာမှ ပူးပေါင်းအဖွဲ့များက စစ်ဆေးရာ ဘောင်ဘီ တို ဘူးများအတွင်း Remote Mine Receiver များ စုစုပေါင်း ၁၇၀၀ ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တွေ့ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်‌နေပြီး တွေ့ရှိဖမ်းဆီး ရခဲ့သူ ယာဉ်မောင်း ယာဉ်နောက်လိုက်နှင့် အေးဂျင့် တို့ကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ည ၇ နာရီ ကျော်ခန့်က မူဆယ်မြို့မ ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာပြီး စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကာ ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန် သက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းမှုကို ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/195578
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ မဲပေးနိုင်ရေးနှင့် မဲစာရင်းကိုလည်းနောက်ဆုံး အမြန်စစ်ဆေး ကြဖို့တိုက်တွန်းသော လူငယ်အဖွဲ့များက စက်ဘီးစီးလှုပ်ရှားမှုအစီစဉ်ကို မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကချင်ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီအဖွဲ့နှင့် We Generation လူငယ်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဦးဆောင်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ မနက် လူငယ်အယောက် ၃၀ ခန့်က မြစ်ကြီးနားစီတာပူရပ်ကွက်မှ အာလမ်ကျေးရွာအထိ စက်ဘီးစီးကာ လမ်းတစ်လျှောက် ပညာပေးစာစောင်များ ကပ်ခဲ့သည်။
“မြို့နယ်ပြည်သူများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းထဲမှာ ပါမပါ သွားရောက်စစ်ဆေးကြဖို့နှင့် နောက်တစ်ခုက ခုချိန်က ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တယ်။ ဒီကာလမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာမဲပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။”ဟု ကချင်ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာ မြစ်ကြီးနားခရိုင်တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး မဆိုင်းဆန့် က ပြောသည်။ Covid ကာလ ပြည်သူများအနေဖြင့် မပျက်မကွက်ဘဲ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ မဲပေးကြဖို့ လက်ကမ်းစာစောင်များကို အများတွေ့မြင်နိုင်သောနေရာများတွင် လိုက် ကပ်ခဲ့ကြသည်။“ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးကြဖို့ ပြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ အရေးကြီးတယ်။ ကိုဗစ်ကာလ လည်းဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ မဲသွားပေးတဲ့ချိန်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး တွေ သွားရောက်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ လိုက်လံအသိပေးတဲ့အရာမို့ ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။”ဟု လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင် သူလူငယ် တစ်ဦး ပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအောက် ပေါက်ထွက်လာသော တတိယအကြိမ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/13/l2-8/
ကယားပြည်နယ်သို့ ဝင်ထွက် သွားလာနေသည့် ယာဉ်လိုင်းများရပ်နားထားသဖြင့် လွိုင်ကော် အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နား စခန်းမှ ယာဉ်မောင်း ယာဉ်နောက်လိုက်အပါအဝင် လူပေါင်း ၇၀၀ ခန့်အားကယားပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီမှ ဆန်နှင့် ဆီများကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့က တတိယအကြိမ်အဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ယာဉ်လိုင်းများ ရပ်နားထားသည့် အတွက် စားဝတ်နေရေးအခက်ဖြစ်နေသည့် ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်နောက်လိုက်နှင့် ကားဝင်း အတွင်းရှိ ရုံးဝန်ထမ်းများအား တစ်ဦးလျှင် ဆန် ၁၂ ပြည်၊ ဆီတစ်ပိသာနှုန်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကယား ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစံအေး က ပြောသည်။ “ ၁၂ ရက်နေ့ကနေ ဒီနေ့ အထိ ၁ လနဲ့ ၃ ရက်ဖြစ်သွားပြီးပေါ့ ။ ကျနော်တို့ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ် နောက်လိုက် တွေလည်း ဒီလုပ်ငန်း တခုကိုသာ ဦးတည်လုပ်နေတာ ဒီလုပ်ငန်း မလုပ်တဲ့ အခါကျတော့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျနော်တို့ ကော်မီတီတွေက ဆင့်ကဲ အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ ဒါပေးသင့်တယ်၊ ဒီထက်ကြာရင် လည်း ထပ်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ စီမံ ဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ် ”ဟု ပြောသည်။
“ ကျနော်တို့ ကိုဗစ် ကင်းစင်တဲ့ ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ အလျောက် ဒီလိုကင်းစင်အောင် နေနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ယာဉ် မောင်း၊ ယာဉ်နောက်လိုက် အားလုံးနဲ့ ကျနော်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပြည်နယ် ကိုယ်စား ကော်မတီ အနေနဲ့များစွာ ဂုဏ်ယူပါတယ်”ဟု ဦးစံအေးက ရှင်းပြသည်။ ကယားပြည်နယ်သို့ ဝင်ထွက်သွားလာနေသည့် ခရီးသည်တင် ယဉ်လိုင်း အားလုံးကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ စတင်၍ ယနေ့အထိ ရပ်ဆိုင်းထားရန် ပြည်နယ် အစိုးရမှ ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ် ကာ ကယားပြည်နယ်တွင် ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၇၀ နီးပါရှိကြောင်း သိရသည်။ ကယားပြည်နယ်သည် ယနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါ ကင်းစင်းနေသည့် တစ်ခုတည်းသော ပြည်နယ်အဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အတွင်း အဝင် အထွက် စောင့်ကြည့်နေသည့် ဂိတ်များကိုလည်း အထူး ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။ http://www. mizzimaburmese.com/article/74530
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အတွက် စိုက်ထူထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်အခု ၄၀ ရှိသည့်အနက် ၅ ခုမှာ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရကြောင်း ယင်းပါတီထံမှသိရသည်။
ဆိုင်းဘုတ်များ ဖျက်ဆီးခံရသည်မှာ သုံးကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဖျက်ဆီးသူများအား အရေးယူနိုင်ရန် ဘူးသီးတောင်မြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၏ NLD ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ငြိမ်းက DMG သို့ ပြောသည်။“ဖျက်ဆီး ရတာ အခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဆို ၃ ကြိမ်ရှိပြီ။ နေ့စွဲတွေ မှတ်မရတော့ဘူး။ မနေ့က ၂ ခု ဖျက်ဆီးခံ ရတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၅ မနက်မှာ သွားကြည့်တော့ ၅ ခုအထိပျက်စီးနေတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ တပ်မတော်နှင့် အေအေတို့တိုက်ပွဲများကြောင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအများစုတွင် လူနေထိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ပါတီအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်များကို ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်၌သာ ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် တောင်ကုတ်နှင့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်တို့တွင်လည်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP)၏ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် အချို့ဖျက် ဆီးခံရမှုရှိခဲ့ပြီး တောင်ကုတ်၊ မြေပုံ၊ မာန်အောင်နှင့် စစ်တွေမြို့နယ်တို့တွင်လည်း NLD မှ စိုက်ထူထားသည့် အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်အနည်းဆုံး ၁၀ ခုခန့် ဖျက်ဆီးခံထားရကြောင်း သက်ဆိုင်ရာပါတီများထံမှ သိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ကာလကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီမှ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီအချိန်ထိ ရက်ပေါင်း ၆၀ ခွင့်ပြုကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေငြာထားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76297
၁။ ကရငျပါတီမြားနှငျ့ ကရငျကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို တခဲနကျ မဲပေးရနျ KNU တိုကျတှနျး
၂။ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) သညျ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ၊ NLD ပါတီ အပါအဝငျ တိုငျးဒသေကွီးအခွစေိုကျ မညျသညျ့ပါတီနှငျ့မြှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး မရှိကွောငျး ထုတျပွနျ
၃။ ကရငျအမြိုးသားအလံတျောကို အသုံးပွုသညျ့အတှကျ ပဒိုမနျးငွိမျးမောငျကို NLD ကနျ့ကှကျ၊ NLD ကိုယျစားလှယျ လောငျး အခြို့လညျး အသုံးပွုမှုရှိနေ
၄။ “ဝ”အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ COVID-19 ကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရာတှငျ နှောငျ့နှေးမှုမြားကွုံတှနေ့ရေကွောငျး ပါတီ အတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့ဝငျ ပွောကွား
၅။ ကရငျပါတီ(KNDP) ကို ကရငျလူငယျကှနျရကျ ဝနျးရံကူညီ
၆။ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အရပျသားမြား မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမညျ့အလားအလာမြား မွငျတှနေ့ရေပွီး ပဋိပက်ခမြား ပိုမိုကွီးထှား လာခွငျး မဖွဈပျေါစရေေး တပျမတျောနှငျ့ RCSS တို့ အပဈရပျပေးရနျ ရှမျးအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား တောငျးဆို
၇။ သောငျးနှငျ့ခြီသော မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ဝနျးရံသူမြား ဘီလူးကြှနျးနှငျ့ ရေးမွို့နယျတှငျ လှညျ့လညျအငျအားပွ
၈။ မူဆယျ SNDP စညျးရုံးရေး ဆိုငျးဘုတျမြားဖကျြဆီးခံရ
၉။ တောငျသူမြားအပျေါ ပွဈဒဏျထပျတိုးရနျ တပျမတျောက လြှောကျထားသညျ့အမှု ပလပျခံရ
၁၀။ ကြေးရှာအုပျစု ၇ စုကို မဲဆန်ဒနယျမှ ပယျဖကျြပေးရနျ ပွညျနယျလှတျတျောဥက်ကဌစာတငျ
၁၁။ ရသတေ့ောငျတှငျ လကျနကျကွီးကြ ရှာသား ၄ ဦး ဒဏျရာရ
၁၂။ ရမေဲပွဿနာဖွရှေငျးပေးနိုငျမညျ့သူကိုသာ မဲထညျ့မညျဟု ဒသေခံမဲဆန်ဒရှငျမြားပွော
၁၃။ ဖားကနျ့ စညျပငျ ဥက်ကဌ တငျမွောကျရာတှငျ တရားမြှတမှုမရှိကွောငျး ဝနျကွီးခြုပျထံ ကနျ့ကှကျစာတငျ
၁၄။ ရှာသားမြားစဈဘေးရှောငျနစေဉျ နအေိမျမြားမှနှေောကျခံရ
၁၅။ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးမှ သကျငယျမုဒိမျးမှုကြူးလှနျသညျ့အပျေါ ဥပဒအေတိုငျးအရေးယူပေးရနျ ကနျပကျလကျ အရပျ ဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားတောငျးဆို
၁၆။ စဈတှရေောကျ စဈဘေးဒုက်ခသညျ သုံးဦးနဲ့ ရဟနျးတဈပါး အဖမျးခံရ
၁၇။ ပလကျဝမွို့ကို တပျမတျောလုံခွုံရေးယူပွီး ဆနျအိတျပေါငျး ၁၇၀၀ ပို့ဆောငျပေးနပွေီ
၁၈။ ကြောကျမဲတှငျ ပဈခတျသံငွိမျ သျောလညျး စဈရှောငျ ၃၅၀၀ ကြျော ထိရှိလာ
၁၉။ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျမညျကို အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားစိုးရိမျ
၂၀။ ရခိုငျမှာ ထိုးစဈတှေ ခကျြခငျြးရပျဖို့ Free Burma Rangers အဖှဲ့တောငျးဆို
၂၁။ မတူကှဲပွားမြိုးနှယျမြား၏ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျရနျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျပွိုငျရခွငျးဖွဈဟု ကမနျအမြိုးသား တိုးတကျရေးပါတီဆို
၂၂။ တောငျကုတျ NLD အမတျလောငျးတှရေဲ့ အသကျအန်တရာယျ မိသားစုဝငျတှစေိုးရိမျ
၂၃။ ဖားကနျ့တှငျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ မဲပေးမညျ့စာရငျးသညျ ၂၀၁၅ ခုနှဈစာရငျးထကျ လူဦးရေ ထကျဝကျခနျ့တိုး
၂၄။ မွောကျဦးတှငျ FDA ဝနျထမျး ၁ ဦး ဖမျးဆီးခံရ
၂၅။ မူဆယျမွို့နယျ မိုငျယု ၁၀၅ မိုငျ နယျစပျကုနျသှယျရေးဇုနျတှငျ ဖောကျခှဲရေးသုံး ပစ်စညျးဖွဈသညျ့ Remote Mine Receiver မြား ဖမျးဆီးရမိ
၂၆။ ကိုဗဈကာလ လုံခွုံစှာ မဲပေးနိုငျရေး အသိပညာပေးလှုပျရှားမှု လူငယျမြားပွုလုပျ
၂၇။ လှိုငျကျော အဝေးပွေးစခနျးမှ ယာဉျမောငျး၊ ယာဉျနောကျလိုကျမြားအား ဆနျနှငျ့ဆီ ထောကျပံ့
၂၈။ ဘူးသီတောငျမွို့ပျေါရှိ NLD အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ ၅ ခုဖကျြဆီးခံရ
ကရငျအမြိုးသားမြားအနဖွေငျ့ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပါတီမြားနှငျ့ ကရငျအမြိုးသားကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို တခဲနကျ မဲပေးရနျ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး-KNUက ယနေ့ (အောကျတိုဘာလ ၁၅ရကျ)တှငျ ထုတျပွနျသညျ့ တဈနိုငျငံ လုံးပဈခတျ တိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးသဘောတူ စာခြုပျ (NCA) ၅ နှဈပွညျ့ နှဈပတျလညျနေ့ ကွညောခကျြတှငျ တိုကျတှနျး လိုကျသညျ။
ကရငျအမြိုးသားမြား၏ မိမိကံကွမ်မာ ဖနျတီးရေးမှာ ကရငျအမြိုးသားအားလုံး မတူညီသညျ့ အခွအေနအေောကျတှငျ ပါဝငျ သှားရနျ လိုအပျခွငျးကွောငျ့ ယခုလို တိုကျတှနျးလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျး KNU အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ ပဒိုစောတာဒိုမူး က ကအေိုငျစီသို့ ယခုလို ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက“ရှေးကောကျပှဲက ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအောကျမှာ ရှိနတေယျ။ ၂၀၀၈ အောကျမှာ ရှိနပေါစေ ကိုယျ့အတှကျ ပှငျ့လာတဲ့ Space (နရော) လေးတဈခုကို ပါဝငျပွီးတော့ ခြဲ့ထှငျဖို့လိုအပျသလို ကနြျောတို့ ၂၀၀၈ ရဲ့ ပွငျပမှာ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို အခွခေံတဲ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲတှမှောလညျး ကနြျောတို့ရရှိတဲ့ နိုငျငံရေးဆှေး နှေးပှဲ တှမှော ကရငျတှေ လိုလားတဲ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့နဲ့ တနျးတူရညျတူ ကိစ်စတှကေို ကနြျောတို့ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျနဲ့ သူ့ထောငျ့ ကိုယျ့ထောငျ့ ပါဝငျပွီးတော့ လုပျသှားဖို့ လိုအပျတယျ”ဟု ပွောသညျ။
ကရငျတိုငျးရငျးသား အပါအဝငျတဈနိုငျငံလုံး၏ ဘုံရညျမှနျးခကျြဖွဈသော ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီ တညျဆောကျမှုတှငျ လှတျတျောတှငျး လှတျတျောပွငျပ ဟနျခကျြညီညီသှားနိုငျရနျ ကရငျပါတီနှငျ့ တဈသီးပုဂ်ဂလ ကရငျအမြိုးသား ကိုယျစားလှယျ မြားအနဖွေငျ့ နရောတဈခုရရှိသှားပါက ဥပဒေ ပွုပွငျပွောငျးလဲ ရေးဆှဲသညျ့နရောမြားတှငျ ပါဝငျသှားရနျလညျး ပဒိုစောတာဒိုမူးက ဆကျပွောသညျ။ ထို့အပွငျ တခွားသောပါတီတှငျ ရောကျရှိနကွေသညျ့ ကရငျအမြိုးသား ကိုယျစားလှယျ လောငျးမြားအနဖွေငျ့ လညျး ကရငျအမြိုးသားမြား၏ ဘုံရညျမှနျးခကျြအတိုငျး ပါဝငျနိုငျမညျ့ မိမိအခနျးကဏ်ဍမြားကိုလညျး မွငျ့တငျ သှားရနျ လိုအပျကွောငျးလညျး KNU ၏ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျက ဖွညျ့စှကျ တိုကျတှနျးသညျ။ လကျရှိ ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍လညျး အပဈအခတျရပျစဲရေး ခိုငျမာခွငျးနှငျ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးညှိ နှိုငျးမှုမြားတှငျ အခွား သော တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား အားလုံးပါဝငျနိုငျသညျ့ လုပျငနျးစဉျ တဈခု ဖွဈလာအောငျ ပါဝငျ ပတျသကျ သူမြားအားလုံး ကွိုးပမျးသှားရနျလညျး KNU ၏ NCA (၅)နှဈမွောကျ နှဈပတျလညျထုတျပွနျခကျြတှငျ တိုကျတှနျး ထားသညျ။
ယနေ့ ကရြောကျသညျ့ NCA (၅)နှဈမွောကျ နှဈပတျလညျနအေ့တှကျ သကျဆိုငျရာ အစိုးရ၊ တပျမတျောတို့မှ သဝဏျလှာ မြား အသီးသီးပေးပို့ ခဲ့ကွသလို အပဈရပျလကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျ ကိုငျအဖှဲ့အစညျးအသီးသီး ကလညျး သဘောထား ထုတျပွနျခကျြမြား ထုတျပွနျခဲ့ကွသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e1%8 0%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%8
ပွညျနယျလေးခုရှိ ပေါငျးစညျး တိုငျးရငျးသားပါတီမြားနှငျ့သာ လကျတှဲဆောငျရှကျမှုရှိပွီး USDP ပါတီ၊ NLD ပါတီ အပါအဝငျ တိုငျးဒသေကွီးအခွစေိုကျ မညျသညျ့ပါတီနှငျ့မြှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး မရှိကွောငျး ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) က အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျတှငျ ထုတျပွနျသညျ။
ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီအနဖွေငျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (USDP) နှငျ့ နီးစပျမှုရှိပွီး ငှကွေေးမြားပငျ ရယူသုံးစှဲထားကွောငျး Online နှငျ့ မွပွေငျအခွအေနတှေငျ စှပျစှဲထုတျလှငျ့မှုမြား ရှိနသေညျ့အတှကျ ယခုကဲ့သို့ ထုတျပွနျ ရှငျးလငျးရခွငျး ဖွဈသညျဟု ပါတီဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ (၂) ကှမျဂေါငျအောငျခမျးက ပွောကွားသညျ။ “အဓိက ကတော့ ကွံ့ခိုငျဖှံ့ဖွိုး ရေးနဲ့ နီးစပျတယျ။ ငှရေေးကွေးရေး သုံးစှဲတယျ။ သူတို့နဲ့ မဟာမိတျလုပျတယျဆိုတဲ့ဟာမြိုး ပွောလာတော့ ကြှနျတျောတို့ လညျး မဟုတျဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွညျသူတှကေို ခပြွတာဖွဈပါတယျ” ဟု ကှမျဂေါငျအောငျခမျးက ပွော ကွားသညျ။ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) သညျ ကခငျြတိုငျးရငျးသားပါတီအခြို့ ဖကျြသိမျးပွီး ပေါငျးစညျးတညျ ထောငျသညျ့ ပါတီဖွဈရာ KSPP ကဲ့သို့ ပွညျနယျလေးခုရှိ ပေါငျးစညျးတိုငျးရငျးသားပါတီမြားနှငျ့သာ လကျရှိတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုရှိကွောငျး KSPP ပါတီ ဒုဥက်ကဌ (၁) ဒျေါဒှဲဘူက ဆိုသညျ။
KSPP ပါတီနညျးတူ ကရငျပွညျနယျရှိ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ မှနျပွညျနယျရှိ မှနျညီညှတျရေးပါတီ၊ ခငျြးပွညျနယျရှိ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ၊ ကယားပွညျနယျရှိ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီမြားသညျ ပေါငျးစညျးတိုငျးရငျးသားပါတီမြား ဖွဈသညျ။ “သူတို့လညျး ပူးပေါငျးထားတယျ။ ကြှနျမတို့လညျး ကခငျြပွညျနယျမှာရှိတဲ့ ကခငျြပါတီတှေ ပူးပေါငျးထားတယျ ဆိုတဲ့အခါကတြော့ ကြှနျမတို့ တိုငျးရငျးသားတှေ အခငျြးခငျြးတော့ ခြိတျဆကျ လကျတှဲ မှု၊ ဆှေးနှေးတိုငျပငျမှု ရှိပါတယျ။ သို့သျော USDP ပါတီတို့၊ NLD ပါတီတို့ နောကျတိုငျးမှာ အခွစေိုကျတဲ့ တဈခွားပါတီတို့၊ သူရဦးရှမေနျးပါတီတို့၊ ပွညျသူ့ပါတီတို့ UDP ပါတီတို့ ဘယျသူနဲ့မှ မဟာမိတျမရှိပါဘူး။ အခုပွိုငျဆိုငျတဲ့ နရောမှာလညျး သူတို့နဲ့ အဓိက ပွိုငျဆိုငျရတာပါ” ဟု ဒျေါဒှဲဘူက ပွောကွားသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျအားလုံးတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ယှဉျပွိုငျမညျ့ KSPP ပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား မဲဆှယျစညျးရုံး ရေးပှဲမြားတှငျ ပွညျသူလူထုက အဆိုပါကိစ်စရပျမြားအပါအဝငျ မေးမွနျးမှုမြားရှိသလို ကခငျြလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ (KIA) က နောကျခံပေးထားသညျဆိုသော စှပျစှဲမှုမြားလညျး ကွုံတှရေ့သညျဟု အဆိုပါ ပါတီဒုဥက်ကဋ်ဌ နှဈဦး ပွောကွားခကျြအရ သိရသညျ။ KSPP ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာတူးဂြာ၏ ရုပျပုံမြား၊ ပါတီပေါငျးစညျးမှုတှငျ ပါဝငျသညျ့ စညျးလုံးညီညှတျရေးနှငျ့ ဒီမိုကရစေီပါတီ ကခငျြပွညျနယျဥက်ကဋ်ဌ ဦးခကျထိနျနနျ၏ ရုပျပုံမြား၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီတံဆိပျမြား အသုံးပွု၍ Online တှငျ လှငျ့တငျဖျောပွမှုမြား ရှိသလို၊ ၎င်းငျးတို့ တိုငျးရငျးသားပါတီကို မဲပေးလြှငျ ပွညျခိုငျဖွိုး အာဏာရသှား မညျဟု ပွောဆိုမှုမြားက KSPP ပါတီ၏ စညျးရုံးရေးကို မြားစှာထိခိုကျကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ “ပါတီတဈခုထကျတော့ မကပါဘူး။ ကြှနျမတို့ကို ဒီလိုမြိုး မဟုတျမမှနျတှေ တငျနတောကတော့။ ပါတီကွီးတှေ ပါသလို ပါတီငယျတှလေညျး ပါပါ တယျ” ဟု ဒေါာဒှဲဘူက ပွောကွားသညျ။
ကခငျြပွညျနယျဒီမိုကရစေီပါတီ၊ ကခငျြဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ စညျးလုံးညီညှတျရေးနှငျ့ ဒီမိုကရစေီပါတီ ကခငျြပွညျနယျတို့ ပူးပေါငျးပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာတှငျ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီကို စတငျတညျထောငျခဲ့သညျ။မွဈကွီးနားမွို့အခွစေိုကျ ပွညျထောငျစုတိုငျးရငျးသားမြား ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပါတီက ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာတှငျ ထပျမံ ပူးပေါငျးလာမှုကွောငျ့ ကခငျြ ပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီသညျ ကခငျြပါတီ လေးပါတီ တရားဝငျ ဖကျြသိမျးပွီး ပေါငျးစညျးထားသညျ့ပါတီ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ https://news-eleven.com/article/195607
ကရငျပွညျသူ့ပါတီ (KPP)၏ ပနျးတနျော မွို့နယျ၊ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ပဒိုမနျးငွိမျးမောငျ ၏ မဲဆှယျ ဗီနိုငျးနှငျ့အတူ ကရငျအမြိုးသားအလံတျော လှငျ့ထူခဲ့ခွငျးအပျေါ ပနျးတနျော NLD က မွို့နယျရှေး ကောကျ ပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲ ထံ တိုငျကွားမှုဖွဈပှားခဲ့သညျဟု KPP တာဝနျရှိသူမြားက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ပနျးတနျောမွို့နယျ၊ စဈကိုငျးကြေးရှာ အုပျစု အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသိနျးစိနျက KPP ကိုယျစားလှယျလောငျး ပဒိုမနျးငွိမျးမောငျ၏ ဗီးနိုငျး ဆိုငျး ဘုတျတငျသညျ့နရောတှငျ ကရငျအမြိုးသား အလံတျောလှငျ့ထူခဲ့ခွငျးမြားရှိသညျ့အပျေါ အမြားထငျယောငျထငျမှား ဖွဈစေ ရနျ အသုံးပွုသညျ့အတှကျ အောကျတိုဘာ ၉ ရကျနတှေ့ငျ မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံသို့ တိုငျးကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
“အထူးသဖွငျ့ ကရငျအမြိုးသားတှပေေါ့၊ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး သူတို့က မေးတယျ။ သူ့ပါတီအလံရှိရဲ့သားနဲ့ ကရငျ အမြိုးသား အလံ ထိုးတယျပေါ့၊ အဲ့တော့ ကျောမရှငျကို အကွောငျးကွားပေါ့လို့ပွောတော့ ကျောမရှငျကို တိုငျတာပါ”ဟု ပနျးတနျောမွို့ နယျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ မနျးညှနျ့သိနျးက ပွောသညျ။ ထိုသို့တိုငျကွားခဲ့မှုအပျေါ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျ တှငျ ပွုလုပျသညျ့ မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ စုံညီလုပျငနျးအစညျးအဝေးတှငျ ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး ပါတီအလံအစား ကရငျ အမြိုးသားအလံတျောကို အသုံးမပွုရနျ အကွောငျးကွားခဲ့သညျဟု မွို့နယျ၊ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါခငျသန်တာမွငျ့က ပွောသညျ။
ပနျးတနျော KPP အနဖွေငျ့ ပါတီအလံကိုသာ လှငျ့ထူခဲ့သျောလညျး ပါတီအလံကုနျသှားသညျ့အတှကျ ယခုလို အသုံး ပွုမိခွငျးဖွဈပွီး ကျောမရှငျ၏ လမျးညှနျခကျြအတိုငျးလိုကျနာသှားမညျဟု ပနျးတနျော တိုငျး-၂ ကိုယျစား လှယျလောငျး စရဲသူရိနျဟနျက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။“ဗီနိုငျးနဲ့ ဆိုငျးဘုတျတှတေငျတော့ ပါတီအလံပဲ လှငျ့တယျ။ ပါတီအလံကုနျသှား တော့ ကရငျအလံ လှငျ့လိုကျ တာ။ တခွားပါတီအခြို့လညျး ကရငျအမြိုးသားအလံကို ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ သုံးတာတှရေ့တယျ”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ကရငျအမြိုးသားအလံတျောသညျ ကရငျတဈမြိုးသားလုံးနှငျ့ သကျဆိုငျပွီး ပါတီ၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခုခု သညျ ကရငျ တဈမြိုးသားလုံးကို ကိုယျစားမပွုသညျ့အတှကျ အသုံးပွုရနျမသငျ့ကွောငျး ကရငျအမြိုးသားပါတီ ( KNP) ဒုဥက်ကဋ်ဌ မနျးထိနျဝငျးစိနျက မှတျခကျြပွုပွောသညျ။
“ကရငျအမြိုးသား အလံတျောက တဈမြိုးသားလုံးနဲ့ဆိုငျတဲ့အတှကျ ဘယျပါတီမှ မသုံးသငျ့ဘူး၊ pamphlet (လကျကမျး စာစောငျ)မှာ ဂါ့မိုးမွတျမွတျသူသုံးနတော တှတေဲ့အတိုငျးပဲ” ဟု ၎င်းငျးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ကရငျအမြိုးသားအလံ တျောသညျ ၁၉၃၇ ခုနှဈ ကရငျအမြိုးသား နှဈသဈကူး ဥပဒအေရ တရားဝငျအလံ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ http://kicne ws.org/2020/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1 %80%84%e1%80 %b9%e1%80%a1%e1%
“ဝ” အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ COVID-19 ကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရာတှငျ နှောငျ့နှေးမှုမြား ကွုံတှနေ့ရေပွီး ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရရှိခဲ့ပါက ငွိမျးခမျြးရေးကိစ်စရပျမြားတှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျမညျဖွဈကွောငျး ပါတီအတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့ဝငျ ဦးဆိုငျနပျက ပွောကွားသညျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ “ဝ”အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးပွညျနယျ၊ “ဝ” ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျး ဟိုပနျနှငျ့ မကျမနျးမွို့နယျတှငျ မဲဆန်ဒနယျအပွညျ့ယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကာ ကနျြမွို့နယျမြားဖွဈသော တနျ့ယနျး၊ ကြိုငျးတုံ၊ မိုငျးဆတျ၊ မိုငျးပဉျြး၊ မိုငျးတုံတို့တှငျလညျး ဝငျပွိုငျသှားမညျဖွဈပွီး မွို့နယျ ခုနဈမွို့နယျတှငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ လောငျး နရော ၂၀ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ သကျဆိုငျရာ မဲဆန်ဒနယျတှမှော ခှဲပွီး လှုပျရှားကွတာပေ့ါ။ ကြှနျတျောက မကျမနျးဘကျမှာကတြယျ။ တခြို့အဖှဲ့တှကေ ဟိုပနျတို့ တနျ့ယနျးတို့ပေ့ါ။ အဓိကတော့ COVID-19 ကွောငျ့ သိပျအလုပျမတှငျဘဲ နှောငျ့နှေးတာပေ့ါ။ နောကျပွီး လမျးပနျး ဆကျသှယျရေးပေါ့။ ဒါက ခကျခဲတယျ။ COVID-19 ရဲ့ အခွအေနကေ သိတဲ့အတိုငျးပဲ။ နောကျလမျးပနျးဆကျသှယျရေး ပေါ့။ တောငျပျေါဒသေပေါ့။ တောငျပျေါဒသေဖွဈတော့ ပါတီတှလေညျး သိပျမမြားဘူးပေါ့။ မကျမနျးမှာ လေးဦးပေါ့။ ပွညျသူ တဈဦး၊ အမြိုးသား တဈဦး၊ ပွညျနယျ နှဈဦးပေါ့။ ရှမျးရှေ့ ရှမျးမွောကျမြားတယျ။ “ဝ”တိုငျးပေ့ါ။ နရောပေါငျး ၃၀ နီးပါး လောကျရှိမယျပေါ့။ UDP ချေါတဲ့ နှငျးဆီပါတီရယျ၊ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ နဲ့ NLD ပါတီပေါ့။ လေးပါတီရှိတယျ။ လုပျလို့ရတာ တှတေော့ အကုနျလုပျပါတယျ။ ပိုစတာထောငျတာတို့ စီတနျးလှညျ့လညျတာတို့ လကျကမျးစာစောငျဝတောတို့ပေ့ါ။ မကျမနျး မှာလညျး တဈနရောနဲ့ တဈနရောလှမျးတော့ စီတနျးလှညျ့လညျတာမရှိဘူး။ ပါတီဆိုတော့ ဒသေကိုအခွခေံတယျ။ မကျမနျး အနနေဲ့ နိုငျခွကေတော့ ၅၀၊ ၅၀ ပါပဲ။ ကနျြတဲ့နရောတှကေတော့ ငါးဦးနဲ့ ခုနဈဦး ထငျထားတာပေ့ါ။ ၂၀ ဦးမှာပေါ့။ တကယျ လို့ အနိုငျရမယျဆိုရငျ မူဝါဒမှာပါတဲ့အတိုငျးပဲ ငွိမျးခမျြးရေးတှမှော ဝငျပါမယျ။ နိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျဆိုရငျ နိုငျငံတျောအကြိုးအတှကျဆိုရငျ ဘယျပါတီနဲ့မဆို ကြှနျတျောတို့က ပူးပေါငျးလုပျဆောငျသှားမယျပေါ့။ ဒသေဖှံ့ဖွိုးဖို့ပဲ။ ဖှံ့ဖွိုး ရေးပဲ တောငျးဆိုတာမြားတယျ။ ကနျြးမာရေးအဆောကျအအုံ၊ ပညာရေး အဆောကျအအုံ၊ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးတှေ ဒီဘကျမှာ ဒါတှပေဲ မြှျောလငျ့တယျ” ဟု “ဝ” အမြိုးသားပါတီ အတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့ဝငျ ဦးဆိုငျနပျက ပွောကွားသညျ။
“ဝ” တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေးပါတီမြား ကှဲပွားနလြှေငျ မဲမပေးတော့ဟု ပွညျသူလူထုတောငျးဆိုခကျြအရ “ဝ” အမြိုးသား ပါတီ ကို “ဝ” ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ “ဝ” အမြိုးသား စညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီ၊ “ဝ” လဈဘရယျ ဒီမိုကရကျတဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျရေးပါတီတို့ကို ပူးပေါငျး၍ “ဝ” အမြိုးသားပါတီကို တညျထောငျရခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာ ၁၅ ရကျတှငျ “ဝ” ပါတီပေါငျးစညျးရေး လုပျဆောငျခဲ့ပွီး “ဝ” အမြိုးသားပါတီသညျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဧပွီလတှငျ နိုငျငံရေး ပါတီအမှတျစဉျ (၁၂၈) ဖွငျ့ မှတျပုံတငျရရှိခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/195427
ပွညျနယျအခွစေိုကျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ(KNDP)၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးလုပျငနျးမြား အောငျမွငျစရေေး အတှကျဝနျးရံကူညီအားဖွညျ့ပေးလကျြရှိကွောငျး ကရငျပွညျနယျရှိ ကရငျလူငယျကှနျရကျ(KYN) ဆကျသှယျခြိတျ ဆကျရေး တာဝနျခံ စောသနျ့သောငျ(စဝျသိုငျ့သုဂျ)က ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ပါတီစညျးရုံးရေးတှဆေငျးရငျ ကနြျောတို့လိုကျသှားပွီး လိုအပျတာကူညီပေးတယျ။ လူငယျတှကေို လာ join ခိုငျးတယျ။ online နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ Challenges ချေါတဲ့ (အက) Video clip တို့၊ ဓာတျပုံတို့နဲ့ ဝနျးရံလုပျဆောငျ နတေယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ အောကျတိုဘာလ ၉ ရကျနကေ့ ပွောသညျ။ KYN အနဖွေငျ့ ကရငျပွညျနယျအတှငျး အောကျတိုဘာ ၄ရကျနမှေ့ စတငျကာ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ပွီးဆုံးသညျ့ နိုဝငျဘာ ၆ ရကျ နအေ့ထိ ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီ KNDP အတှကျ မွပွေငျတှငျ လှုပျရှားဝနျးရံနကွေောငျး စောသနျ့သောငျက ဆကျ ပွောသညျ။
ယငျးသို့ ကူညီပေးရခွငျးမှာ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပါတီမြားအောငျနိုငျပွီး လှတျတျောမြားထဲတှငျ ကရငျ့အရေး အမှနျတကယျ လုပျဆောငျပေးမညျ့ ကိုယျစားလှယျမြားမှတဆငျ့ ကရငျပွညျသူအသံမြား ရောကျရှိနိုငျရနျအတှကျ ဝနျးရံ ပေးသှားမညျဟု နိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ကရငျလူငယျကှနျရကျ (KYN)က ယခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလတှငျ ထုတျဖျောပွောဆိုခဲ့ပွီးလညျး ဖွဈသညျ။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲကို ကရငျပွညျနယျတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကရငျအမြိုး သား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ(KNDP)ကို ပွညျနယျအခွစေိုကျ ကရငျပါတီ သုံးပါတီနှငျ့ ဖလုံစဝျေါဒီမိုကရကျတဈပါတီမှ ပါတီဝငျ တခြို့ ပူးပေါငျးဖှဲ့စညျးထားခွငျးဖွဈပွီး ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ ၂၂ရကျနတှေ့ငျ တရားဝငျ နိုငျငံရေးပါတီအဖွဈ ထုတျ ပွနျကွညောခဲ့သညျ။
KNDP သညျ ကရငျပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ ၇ခုတှငျ သံတောငျမွို့နယျမှလှဲ၍ ကနျြမွို့နယျ ၆မွို့နယျတို့တှငျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈပွီး ဗမာတိုငျးရငျးသားလူမြိုး လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတဈဦး လညျး အပါအဝငျ ဖွဈသညျ။ Karen Youth Network – KYN ကို ကရငျ၊ ကရငျနီ(ကယား)၊ မှနျပွညျနယျမြား၊ တနင်ျသာရီ၊ ဧရာဝတီ၊ ရနျကုနျ၊ ပဲခူး တိုငျးဒသေကွီးမြား၊ တောငျငူ-သံတောငျ၊ အထကျမွနျမာပွညျ အပါအဝငျ နယျမွဒေသေ (၁၁)ခုမှ ကရငျ လူငယျမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသော လူငယျကှနျရကျကွီးတဈခု ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80 %80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%8
ရှမျးပွညျနယျ (မွောကျပိုငျး) ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ ဖွဈပှားနသေော တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အရပျသားမြား မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးမညျ့ အလားအလာမြား မွငျတှနေ့ရေပွီး မလိုလားအပျသော ပဋိပက်ခမြား ပိုမိုကွီးထှားလာခွငျး မဖွဈပျေါ စရေေးအတှကျ တပျမတျောနှငျ့ ရှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ (RCSS) တို့အနဖွေငျ့ တိုကျပှဲမြား ရပျတနျ့ပေးရနျ ရှမျးအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးပေါငျး ၄၀ ကြျောနှငျ့ ဒသေခံမြားက တောငျးဆိုသညျ။ တိုကျပှဲမြား ရပျတနျ့ပေးရနျ ပဈခတျ တိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ၊ ရှမျးပွညျနယျဥက်ကဋ်ဌသို့ လိပျမူ၍ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ဒသေခံမြားက အောကျတိုဘာ ၁၁ ရကျတှငျ စာရေးသားပေးပို့ကာ တောငျးဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ရှမျးပွညျနယျ (မွောကျပိုငျး) ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ RCSS တို့ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျမှစ၍ တိုကျပှဲမြားဖွဈ ပှားခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျသညျ COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ ပွညျသူလူထုမြားမှာ ကနျြးမာရေး၊ အလုပျအကိုငျနှငျ့ စားဝတျနရေေး စသညျ့ကဏ်ဍမြားတှငျ အထှထှေအေကပျြအတညျးမြား ကွုံတှနေ့ရေကွောငျး အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ဒသေခံမြား က JMC-S ဥက်ကဋ်ဌ (ရှမျး) သို့ ပေးပို့သော အပဈရပျပေးရနျ တောငျးဆိုစာတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ။ ထိုသို့ အထှထှေေ အကပျြ အတညျးမြား ကွုံတှနေ့ရေသညျ့အပွငျ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ဒသေခံမြား၏ အသကျအန်တရာယျအတှကျလညျး ထပျမံပူပနျနရေ ပွီး တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာတိမျးရှောငျသူ ၂၆၀၀ ကြျော ရှိလာကာ အဆိုပါစာရငျးတှငျ ကိုယျဝနျဆောငျမြား၊ ကလေးငယျမြားနှငျ့ မသနျစှမျးသူမြားလညျး ပါဝငျခဲ့ကွောငျး ယငျးစာတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ။မကွာမီကငျြးပမညျ့ ရှေးကောကျပှဲ ကွီးအား ရပျတနျ့ရှဆေို့ငျးရမညျ့ အနအေထားနှငျ့ အရပျသားပွညျသူမြား မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမညျ့ အလားအလာမြား မွငျနရေပွီး မလိုလားအပျသော ပဋိပက်ခမြား ပိုမိုကွီးထှားလာခွငျး မဖွဈပျေါစရေနျ တပျမတျောနှငျ့ RCSS တို့က ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲ ပွီး ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးကွရနျ ၎င်းငျးတို့က တောငျးဆိုခဲ့ကွသညျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျးရှိ ပုံဝိုးကြေးရှာ၊ ခနျ့ခဲရှာ၊ ကုနျးဟတျရှာ အစရှိသညျ့ ရှာမြားတှငျ တပျမတျောနှငျ့ RCSS တို့ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားနခွေငျးဖွဈပွီး အဆိုပါတိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ဒသေခံမြားမှာ သာသနိက အဆောကျအဦမြားတှငျ လာရောကျခိုလှုံ နရေ သဖွငျ့ COVID-19 ရောဂါကာကှယျရေး အစိုးရက ခမြှတျထားသညျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားကို လိုကျနာရနျ အခကျအခဲ နှငျ့ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲမြား ကွုံတှနေ့ရေကွောငျးလညျး ပုံဝိုးရှာနှငျ့ ဟဲကှီရှာ ဒသေခံအခြို့က JMC-S (ရှမျး) ဥက်ကဋ်ဌ ထံ စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ကွသညျ။ လကျရှိ ဖွဈပှားနသေော ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုမြား မရပျတနျ့နိုငျဘဲ ဆကျလကျဖွဈပှားနပေါက စဈဖွဈရာဒသေအတှငျးရှိ ပွညျသူမြား၏ ကနျြးမာရေး၊ စိုကျပြိုးရေး၊ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးမြားနှငျ့ စီးပှားရေးမြား ဆိုးရှား စှာထိခိုကျမှုရှိလာမညျဖွဈကွောငျး အဆိုပါစာတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ။ https://news-eleven.com/article/195523
မှနျတိုငျးရငျးသား အမြားစုနထေိုငျကွသညျ့ ဘီလူးကြှနျးနှငျ့ ရေးမွို့ပျေါတို့တှငျ သောငျးနှငျ့ခြီသော မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ဝနျးရံသူလူငယျမြားက အောကျတိုဘာလ (၁၂-၁၃ ) ရကျနမြေ့ားတှငျ လှညျ့လညျ အငျအားပွခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိ သညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီ၏ အလံ၊ စတဈကာ၊ နဖူးစညျးနှငျ့ Mask မြား ကိုယျစီတပျဆငျ၍ မျောတျောဆိုငျကယျ၊ မျောတျောကား မြားဖွငျ့ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး မဲဆှယျသီခငျြးမြားဖှငျ့လှဈသီဆိုကာ မွို့ပျေါနှငျ့ ကြေးရှာမြားသို့လှညျ့ လညျကာ မှနျ တိုငျးရငျးသားတို့၏ စညျးရုံးမှုအငျအားကို ဝနျးရံပွသခဲ့ကွခွငျး ဖွဈကွောငျး မှနျလူငယျခေါငျးဆောငျတဈဦးက မှနျသတငျး အဂေငျြစီ သို့ ပွောသညျ။ အထူးသဖွငျ့ မှနျလူငယျမြားဆုံရပျ MYF မှ ဦးစီး၍ သကျဆိုငျရာမွို့နယျအလိုကျ ကြေးရှာအသီးသီး ရှိ မှနျလူငယျမြားက မှနျညီညှတျရေးပါတီအား ဝနျးရံကွခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ကိုဗဈကပျရောဂါကာလဖွဈနေ သညျ့အတှကျ မွို့နယျတဈခုနှငျ့တဈခု သှားလာကူးလူးခွငျး မပွုကွဘဲ မွို့နယျအတှငျးရှိ မှနျလူငယျမြားက ဝနျးရံလှုပျရှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။
ဘီလူးကြှနျးတှငျ အဓိကပွိုငျဖကျဖွဈနကွေသညျမှာ မှနျပွညျနယျလှတျတျော ခြောငျးဆုံမွို့နယျ အမှတျ(၁) မဲဆန်ဒနယျမွေ ဖွဈပွီး ၂၀၁၀ /၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲနှဈကွိမျ ဆကျတိုကျအနိုငျရရှိထားသူ မှနျညီညှတျရေးပါတီမှ ပွညျနယျလှတျတျော ဒုဥက်ကဌ ဒေါကျတာအောငျနိုငျဦးနှငျ့ တဈကွိမျတဈခါမှ ရှေးကောကျပှဲမဝငျခဲ့ဖူးသူ NLD ပါတီဝငျ လကျရှိမှနျပွညျနယျ စညျပငျ သာယာရေးဝနျကွီး ဦးမငျးကြျောလှငျတို့က ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈသညျ။ အလားတူ ရေးမွို့နယျတှငျလညျး အဓိက ပွိုငျ ဖကျဖွဈနသေညျ့ မှနျပါတီမှ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရအမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာဗညားအောငျမိုး နှငျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစား လှယျ ဦးမြိုးဝငျးတို့က ယခုရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျသူ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈ ပွနျလညျအရှေးခံကွမညျဖွဈသညျ။
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ မျောလမွိုငျခရိုငျ ၆ မွို့နယျ၌ မှနျညီညှတျရေးပါတီနှငျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ပါတီ(NLD)သာ အဓိကပွိုငျဖကျမြား ဖွဈနကွေောငျး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသူမြားက သုံးသပျကွသညျ။ http://burmese.mo nnews.org/2020/10/13/%e1%80 %9e%e1%80% b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျတှငျ အောကျတိုဘာလအတှငျး ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ(SNDP) ပါတီ ဆိုငျးဘုတျ ၂ နရော ဖကျြဆီးခံရကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
မူဆယျမွို့နယျ မနျ့ဟိုငျးကြေးရှာနှငျ့ တာလုံ ကြေးရှာတှငျ စိုကျထူထားသညျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ဆိုငျးဘုတျမြားဖွဈကွောငျး မူဆယျမွို့ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁)တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ စိုငျးဘိုးအောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။“ ဖကျြ ခံရတာ မနျ့ဟိုငျးမှာ၂ကွိမျ၊ တာလုံမှာ ၂ ကွိမျ ဖကျြခံရတယျ။ ပထမကွိမျ ဖကျြလို့ကနြျောတို့ ပွနျထောငျတယျ။ ထပျဖကျြ တယျ။ ဓားနဲ့လာခုတျသှားတာပါ”ဟု စိုငျးဘိုးအောငျ က ပွောသညျ။ ထို မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ဆိုငျးဘုတျဖကျြဆီးခံရသညျ့ နရောသညျ သြှမျးလူမြိုးမြားနထေိုငျသညျ့နရော ဖွဈသညျ့အတှကျ ပွဿနာ မဖွဈစလေိုမှုကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ ကို မတိုငျကွား ကွောငျး စိုငျးဘိုးအောငျ ကပွောသညျ။
“ကိုယျ့လူမြိုးတှနေတေဲ့နရောပဲ ကနြျောတို့ပွဿနာမဖွဈခငျြဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ပွောခငျြတာကတော့ စိတျဓာတျ တှပွေုပွငျစခေငျြတယျ”ဟု စိုငျးဘိုးအောငျက ထပျလောငျးပွောသညျ။ မူဆယျခရိုငျအတှငျး SNDP အနဖွေငျ့ အမြိုးသား လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျနရောကို ဒျေါနနျးငှငှေေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျပွီး၊ ပွညျသူ့လှတျတျော နရောကို စိုငျးအောငျမွငျ့ က ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျ ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ ထို့အပွငျ မူဆယျမွို့ ပွညျနယျ အမှတျ(၁)မဲဆန်ဒနယျကို စိုငျးဘိုးအောငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး၊ အမှတျ(၂) မဲဆန်ဒနယျ ကို နနျးဟနျနု က ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18878
မွယောအငွငျးပှားမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ပွဈဒဏျခမြှတျခံထားရပွီးဖွဈတဲ့ ကယားပွညျနယျ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျက ကရငျနီတောငျသူ တှပေျေါ နောကျထပျ ပွဈဒဏျထပျတိုးခမြှတျပေးဖို့ တပျမတျောက ပွငျဆငျခကျြ လြှောကျထားမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ကယား ပွညျနယျ တရားလှတျတျောက ဒီကနေ့ ပလပျလိုကျပါတယျ။ တပျမတျော အမွောကျတပျရငျး အမတ အမှတျ (၃၆၀) ကနေ တရားစှဲဆိုထားတဲ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ ဒေါဆိုရှေးတောငျသူ ၁၇ ဦးအမှုတို့ကို ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ တရားရုံးကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ၁၃ ရကျနကေ့ ထောငျဒဏျနဲ့ ငှဒေဏျခမြှတျလိုကျတာမှာ ခြုပျရကျနဲ့ ပွနျလှတျလာခဲ့ပွီး စဈတပျဘကျက မကနြေပျလို့ တရားရုံးမှာ ပွနျလညျ ပွငျဆငျခကျြတကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပွငျဆငျခကျြနဲ့ပတျသကျလို့ ခရိုငျတရားရုံးကိုတကျရာမှာခရိုငျက ပလပျလိုကျသလို ပွညျနယျတရားလှတျတျောမှာ ထပျမံ လြှောကျထားခဲ့ရာမှာလညျး ဒီကနေ့ နောကျဆုံးအမိနျ့ခရြာမှာလညျး ပလပျလိုကျတာလို့ တောငျသူတှရေဲ့ရှနေ့ေ ဦးစောခူးတလေ က ပွောပါတယျ။“အမှုက ၆ မှုရှိမယျ။ ၄၄၇ နဲ့က ၄ မှု၊ နောကျ ၆၁ နဲ့က ၂ မှု၊ အဓိကကတော့ ဒီ မူလ တရားရုံးက ခမြှတျတဲ့အမိနျ့က တရားစီရငျရေးကို တျောတျောယိမျးယိုငျစတေဲ့ အခွအေနအေထိမရှိဘူးပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့မို့ ဝငျရောကျပွီးမှ စှကျဖကျဖို့ မသငျ့ဘူးဆိုပွီးတော့ အဲလိုသုံးသပျပွီးတော့မှ စီရငျခကျြခလြိုကျတာ။”ဒီအမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျနယျတရားလှတျတျောကနပွေီး အခုလို အမိနျ့ခမြှတျလိုကျတာဟာ မှနျကနျသငျ့မွတျ ကွောငျးလညျး ဦးစောခူးတလကေ ပွောပါတယျ။
မွယောအငွငျးပှားမှုနဲ့ပတျသကျပွီး လှိုငျကျောအခွစေိုကျ အမွောကျတပျ ၃၅၆ တပျရငျးနဲ့ ခလရ ၂၅၀ တပျရငျးတို့ကလညျး ကရငျနီပွညျတောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျ ၃ ဦးအပါအဝငျ တောငျသူ ၁၈ ပျေါ နောကျထပျ ပွဈဒဏျထပျတိုးခမြှတျ ပေးဖို့ တပျမတျောက လြှောကျထားတဲ့အမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ ကယားပွညျနယျတရားရုံးက ဩဂုတျ ၁၄ ရကျက ပလပျခဲ့ပါ တယျ။ လှိုငျကျောနဲ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျမှာ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ မွယောအငွငျးပှားမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး တပျမတျောက တရားစှဲဆိုထားတဲ့ ဒသေခံတောငျသူပေါငျး ၄၁ ဦး ရှိပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/417068
ကရငျပွညျနယျ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျနှဈခုတှငျ ပါဝငျနသေညျ့ ကြေးရှာအုပျစု ၇စုကို မဲဆန်ဒနယျမွအေဖွဈမှ ပယျဖကျြ ရုပျသိမျးပေးရနျ ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ လကျရှိ ပွညျနယျလှတျတျော ဥက်ကဌ စောခဈြခငျက အောကျတိုဘာလ ၁၂ ရကျနကေ့ အကွောငျးကွား တငျပွထားသညျ။
ထိုကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ကရငျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံး အတှငျးရေးမှူး ဦးမောငျမောငျနိုငျထံ ကအေိုငျစီက ဆကျသှယျမေးမွနျးရာ စာရောကျရှိနကွေောငျးနှငျ့ လကျရှိအခြိနျတှငျ အဆိုပါတငျပွထားသညျ့ အကွောငျးကွားစာနှငျ့ ပတျသကျ၍ သခြောမဖတျရသေးကွောငျး အောကျတိုဘာလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ အတညျပွု ပွောဆိုခဲ့သညျ။“လောလော ဆယျ အဲဒီစာက ရောကျတော့ ရောကျနပွေီး။ ကနြျောက အဲဒီစာ မဖတျရသေးဘူး။ ဝငျတဲ့အနအေထားပဲ ရှိသေးတယျ။ ဘယျလိုဆုံးဖွတျမလဲတော့ အဲဒါက မပွောတတျသေးဘူး။ အခြိနျစောနသေေးတယျ။ ကနြျောတို့လညျး စာကိုသခြော ဂဃနဏ မဖတျရသေးတော့လေ။”ဟု ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အတှငျးရေးမှူး ဦးမောငျမောငျ နိုငျက ကအေိုငျစီ သို့ ပွောသညျ။
ယငျးကြေးရှာအုပျစု ၇ စုမှာ ကရငျပွညျနယျ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ၊ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၉)နှငျ့ ပွညျနယျ လှတျတျော လှိုငျးဘှဲမဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂)တှငျ ပါဝငျပွီး ထိုဒသေတှငျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတခြို့ ရှိနသေညျ့အတှကျ လုံခွုံစိတျခမြှု မရှိခွငျး၊ ကိုဗဈကွောငျ့ အခြို့ကြေးရှာမြားတှငျ ဝငျရောကျရနျ ပိတျဆို့ခံရပွီး ကှငျးဆငျးစညျးရုံးရနျ ခကျခဲခွငျးနှငျ့ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး လှနျစှာခကျခဲခွငျး စသော အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ လှတျတျောကိုယျစား လှယျလောငျးမြား၏ တငျပွခကျြအရ မဲဆန်ဒနယျမွအေဖွဈမှ ပယျဖကျြရုပျသိမျးပေးရနျ လှတျတျောဥက်ကဌက ညှိနှိုငျးအကွောငျးကွားစာ ပေးပို့ထား ခွငျးဖွဈသညျ။ မဲဆန်ဒနယျမှ ပယျဖကျြပေးရနျ တငျပွထားသညျ့ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျရှိ ကြေးရှာအုပျစု ၇ စုမှာ ရတေံခှနျကြေးရှာ အုပျစု၊ တာလယျကြေးရှာအုပျစု၊ ဝငျးစောကြေးရှာအုပျစု၊ မဲလရောကြေးရှာအုပျစု၊ သမိုကြေးရှာအုပျစု၊ မိကွောငျကြေးရှာ အုပျစု၊ ရငျးဘိုငျးကြေးရှာအုပျစုမြားဖွဈသညျဟု အကွောငျးကွားစာတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ထို့အပွငျ ၎င်းငျးဒသေအတှငျး စညျးရုံးရေးဝငျရနျနှငျ့ မဲထညျ့ရနျ အသိပညာပေးမှု ဝငျရောကျလုပျဆောငျရေး ကြေးရှာအုပျ ခြုပျရေးမှူးနှငျ့ ဒသေခံအခြို့ကို ကမျးလှမျးထားပွီး ကှငျးဆငျးရနျ အစီအစဉျရှိသညျ့အတှကျ မဲဆန်ဒနယျမှ ဖကျြပေးရနျ တောငျးဆိုခွငျးတှငျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ-KNDP ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ သဘောထားမပါဝငျကွောငျး ၎င်းငျးမဲဆန်ဒနယျ၌ ကိုယျတိုငျ ဝငျရောကျအရှေးခံမညျ့ KNDP ဥက်ကဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောဆို သညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%b1%e1%80%80%e1 %80%ba%e1%80%b8%e1%82%90%e1%8
ရခိုငျပွညျနယျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ပွာပငျရငျးကြေးရှာအတှငျး အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျ မှနျးလှဲ ၃ နာရီဝနျးကငျြအခြိနျ က လကျနကျကွီး ကရြောကျ ပေါကျကှဲသညျ့အတှကျ ရှာသား ၄ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိခဲ့ကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။ အဆိုပါ လကျနကျကွီး ထိမှနျသူမြားမှာ ပွာပငျရငျးကြေးရှာသားမှာ အသကျ ၅၅ နှဈအရှယျ ဦးမောငျမွထှနျး၊ အသကျ ၅၆ နှဈ အရှယျ ဦးဘခြို၊ အသကျ၂၈ နှဈ အရှယျ ကိုမောငျမွခိုငျ၊ အသကျ ၃၇ နှဈအရှယျ ကိုသနျးစိနျမောငျတို့ ဖွဈသညျ။ ဒဏျရာ ရရှိသူ ကိုသနျးစိနျမောငျက “ကနြျောတို့ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီလောကျမှာ ပထမ ရှာထဲကို လကျနကျကွီး တလုံးလာ ကတြယျ။ ကနြျောတို့ ရှာသားတှကေ စာသငျကြောငျးထဲမှာ စုပွီး ဝပျနကွေတဲ့အခြိနျ နောကျ ထပျ ၃ လုံး လာကတြယျ။ အဲဒီမှာ ကညျြ အစ တှေ လာမှနျတာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
တပျမတျောနှငျ့ AA တို့သညျ အောကျတိုဘာ ၄ ရကျကတညျးက ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ထီးဆှဲရှာအနီး စိုးမိုးကုနျးမြား သိမျး ပိုကျနိုငျရေးအတှကျ အပွနျအလှနျ တိုကျပှဲမြားဖွဈနခွေငျးဖွဈသညျ။ ပွာပငျကြေးရှာသားမြားက ၎င်းငျးတို့ ရှာထဲသို့ ကရြောကျ သညျ့ လကျနကျကွီးကညျြဆနျမြားမှာ ရသတေ့ောငျ အခွစေိုကျ တပျမတျော တပျရငျးမြားမှ ပဈခတျလိုကျခွငျး ဖွဈကွောငျး ပွော ဆိုသျောလညျး သီးခွားအတညျပွုခကျြ ရယူနိုငျခွငျး မရှိပေ။ ဤဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီမှ တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရ အဖှဲ့ဝငျ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မငျးသနျးအား အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျ သျောလညျး ဆကျသှယျ၍ မရရှိခဲ့ပါ။ ဒဏျရာ ရရှိသူမြားကို သှားရောကျ သယျဆောငျပွီး ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့သူ ရသတေ့ောငျမွို့ခံ ကိုဘက်ကာက “ဒဏျရာ ရသူ ၄ ယောကျမှာ ၃ ယောကျကတော့ ဒဏျရာ ပွငျးတယျ။ အခုတော့ ကနြျောတို့ စကျလှနေဲ့ ရသတေ့ောငျ ဆေးရုံကို ပို့ ဆောငျပေးလိုကျပါတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါ လကျနကျကွီး ထိမှနျခဲ့သူ ပွာပငျရငျး ကြေးရှာသား ၄ ဦးမှာ ဦးခေါငျး၊ ဝမျးဗိုကျ၊ ခွထေောကျ၊ လကျမောငျး စသညျ့ နရောမြားတှငျ လကျနကျကွီးအစအန ထိမှနျသညျ့ဒဏျရာမြားဖွငျ့ ရသတေ့ောငျ ဆေးရုံ၌ တကျရောကျ၍ ဆေးကုသမှု ခံယူ နရေကွောငျးလညျး သိရသညျ။ ယမနျနကေ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ထီးဆှဲကြေးရှာအနီး AA တပျဖှဲ့မြား စိုးမိုးထားသညျ့ တောငျကုနျးမြားကို တပျမတျောက တိုကျခိုကျသိမျးပိုကျလိုကျကွောငျး၊ AA တို့ အောငျသာစညျ၊ ကြောကျတနျး စသညျ့ ကြေးရှာမြားဘကျသို့ ဆုတျခှာသှား ကွောငျး၊ ၎င်းငျး ကြေးရှာမြားကို AA တို့က မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့ကွောငျး တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ထုတျပွနျသညျ။ ကိုဗဈကာလအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ AA တို့၏ တိုကျပှဲကွောငျ့ ကြောကျတျော၊ ရသတေ့ောငျ၊ မွောကျဦးမွို့နယျတို့တှငျ စဈရှောငျ အရအေတှကျ ၃ သောငျးကြျော ထပျမံတိုးပှားလာကာ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျး မွို့နယျမြားတှငျ စဈရှောငျ အရအေတှကျ ၂၂၀၀၀၀ ကြျောထိ မြားပွားလာကွောငျး ရခိုငျတိုငျးရငျးသား မြိုးနှယျ မြား အစညျးအရုံး (REC) က အောကျတိုဘာ ၁ ရကျတှငျ ထုတျပွနျထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2 020/10/4/231634.html
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ရမေဲပွဿနာကိုငျတှယျဖွရှေငျးပေးနိုငျမညျ့ ပါတီနှငျ့ကိုယျစားလှယျလောငျး မြားကိုသာ မဲပေးမညျ ဟု တဈနှဈကြျောကွာ သောကျသုံးရေ အခကျအခဲဖွဈနဆေဲ ဖားအံမွို့၊ သံလှငျ မွဈအနောကျဖကျခွမျး ရှိ ဒသေခံမဲဆန်ဒရှငျ မြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ရတှေငျးကုနျး(ကောဝျထိုငျ့ဍျာ)ရှာမှ နနျးထူးလိုငျက “ရသေနျ့ဝယျသောကျရတာ ၁ နှဈပွညျ့ သှား ပွီးပေါ့။ ရှာက ရတှေဟော ဟိုးအရငျကအတိုငျးပွနျသနျ့လာပွီးတော့ တသကျလုံး ပွနျသောကျသုံးလို့ရအောငျ လုပျပေးနိုငျ မယျ့ လူကို မဲထညျ့ပေးမယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျတှငျပွောသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလဆနျးပိုငျးက ဘားကပျ၊ အောကျကော့ရငျး၊ ရသပြေံ့၊ ပနျးကုနျး စသညျ့ ကြေးရှာအုပျစုမြား အ တှငျးရှိ ကြေးရှာမြားတှငျ ဒသေခံမြားအသုံးပွုသောကျသုံးနသေော သောကျသုံးရကေနျ၊ ရတှေငျးမြားအတှငျးပုံမှနျ မဟုတျ သညျ့ ရမြေားမဲနကျလာခွငျးနှငျ့အတူ ငါးမြားသဆေုံးမှုမြား ဖွဈပျေါခွငျးကွောငျ့ သောကျသုံးရေ ခကျခဲလာခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။ လကျရှိအခြိနျအထိလညျး ဖားအံမွို့နယျ၊ အနောကျဖကျခွမျးဒသေရှိ ကြေးရှာပေါငျး ၇ ရှာကြျော တို့တှငျ ၁ နှဈ ကြျော ကွာ သောကျရသေနျ့မြားကိုသာ ဝယျသောကျနရေဆဲဟု ရတှေငျးကုနျးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး စောငှလှေနျးက ကအေိုငျစီသို့ ပွော သညျ။ နတျကုနျးရှာမှ လူငယျတဈဦးကလညျး “ကနြျောတို့ ဒသေမှာ အခုထိကွုံတှနေ့ရေတာကတော့ ရကေိစ်စပေါ့နျော။ သောကျသုံးလို့ရ၊ မရ အာမခံတဲ့ Data အဖွေ ထုတျပွနျခကျြတှေ မတှရေ့သေးဘူး။ ဆိုးကြိုးတှဖွေဈလာရငျ အစိုးရ သဈအနနေဲ့ ဘယျလိုတာဝနျခံ လုပျပေးမလဲပေါ့နျော။ လုပျပေးနိုငျတဲ့ ကိုယျစားလှယျကိုပဲ ရှေးခယျြ မဲပေးသှားမှာပါ။” ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
အစိုးရဌာန တာဝနျရှိသူအခြို့မှ ရမြေားသညျ သောကျသုံး၍ရကွောငျး ထိုရှာမြားအတှငျး စာကပျခွငျး၊ ပွောဆိုခွငျးမြားရှိခဲ့ သျောလညျး ရရှေညျတှငျ ဆိုးကြိုးမြားဖွဈပျေါလာပါက တာဝနျယူ၊ တာဝနျခံဖွရှေငျးပေးမညျ့သူမရှိသဖွငျ့ သောကျမရဲသေး ကွောငျးလညျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုနကွေသညျ။ အဆိုပါ ရမေဲမှုဖွဈပှားသညျ့ဒသေတှငျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ၏ ပွညျသူ့၊ အမြိုးသား၊ ပွညျနယျလှတျတျော ၃ ရပျ၌ ပါတီ ၉ ပါတီနှငျ့ တဈသီးပုဂ်ဂလ ၃ ဦးအပါအဝငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးစုစုပေါငျး ၃၃ ဦး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျသှားမညျဟု သိရသညျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျခဲ့သော KNDP ၏ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ၌ လှတျတျောထဲ ရောကျရှိပါက ရမေဲပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးဆောငျရှကျပေးသှားမညျဟု ပွညျနယျ လှတျတျော၊ ဖာပှနျအမှတျ(၂) ကိုယျစားလှယျလောငျး နျောသဇငျတုပျက ဖွကွေားသှားခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020 /10/%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%b2%e1%80%bb%e1%
ဖားကနျ့မွို့နယျ စညျပငျသာယာရေးကျောမတီဥက်ကဌအသဈတငျမွောကျရာတှငျ တရားမြှတမှုမရှိသောကွောငျ့ ကနျ့ကှကျရှုံ့ခြ ကွောငျး ဖားကနျ့အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားက ကခငျြပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျထံသို့ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျနကေ့ တငျပွထား သညျဟုသိရသညျ။ စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ ဥက်ကဌနရော အပွောငျးအလဲပွုလုပျရနျ သွဂုတျလ ၁၈ ရကျနေ့ ဖားကနျ့ မွို့ပျေါ ၅ ရပျကှကျမှ သတျမှတျထားသညျ့ အရညျအခငျြးနှငျ့ ပွညျစုံသညျ့ ၈ ဦးအား ရှေးခယျြခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ကို ရှေးခယျြရေး ကျောမတီမြားရှေ့၌ မဲခှဲဆုံးဖွတျခဲ့ရာ ဦးနျောဆနျ့ ၃ မဲ၊ ဦးမငျးမငျစိုးနှငျ့ ဦးမွငျ့အေး ၂ ဦးက တနျးတူ ၂ မဲစီ ရရှိခဲ့ကွောငျး ရှေးခယျြရေးကျောမတီအဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
မဲအမြားဆုံးရရှိသူ ဦးနျောဆနျ့ က ဥက်ကဌရာထူးနရောကို ဆကျခံရမညျ ဖွဈသျောလညျး၊ ၂မဲ သာရရှိသော ဦးမငျးမငျးစိုးကို ဖားကနျ့ စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ ဥက်ကဌ အဖွဈခနျ့အပျလိုကျသောကွောငျ့ ဒသေခံတဈခြို့က ကနျ့ကှကျနကွေောငျး ဖားကနျ့ဒသေခံ ဦးလမောငျလတောငျ က ယခုလိုပွောဆိုသညျ။“အခုသူတို့ရဲ့လုပျပုံက မဲမြားဆုံးရရှိသူကို ဥက်ကဌ မခနျ့ဘဲ ၂မဲသာရရှိတဲ့သူကိုမှ ဥက်ကဌ ပွနျခနျ့လိုကျတယျ ဆိုတာက တရားမြှတမှုမရှိဘူဆိုတာ အရမျးပျေါလှငျနတေယျပေါ့။ အဲ့ဒါကို ဒီမှာရှိတဲ့ ဒသေခံတဈခြို့က သဘောမတူဘဲ ကနျ့ကှကျနကွေတယျ။ ၃မဲနဲ့နိုငျတဲ့ ဦးနျောဆနျ့ကို ဥက်ကဌ မခနျ့အပျတဲ့ ဖွရှေငျးခကျြကိုသိခငျြတယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။ လကျရှိ ဖားကနျ့မွို့နယျစညျပငျဥက်ကဌအဖွဈခနျ့အပျလိုကျသညျ့ ဦးမငျးမငျးစိုး မှာ NLD ပါတီဝငျတဈဦးဖွဈသညျ့အပွငျ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေးအတှကျ ဖားကနျ့ မရှီကထောငျရပျကှကျ စီးရုံးရေးမှူး ဖွဈသညျဟုလညျး ဦးလမောငျလတောငျက ပွောဆိုသညျ။
ဖားကနျ့မွို့နယျ စညျပငျကျောမတီ ဥက်ကဌအဖွဈရှေးခယျြနိုငျရနျ ရှေးခယျြရေးကျောမတီ၏ မဲရလဒျနှငျ့အမညျစာရငျးမြားကို ပွညျနယျအစိုးရထံသို့တငျပွခဲ့ပွီး ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ ဦးမငျးမငျးစိုးကို ဥက်ကဌအဖွဈခနျ့အပျရနျနှငျ့ ဦးနျောဆနျ့ကို အဖှဲ့ဝငျ အဖွဈသာ ပွနျလညျခနျ့အပျပေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု ရှေးခယျြရေးကျောမတီအဖှဲ့ တာဝနျခံ ဦး Tangbau La Seng က ပွောသညျ။“သူရဲ့ ဥပဒအေရဆိုရငျတော့ မဲပိုမြားတဲ့သူကို ဥက်ကဌ ခနျ့ရမှာတော့ဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့က ရှေးခယျြ ပွီးစီးကွောငျးကို ပွညျနယျအစိုးရကို တငျပွခဲ့တယျ။ ပွညျနယျအစိုးရကနေ ဘယျလိုအခကျြတှနေဲ့ ပွနျပွီးစီစဈလညျးတော့ မသိဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကနြျောတို့ ကိုယျတိုငျလညျး ၃မဲနဲ့အနိုငျရရှိတဲ့ ဦးနျောဆနျ့ကိုဘဲ ဥက်ကဌအဖွဈထငျခဲ့တာ။ အခုက အဲ့လိုမဟုတျဘူး။
မဲမြားတဲ့ သူကိုကအဖှဲ့ဝငျစာရငျးထဲထညျ့လိုကျတယျ။ ၂မဲသာရရှိတဲ့ သူကိုက ဥက်ကဌ ပွနျခနျ့တယျ ဆိုတာက ကနြျောတို့ လညျး နားလညျရခကျနတေယျ။ အဲ့လိုလုပျလိုကျတော့ ဒသေခံတှကွေား အခငျြးခငျြးပွောစရာတှဖွေဈလာတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ပွညျနယျအစိုးရကလညျး ဒါကိုသသေခြောခြာ ဖွရှေငျးပေးသငျ့တယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။ မဲအမြားဆုံးရရှိသော ဦးနျောဆနျ ကို ဥက်ကဌနရောမပေးဘဲ ၂ မဲရသော ဦးမငျးမငျးစိုးကို ဥက်ကဌ ခနျ့သညျ့ကိစ်စကို ဖားကနျ့ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျး တခြို့က ကနျ့ကှကျကွောငျး ထုတျပွနျခကျြမြား ထုတျပွနျထားသညျကို တှရေ့သညျ။ https://b urmese.kachinne ws.c om/2020/10/13/l1-10/
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျးတှငျ ၁၀ ရကျခနျ့အကွာ တိုကျပှဲဖွဈပှါးခဲ့သော ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျးရှိ နမျ့မဟငျရှာတှငျ ရှာသား မြား ဘုနျးကွီးကြောငျးသို့ စဈဘေးတိမျးရှောငျနစေဉျ နအေိမျမြား မှနှေောကျ ခံရကွောငျးစုံစမျးသိရှိရသညျ။ အောကျတို ဘာလ ၁၄ ရကျက စဈရှောငျရှာသားမြား နအေိမျခဏတဖွုတျပွနျသှားကွညျ့ရာ ရှာလုံးကြှတျနအေိမျမြား ထိုသို့ မှနှေောကျခံ ထားရသညျကိုတှရေ့ကွောငျး စဈရှောငျရှာသူတဉီးကပွနျလညျပွောပွသညျ။“တိုကျပှဲငွိမျနလေို့ကမြတို့ တအိမျတယောကျ ၂ ယောကျ လူစုပွီး အိမျပွနျသှားကွညျ့တယျ။ ဗမာစဈသားတှရှောထဲမှာရှိနတေုနျးဘဲ။ ကမြတို့ကြှဲနှားဝကျတှကေို သူတို့ သတျစားကွတာ ရှာအဝငျကတညျးက အရိုးတှေ အသတှေအေကွှငျးအကနျြတှေ တှရေ့တယျ။ အိမျရောကျတော့ မှနှေောကျ ခံထားရတယျကမြတို့အိမျတှေ။ အိမျတိုငျးနီးပါးဘဲ။ ကမြတို့အကွာကွီးမနရေဲကွဘူး ဘုနျးကွီးကြောငျးကိုအမွနျပွနျလာကွ တယျ”– ဟု စဈရှောငျရှာသူက သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောပွသညျ။
တာလုံရကောတာ တညျဆောကျရေးစီမံကိနျးရှိရာ တာလုံရှာအသှားလမျးတှငျရှိ စဈဒဏျသငျ့ နမျ့မဟငျရှာသညျ အိမျထောငျ စု ၃၅ စု ၊ လူဉီးရေ ၁၅၀ ကြျောရှိပါသညျ။လကျရှိတှငျ ရှာလုံးကြှတျ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျစဈရှောငျခိုလှုံနကွေရကွောငျး စဈ ဘေးရှောငျမြားအား အစားအသောကျအသုံးအဆောငျသှားရောကျ ကူညီထောကျပံ့သော ကြောကျမဲမွို့ခံ အလှူရှငျ လူငယျ အဖှဲ့က သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။ အဆိုလူငယျအဖှဲ့မှ အဖှဲ့ဝငျလူငယျ တဉီးက “တိုကျပှဲမရှိတော့လို့ ရှာပွနျနေ ကွဖို့ စဈတပျက ရှာသားတှကေိုချေါတာ။ အဲတာရှာသားတှကေ ရှာပွနျအခွအေနကွေညျ့တော့ ကနြျောတို့ပါလိုကျသှား တယျ။ အိမျတိုငျးလိုလို ပစ်စညျးတှေ အစားအသောကျတှကေိုမှနှေောကျထားတာ ရှာထဲမှာ အရပျဝတျတှနေဲ့ရောယူနီဖောငျး ဝတျတှနေဲ့ရော ဗမာစဈသားတှရှေိနတေယျ။ ရှာလမျးတခြို့ထဲဆို သူတို့ပေးမဝငျဘူး ရှာသားတှကေို။ မိုငျးဗုံးတှေ ထောငျထား တယျ။ အဲ့ကွောငျ့ရှာသားတှရေော ကနြျောတို့ပါအမွနျပွနျထှကျ လာတယျ။”ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။
တိုကျပှဲမြားဖွဈပှါးသညျ့အဆိုပါ နမျ့မဟငျရှာ၊ ခနျခိုငျးရှာ၊ လုံဝိုငျ၊ နားဖငျ့၊ နားအျော၊ နားခမျြ ရှာမြားအတှငျး အစိုးရတပျမတျော တပျမ ၂၂၊ ၇၇၊ ၈၈ လကျအောကျခံတပျမြားအပွငျ ခမရ ၅၀၁ တပျ စုစုပေါငျး ၁၀ တပျရငျးထကျမနညျး လှုပျရှားနကွေောငျး စဈရှောငျရှာသား ပွောပွခကျြအရသိရသညျ။ အစိုးရတပျမတျောသညျ အောကျတိုဘာလကုနျအထိ အပဈရပျကွောငျး ကွညောပွီးနောကျတရကျ အဆိုပါဒသေတှငျလှုပျရှားနသေော RCSS/SSA တပျမြားအား ပဈခတျတိုကျခိုကျခဲ့သညျ။ ပဈခတျ မှုမြားကွောငျ့ ကိုဗဈကူးစကျမှုမွငျ့မားနခြေိနျ စဈဘေးရှောငျရှာသား ၃၅၀၀ ကြျောအထိရှိလာပွီး ကြောကျမဲမွို့ရှိ ဘုနျးကွီး ကြောငျး ၇ ကြောငျးတှငျ စဈရှောငျခိုလှုံနခေဲ့ရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18899
ခငျြးပွညျနယျ ကနျပကျလကျမွို့တှငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးမှ အသကျမပွညျ့သေးသူ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးအား မုဒိမျးမှုကြူး လှနျခဲ့သညျ့အပျေါ ဥပဒအေတိုငျးအရေးယူဆောငျရှကျပေးရနျ ကနျပကျလကျအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားက အောကျတိုဘာ ၁၄ရကျနကေ့ ကွညောခကျြတဈစောငျထုတျပွနျကာ တောငျးဆိုလိုကျသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ကနျပလကျမွို့၊ အမှတျ (၁) မွို့မရပျကှကျနေ အသကျ(၁၇) နှဈအရှယျအမြိုးသမီးတဈဦးအား ကနျပလကျမွို့ ၊ မွို့မရဲစခနျးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးမှ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာ(၁၃)ရကျနကေ့ အလိုမတူပဲအဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့ပွီး အမှုဖှငျ့တိုငျကွားခဲ့ သျောလညျး ခကျြခွငျးလကျမခံခဲ့ကွောငျး ယငျးအမှုကိုလိုကျပါဆောငျရှကျပေးနသေော ချေါနူးစုမျကြေးလကျဒသေ လူမှု ဖှံ့ဖွိုးရေးအဖှဲ့ (KRDO) မှ ဦးကီးဘူ ကပွောသညျ။“ အဓိကဒီသကျငယျမုဒိမျးမှုကို အမှုဖှငျ့ပမေယျ့ အမှုကိုတျောတျောနဲ့ မဖှငျ့ပေးဘူး ၊ နောကျတခုက သူတို့ပိုကျဆံနဲ့ကြေးအေး ဖို့ကွိုးစားတယျ၊ ပွဈမှုကြုးလှနျတဲ့သူကရဲဆိုတော့ ရဲတှအေနနေဲ့ ဒီဟာကို သခြောဥပဒအေတိုငျး ကိုယျတှယျမှုအားနညျးတယျလို့ ကြှနျတျောတို့မွငျတယျ”ဟု ဦးကီးဘူကပွောသညျ။ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးသညျ ပွညျသူမြား၏ လုံခွုံရေးကို စောငျ့ရှောကျရမညျ့အစား လူသားမဆနျစှာ အသကျမပွညျ့သေးသညျ့ ကလေးသူငယျအား မုဒိမျးမှုကြူးလှနျခွငျးသညျ ကနျပကျလကျမွို့နယျအတှငျး တရားဥပဒေစေိုးမိုးရေးနှငျ့ ပွညျသူလူထု၏ လုံခွုံရေးကို အလှနျစိုးရိမျမိကွောငျး ကနျပကျလကျအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ ထုတျပွနျခကျြထဲတှငျဖျောပွထားသညျ။
ယခုကဲ့သို့ မုဒိမျးမှုကြူးလှနျသူနှငျ့ ငှကွေေးအသုံးပွုပွီး အမှုကိုဖုံးဖိရနျ ကွိုးပမျးသူမြားအား ထိရောကျစှာ အရေးယူပေးရနျနှငျ့ ပွညျသူလူထု၏ လုံခွုံရေးနှငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု ရှိစရေေးအတှကျ ပွဈမှုကြူးလှနျသူနှငျ့ ပွဈမှုကို ဖုံးကှယျရနျ လုပျဆောငျသူ မြားအား ကလေးသူငယျ ဥပဒနှေငျ့အညီ ထိရောကျစှာ ရေးယူဆောငျရှကျပေးပါရနျ သကျဆိုငျရာ အစိုးရအဆငျ့ဆငျ့သို့ ကနျပကျလကျအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားက တောငျးဆိုထားသညျ။ ယငျးကိစ်စနှငျ့ပကျသကျ၍ ကနျပလကျမွို့ အမြိုးသမီး အဖှဲ့၊ လူမှုဝနျထမျးအဖှဲ့တို့မှ ကူညီဆောငျရှကျပေးသောကွောငျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျတှငျကနျပလကျမွို့ ရဲစခနျးမှ အမှုဖှငျ့နကွေောငျးသိရသညျ။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-76292
ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့နယျ ဇီးတောတောရဘုနျးကွီးကြောငျး စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးမှာရှိနတေဲ့ ပလကျဝ မွို့နယျက ရဟနျးတဈပါး၊ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှထေဲက အသကျမပွညျ့သေးသူ နှဈဦး နဲ့ လူငယျတဈဦးကို အောကျတို ဘာလ ၁၃ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက တပျမတျောစဈကွောငျးတဈခုနဲ့ရဲက ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ကြောငျးထိုငျ ဆရာတျော က RFA ကို ပွောပါတယျ။ ပလကျဝမွို့နယျ သူဌေးကုနျးကြေးရှာက အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျ မောငျကြျောဇျောလှ၊ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျ မောငျသနျးဝငျး၊ အသကျ ၂၀ အရှယျ မောငျနဆေနျးဦးနဲ့ အဲဒီစဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးမှာ ကူညီဆောငျရှကျ ပေးနတေဲ့ ရဟနျးတျော ဦးပညာသာမိတို့ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ အဲဒီနညေ့နပေိုငျးက စဈတှမွေို့ကိုပွနျလာမယျ့ ကြောငျး ထိုငျ ဆရာတျောကို ကွိုဖို့သှားစဉျ လမျးမှာစဈဆေးရေးလုပျနတေဲ့ တပျမတျောသားတှေ၊ ရဲတပျဖှဲ့တှနေဲ့တှပွေီ့း အဖမျးခံခဲ့ရ တာလို့ မောငျကြျောဇောလှရဲ့ အမေ ဒျေါဘီခြာဘီက RFA ကို ပွောပါတယျ။
ဖမျးဆီးခံနရေတဲ့ မောငျကြျောဇျောလှဟာ ၈ တနျးတကျမယျ့ ကြောငျးသားတဈဦးဖွဈပွီး၊ မောငျသနျးဝငျးဟာလညျး ၉ တနျး တကျမယျ့ ကြောငျးသားတဈဦးဖွဈပါတယျ။ မောငျနဆေနျးဦးကတော့ သာမာနျလကျလုပျလကျစားတဈဦးဖွဈပွီး သူတို့ဟာ ရှာအနီးအနားမှာ တိုကျပှဲတှေ ပွငျးထနျတာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျနဝါရီလ ၂၄ ရကျနကေ့တညျးက မိသားစုနဲ့အတူ အဲဒီ စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးကို ထှကျပွေးလာတဲ့သူတှဖွေဈတယျလို့လညျး သူဆိုပါတယျ။ သူတို့ကိုဘာကွောငျ့ ဖမျးဆီးသှား တယျဆိုတာကို မသိရသလို အခုအခြိနျအထိ တဈစုံတဈရာ အဆကျအသှယျလညျး မရသေးတဲ့အတှကျ စိုးရိမျနကွေပွီး အမွနျဆုံးပွနျလှတျပေးစခေငျြတယျလို့ မိသားစုဝငျတှကေ ပွောပါတယျ။ အခုဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျလို့ အုပျခြုပျရေးမှူးတှေ၊ ရဲစခနျးတှကေို ဆကျသှယျပမေယျ့ တဈစုံတဈရာ မသိရသေးဘူး လို့လညျး ဇီးတောတောရကြောငျး ကြောငျးထိုငျဆရာတျော ဦးခမောစာရက RFA ကို မိနျ့ပါ တယျ။
အခုလို စဈဘေးဒုက်ခသညျ သုံးဦးနဲ့ ရဟနျးတျောတဈပါးကို ဖမျးဆီးတာနဲ့ပတျသကျလို့ တပျမတျောဘကျကို RFA က ဆကျ သှယျမေးမွနျးနဆေဲပါ။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာ တပျတျောမတျောက အခုလိုအရပျသားတှကေို အအေအေဖှဲ့ဝငျ ဒါမှမဟုတျ အအေေ အမာခံတှဆေိုတဲ့ သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးတာ ၂၀၀ ကြျောလောကျရှိတယျလို့ ရခိုငျလူ့အခှငျ့အရေး ကာကှယျမွှငျ့တငျ သူ မြားအဖှဲ့ရဲ့ စာရငျးအရ သိရပါတယျ။ RFA က စုဆောငျးရရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတှအေရ ရခိုငျမွောကျပိုငျးမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၉ နှဈဆနျးပိုငျးကနေ ဒီနအေ့ခြိနျအထိ စဈကွောရေးစခနျးမှာ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားစဉျ သဆေုံးသှားသူ စုစုပေါငျး ၃၂ ဦး အထိရှိပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/soldiers-arrest-three-young-men-and-one-monk-in-sittwe-10152020055009.html
စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “မနကေ့တညျးက စပို့နတေယျ ရောကျတာတော့မရောကျသေးဘူး လမျးလုံခွုံရေး အခွအေနေ အရ ဖွညျးဖွညျးဘဲ သှားနရေတော့ ဒီနတေ့ော့ ရောကျမယျထငျတယျ ဒါမှမဟုတျ မနကျဖွနျတော့ ရောကျမယျထငျတယျ ဒီနရေ့ောကျအောငျလညျး ကွိုးစားနပေါတယျ။ ကား ၁၂ စီးနဲ့ ဆနျအိတျ ၁၇၀၀ ပါတယျ နောကျပွီး ဒသေ ကုနျသညျတှေ ဆောကျလုပျရေး ကိစ်စအတှကျ ဘိလပျမွေ သံ၊ သံခြောငျး အပွငျ အခွား စားနပျရိက်ခာအပွငျ အဝတျအထညျတှလေညျး သညျသှားတယျ အရပျဖကျ အဖှဲ့အစညျးအနနေဲ့ ကား ၁၇ စီးနဲ့သယျတယျ စုစုပေါငျး ကားအစီး ၂၉ စီးနဲ့သညျသှားတယျ”ဟုပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကပျဘေးနှငျ့ စဈပှဲတို့ကွောငျ့ အသှားအလာကနျ့သတျထားသညျ့ အတှကျ ရောငျး စရာ ဆနျမရှိတော့ဘဲ စားသောကျကုနျမြား၏ ဈေးနှုနျးမှာလညျး အဆမတနျ မွငျ့တတျသှားခဲ့ပွီး ဒသေခံမြား အခကျခဲ ကွုံတှခေဲ့ရကွောငျးလညျး သိရသညျ။ လကျရှိပလကျဝမွို့နယျကို ပို့ပေးသညျ့ ဆနျမြားကို ပွညျထောငျစု လူကယျပွနျမှ ထောကျပံ့ပေးသညျ့ ဆနျအိတျ ၇၅၀ အိတျပါဝငျပွီး ကနျြ ၉၅၀ အိတျကို ပွညျသူလူထု လှူထားသညျ့ ပိုကျဆံဖွငျ့ဝယျယူထား ကွောငျးလညျး စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျကပွောသညျ။ https://www.chinworld. org/2020/10/13/%e1%80%95 %e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျး RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ကွား တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈရှောငျ ၃၅၀၀ ဝနျးကငျြ ရှိလာကွောငျး လူမှု ပရဟိတ အဖှဲ့မြားထံမှ စုံစမျးသိရသညျ။ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျ တပျမတျော(RCSS/SSA)နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ကွား တိုကျပှဲမြားငွိမျနသေျောလညျး ယမနျနေ့ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျနကေ့အထိ စဈရှောငျရှာသားမြား ထပျမံရောကျရှိလာကွောငျး ကမျးလငျ့လကျမြား လူမှုကူညီရေးအသငျး (နောငျပိနျ)မှ စိုငျးနအေောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။“တိုကျပှဲက တော့မဖွဈတော့ဘူး။ ဒါပမေယျ့ စဈကွောငျး တှေ က ကြေးရှာကိုဖွတျပွီးသှားလာနတေော့ သူတို့ကွောကျလို့ ရှောငျလာတာ ပါ။ စဈရှောငျ အားလုံး ၃၅၀၀ ကြျောရှိပွီ” ဟု စိုငျးနအေောငျ က ဆိုသညျ။
အဆိုပါ စဈရှောငျ ၃၅၀၀ ကြျောသညျ ကြောကျမဲမွို့နယျ တောငျထိပျရှာမှ ၆၄၈ ဦး၊ နားဆောငျး ရှာသား ၁၇၀ ဦး၊ ပုံဝိုးကြေးရှာ ၇၁၈ ဦး၊ ကှနျဟငျကြေးရှာ ၃၉၇ ဦး၊ ကောငျးလနျးကြေးရှာ ၂၈၆ ဦး၊ ဟိုနမျ့ကြေးရှာ ၃၈၆ ဦး၊ နောငျကှမျကြေးရှာ ၉၅ ဦး၊ ဟဲကှီကြေးရှာ ၁၂၅ဦး၊ ကောငျးမှူးခံ ကြေးရှာ ၂၅၀ ဦး နှငျ့ အုမျဟဈကြေးရှာတှငျ ၄၃၀ ဦးတို့ ဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ ရပျရှာမြားအတှငျဝငျရောကျလှုပျရှားစခနျးခသြော အစိုးရတပျမတျောသညျ ယနခြေိ့နျထိ တပျဆုတျပေး ခွငျးမရှိသဖွငျ့ တိုကျပှဲမြား ဆကျလကျဖွဈပှါးမညျကို စိုးရိမျရကွောငျး စဈရှောငျမြားက ပွောသညျ။ “ တိုကျပှဲကတော့ငွိမျ နတေယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈကွောငျးတှကေ ရှာနားမှာရှိနသေေးတယျ။ ကနြျောတို့ မပွနျရဲသေးဘူး။ နောကျထပျအခွအေနေ စောငျ့ကွညျ့ပွီးမှ ပွနျမယျ” ဟု ပုံဝိုးကြေးရှာတှငျ စဈရှောငျနသေညျ့ အမြိုးသားတဦးက ပွောသညျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမှုကွောငျ့ လူစုလူဝေးခွငျး ခရီးသှားလာခွငျးမြားကနျ့သတျထားသဖွငျ့ အလှူရှငျမြားကူညီထောကျပံ့မှု ပေးရနျ မလာနိုငျသောကွောငျ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား နထေိုငျစားသောကျမှု အစစအရာရာ အခကျအခဲရငျဆိုငျနေ ရကွောငျးလညျး စဈဘေးရှောငျမြားကို ကူညီသညျ့အဖှဲ့မြားက ပွောသညျ။ ၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပ ရနျ ရကျပေါငျး ၂၄ ရကျသာကနျြနသေညျ့အခြိနျ၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး အသီးသီး မဲဆှယျနသေညျ့ ကာလ လညျး ဖွဈသဖွငျ့ စဈရှောငျလူထု နရေပျပွနျနိုငျရနျ အစိုးရတပျမတျောအနဖွေငျ့ တပျဆုတျခှာပေးရနျလညျး လူထုက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ ကာလကလညျး သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး မိုငျးရှူးမွို့နယျ၊ ကြေးသီးမွို့နယျ၊ မိုငျးနောငျမွို့နယျ အတှငျး ရှမျးပွညျတိုးတကျရေးပါတီ၊ ရှမျးပွညျတပျမတျော (SSPP/SSA)နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲ ပွငျးထနျသဖွငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ရှဆေို့ငျးခဲ့ရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18886
မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA) တို့အကွားဖွဈပှားနသေော စဈရေးပဋိပက်ခကွောငျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ မကငျြးပနိုငျမညျကို အထူးစိုးရိမျမိသညျ ဟု ခူမီးခငျြးမြိူးနှယျစုအဖှဲ့အစညျးမြားက အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ ကွညောခကျြတဈစောငျထုတျပွနျလိုကျ သညျ။
ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး ပလကျဝမွို့နယျတှငျ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈကစ၍ ယနခြေိ့နျထိ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့ တပျတျော(AA) အကွား တိုကျပှဲဖွဈပှားလကျြရှိပွီး ထိုကဲ့သို့ဖွဈပှားလကျြရှိသော လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခကွောငျ့ ရှေးကောကျ ပှဲအပျေါ ထိခိုကျမှုဖွဈပှားမညျကို အထူးစိုးရိမျကွောငျး ပွညျတှငျးပွညျပအခွစေိုကျ ခူမီခငျြးမြိူးနှယျစုအဖှဲ့အစညျး (၇) ဖှဲ့က ထုတျပွနျကွညောခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ခူမီးခငျြးမြိူးနှယျစုမြားရေးရာပေါငျးစပျညှိနှိုငျးရေးကောငျစီ (KACC) မှပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ကိုစောမွက “ကနြျောတို့နယျမှာ အအေေ တှလေညျး လှုပျရှားနတေုနျးဆိုတော့လေ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးတှလေညျး ကောငျး ကောငျးမလုပျနိုငျဘူး၊ ရှေးကောကျပှဲ အသိပညာပေးမှုတှလေညျး ကောငျးကောငျးမလုပျနိုငျဘူး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ တှရေဲ့ လုပျငနျးစဉျတှမှောလညျးနှောငျ့နှေးတယျပေါ့ဗြာ။ အစိုးရတပျဖကျကလညျး သှားလာဖို့ လုံခွုံရေးအရ ကနျ့သတျထား တာတှရှေိတယျ အဲဒါကွောငျ့ရှေးကောကျပှဲမဖွဈမှာကို ကနြျောတို့အထူးစိုးရိမျမိတယျ’’ဟုပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နယျသညျ ခငျြးပွညျနယျတှငျ မဲဆန်ဒရှငျအမြားဆုံးရှိသညျ့ မွို့နယျဖွဈပွီး နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနရှေ့ေးကောကျပှဲ တှငျ မဲဆန်ဒပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ (၆၂၈၄၅) ဦးရှိသညျဟု ခငျြးပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးမှ ဒုတိယအကွိမျမဲ စာရငျးကွညောခကျြအရသိရသညျ။ လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျမွေ (၅) ခုရှိသညျ့ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲ တှငျ နိုငျငံရေးပါတီ (၆) ခုမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၂၄ ဦးဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈသညျ။
“ တကယျလို့ ပလကျဝမွိ့နယျမှာရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့ရဲ့ ကိုယျစားပွုမှုကပြောကျသှားမယျ၊ ပလကျဝနယျက ခငျြးပွညျနယျလူဦးရရေဲ့ ၅ ပုံ ၁ ပုံက ပလကျဝနယျမှာရှိတယျ၊ အဲဒီ ၅ ပုံ ၁ ပုံသော ကိုယျစားပွုမှုကို ပြောကျသှားမယျ ပွီးတော့ စဈမကျဖွဈပှားတာလညျးပိုစိုးသှားနိုငျတယျ ဘာလို့လညျးဆိုရငျ ပွောပေးဆိုပေးဖို့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှကေမရှိတော့ဘူးဆိုရငျတော့လေ ဒသေခံပွညျသူတှအေနနေဲ့လညျး အစိုးရအပျေါ ယုံကွညျမှုလညျး တဈနညျးမဟုတျတဈနညျးတော့ ကသြှားနိုငျတယျ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေးကောကျပှဲတောငျ မလုပျပေးနိုငျဘူးဆိုတာမြိူးလေ နောကျတဈခုက အျော ငါတို့ကိုကတြော့ ဝိုငျးဖယျခံရပါလားဆိုတဲ့စိတျမြိူးလညျးဝငျသှား နိုငျတယျလေ’’ဟု ကိုစောမွ ကပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76293
အခုလို ကပျဘေးကာလ လူသားခငျြးစာနာတဲ့အနနေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ထိုးစဈတှေ ခကျြခငျြးရပျဖို့ တပျမတျော ကို Free Burma Rangers အဖှဲ့က တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ NLD အစိုးရအနနေဲ့လညျး ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) နဲ့ တှဆေုံ့ဆှေး နှေးရေး အမွနျဆုံးလုပျဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ အခုလို ကပျရောဂါကာလအတှငျး မနကေ့စလို့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျမှာ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) ကို တပျမတျောရဲ့ အပွငျးအထနျ ထိုးစဈဆငျ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ တဈပူပျေါ နှဈပူဆငျ့ဆိုသလို ဒသေခံ ၁,ဝဝဝ ကြျော အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးခဲ့ကွရပါတယျ။ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှကေို ကူညီကယျဆယျရေးဆောငျရှကျ နတေဲ့ Free Burma Rangers အဖှဲ့ တညျထောငျသူ David Eubank က – လူသားခငျြးစာနာတဲ့အနနေဲ့ ဒီတိုကျပှဲတှေ ခကျြ ခငျြးရပျဖို့ တပျမတျောကို တောငျးဆို လိုကျပါတယျ။
“ရခိုငျပွညျသူတှအေပျေါ မွနျမာစဈတပျက တိုကျခိုကျနတောတှေ ရပျစဲစလေိုပါတယျ။ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုတှေ၊ လကျနကျကွီး ပဈခတျမှုတှေ၊ တပျအငျအားတှေ တိုးမွှငျ့ပွီး၊ ပွညျသူတှရေဲ့ အသကျအိုးအိမျတှေ ထိခိုကျ သကေအြေောငျ လုပျနတောတှကေို ရပျစခေငျြပါတယျ။ ဒီနှဈ ၂ဝ၂ဝ ပွညျ့နှဈထဲမှာပဲ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယျတှလေို အရပျသား တှကေို သတျဖွတျပွီး မွနျမာစဈတပျက စဈရာဇဝတျမှု ကြုးလှနျတာတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုတှေ၊ လကျနကျကွီးတှနေဲ့ သိမျးကြုံးပဈခတျမှုတှေ ခွလေငျြတပျတှရေဲ့ တိုကျ ခိုကျမှုတှနေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ကြုးလှနျခဲ့တာပါ။ ဒီတိုကျခိုကျမှုတှဟော လူသားမြိုးနှယျအပျေါ ကြုးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုနဲ့ စဈရာဇဝတျမှု မွောကျပါတယျ။ ဒါတှဟော မွနျမာ နိုငျငံမှာ အခွအေနတှေကေို ပိုပွီးတော့သာ ဆိုးရှားလာစပေါတယျ။”“ဘုံရနျသူဖွဈတဲ့ ကပျရောဂါဆိုးကွီးကို တိုကျဖကျြနိုငျဖို့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံအပါအဝငျ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာဖွဈနတေဲ့ စဈပှဲတှအေားလုံး ရပျဆိုငျးထားဖို့”ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူး ခြုပျ အနျတိုနီယို ဂုတားရတျဈက ဒီနှဈ မတျလက တိုကျတှနျးထားတာပါ။
ဒီတိုကျတှနျးမှုကို တုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ တပျမတျောက အပဈအခတျရပျစဲရေး ကွညောခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး အကွမျး ဖကျအဖှဲ့အစညျးအဖွဈ တရားဝငျကွညောထားတဲ့ AA အဖှဲ့လှုပျရှားရာ ရခိုငျပွညျနယျတော့ မပါဝငျခဲ့သလို၊ AA အပါအဝငျ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့ကလညျး အပဈအခတျရပျစဲရေး ကွညောထားပွီး၊ တိုကျခိုကျလာရငျတော့ ခုခံစဈလုပျ သှားမယျ လို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။ vFree Burma Rangers အဖှဲ့ဟာ မွနျမာနိုငျငံက လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈပှားရာ ဒသေတှမှော လူသားခငျြးစာနာမှု ကူညီကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှေ ဆောငျရှကျနတော ၂၇ နှဈရှိသှားပါပွီ။ Free Burma Rangers အဖှဲ့ ခှဲ ၁ဝဝ ကြျော သငျတနျးပို့ခပြွီးဖွဈသလို၊ ရခိုငျပွညျနယျမှာလညျး အဖှဲ့ခှဲပေါငျး ၃ဝ ကြျော ရှိပါတယျ။ အခုလို ကပျဘေးကာ လမှာ နထေိုငျမကောငျးဖွဈသူတှေ အထူးသဖွငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရနိုငျတဲ့သူတှအေတှကျ ကနျြးမာရေး စောငျ့ ရှောကျမှုပေးနိုငျအောငျလညျး အစိုးရက ဆောငျရှကျပေးစခေငျြတယျလို့ Free Burma Rangers အဖှဲ့က ပွောဆို ခဲ့ပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/Free-Burma-Rangers-calls-to-end-fighting-in-Rakhine-State-
၂၀၂၀ ပါတီစုံအထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရခွငျးသညျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးက မတူကှဲပွားမြိုးနှယျစု မြား၏ ပွဿနာကို သဟဇတဖွဈစရေနျ တဈဖကျတဈလမျးမှ ပါဝငျဖွရှေငျးနိုငျရနျအတှကျ ဖွဈကွောငျး ကမနျအမြိုးသားတိုး တကျရေးပါတီမှ ထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးတငျလှိုငျဝငျးက ပွောသညျ။ “ကမနျအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီအနနေဲ့ သံတှဲမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကသျောလညျးကောငျး၊ ပွညျနယျလှတျတျောက သျောလညျးကောငျး အနိုငျရခဲ့လို့ရှိရငျ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ မတူကှဲပွားတဲ့ လူမြိုးစုတှေ၊ နိုငျငံရေးအကပျြအတညျးတှကေို ဖွရှေငျးလိုစိတျ၊ ဆောငျရှကျ လိုစိတျ ကနြျောတို့ ကမနျမှာလညျး တာဝနျရှိတယျလို့ ခံယူတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျရဲ့ အကပျြအတညျးကို ပါဝငျပူး ပေါငျးဖွရှေငျးရမယျဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ဒသေခံတှကေ တာဝနျပေးလာလို့ အောငျနိုငျမှုမြိုးသာရှိမယျဆိုရငျ ဒီတာဝနျကိုထမျး ဆောငျ သှား မယျဆိုပွီး ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျခွငျးဖွဈပါတယျ။”ဟု ဦးတငျလှိုငျဝငျးက ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ ပါတီအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ သံတှဲမွို့နယျအတှငျးမှ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၁)နရောနှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောတဈနရော အပွငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ တာမှမွေို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၂)၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ နှငျ့ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျမှ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၁) တို့တှငျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈနရောစီ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။ ကမနျအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ နှငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈတို့တှငျ ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့နယျနှငျ့ ရမျးဗွဲမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျမြားတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သျောလညျး ယခုနှဈတှငျ ငှကွေေး အခကျခဲ အရ မဲဆန်ဒနယျလြှော့ခခြဲ့ရ ကွောငျး ဆိုသညျ။
ပါတီမှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ သံတှဲမွို့နယျတှငျ ကမနျတိုငျးရငျးသား တဈသောငျး ကြျောရှိပွီး ကမနျလူမြိုး မြားအနဖွေငျ့ ပါတီအားမဲပေးမညျဆိုပါက အနိုငျရရှိနိုငျကွောငျး အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးတငျလှိုငျဝငျးက ပွောသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ က တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲစဈဆေးရာတှငျလညျး သံတှဲမွို့နယျမှ ကမနျကြောငျးသားမြားအား “ဘင်ျဂလီ”ကြောငျးသား မြားဟုဆိုကာ ပညာရေးဌာနမှ စာရငျးထုတျပွနျပွီး သီးခွားစာမေးပှဲဖွဆေိုခိုငျးခဲ့ခွငျးမြားလညျး ရှိခဲ့ကွောငျး ကမနျလူမြိုးမြား က ပွောသညျ။ ထိုသို့ ခှဲခွားဆကျဆံမှုမြိုးမရှိစခေငျြသညျ့အပွငျ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး၊မီးလငျးရေးတို့တှငျလညျး တနျးတူ ညီမြှဖွဈစခေငျြကွောငျး ကမနျအမြိုးသားပါတီအား ဝနျးရံထောကျခံသူ မဆောငျးနှငျးဝကေ ဆိုသညျ။
ကမနျလူမြိုးမြားသညျ အစ်စလာမျဘာသာအား ကိုးကှယျကွသျောလညျး ရခိုငျမြိုးနှယျစုဝငျ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုတဈခုလညျး ဖွဈသညျ။ ရခိုငျပွညျ နယျ စဈတှေ၊ ရမျးဗွဲနှငျ့ သံတှဲမွို့နယျတို့တှငျ အမြားစုနထေိုငျကွပွီး တခြို့မှာ ၂၀၁၂ ခုနှဈ အရေး အခငျးနောကျပိုငျးတှငျ ရမျးဗွဲမွို့နယျမှ ရနျကုနျမွို့သို့ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျသူမြားလညျး ရှိကွောငျး သိရသညျ။ http://www .mizzimaburmese.c om/article/74452
ရခိုငျပွညျနယျ တောငျကုတျမွို့နယျက NLD ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဖမျးထားတာ ၁ ရကျကြျောကွာလာပွီဖွဈပမေယျ့ ဘာသတငျးမှမကွားသေးတာကွောငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ အသကျအန်တရာယျကို မိသားစုတှကေ စိုးရိမျနကွေပါ တယျ။ အဖမျးမခံရဘဲ လှတျလာသူတှကေ AA ဘကျက ဖမျးသှားတာလို့ပွောပမေယျ့ ရခိုငျ့တပျတျော AA ပွောရေးဆိုခှငျ့ ရှိသူကတော့ ဒီကိစ်စကို ဘာသတငျးမှ မရသေးဘူးလို့ပွောပါတယျ။ တောငျကုတျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောနရောအတှကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒျေါနီနီမမွေငျ့၊ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါခဈြခဈြခြော နဲ့ ပွညျနယျလှတျ တျောအတှကျ ယှဉျပွိုငျမယျ့ ဦးမငျးအောငျတို့ သုံးဦးကို မဲဆှယျသှားနတေုနျး တောငျကုတျမွို့နယျ ဖောငျးခါးကြေးရှာမှာ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့က ရိုကျနှကျဖမျးဆီးသှားတာပါ။
အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါခဈြခဈြခြောရဲ့ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါမယျသီက သမီးဖွဈသူရဲ့ အသကျ အန်တရာယျ စိုးရိမျနတေယျလို့ RFA ကိုပွောပါတယျ။ “အမကွေီးက သမီးပဲအားကိုးရတယျလေ။ အားကိုးရပွီး သူလုပျခငျြတာ ကို ခှငျ့ပွုထားတာ။ အခုလို အခကျအခဲဖွဈလာတော့လညျး အားကိုးစရာမရှိဘူးပေါ့။ လူကွီး သူကွီးတှကေိုလညျး အနျတီ တောငျးပနျပါတယျ။ ပါတီက သမီးနဲ့ ကလေးနှဈယောကျကိုလညျး အမွနျဆုံးလှတျစခေငျြတယျ။ အခုဖမျးဆီးသှားတဲ့ အဖှဲ့က ကလေးတှကေိုလညျး တောငျးပနျပါတယျ။ ညီအကိုမောငျနှမတှလေို သဘောထားပွီး ဒီကလေးတှကေို အမွနျဆုံးပွနျလှတျ ပေးပါလို့ တောငျးပနျခငျြပါတယျ” ဒျေါနီနီမမွေငျ့ရဲ့ခငျပှနျး ဖွဈသူ ကိုလငျးနိုငျကတော့ ဇနီးရဲ့ သတငျး ခုထိဘာမှ မသိရသေး တာကွောငျ့ စိုးရိမျနတေယျလို့ပွောပါတယျ။
ပွညျနယျလှတျတျောအတှကျ ယှဉျပွိုငျမယျ့ ဦးမငျးအောငျရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါမွတျဝတျရညျကတော့ နထေိုငျမကောငျးတာ ကွောငျ့ RFA ကို ဖွဆေိုနိုငျခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒီကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ အဖမျးခံရတဲ့စဉျ အတူရှိနတေဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ကိုယျစားလှယျလောငျးရဲ့ ကိုယျစားလှယျနဲ့ NLD ပါတီဝနျးရံသူတှဖွေဈတဲ့ မအေးအေးနိုငျ၊ ကိုသနျ့ဇငျဖွိုးတို့ သုံးဦး ပွနျလှတျ လာပါတယျ။ ပွနျလှတျလာတဲ့ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ မခဈြခဈြခြောရဲ့ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ကိုယျစား လှယျလောငျး မအေးအေးနိုငျ ကလညျး သူတို့သုံးယောကျလုံးကို အမွနျပွနျလှတျပေးဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ။ ပွနျလှတျလာတဲ့ သူတှကေို မနကေ့ တောငျကုတျမွို့နယျ ရဲစခနျးမှာ ရဲစဈခကျြရယူခဲ့ပါတယျ။ တောငျကုတျမွို့ နယျ ရဲစခနျးမှူးကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာတော့ အစညျးအဝေးတကျနလေို့ဆိုပွီး ဖွဖေို့ ငွငျးဆနျပါတယျ။ ဒီကနေ့ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ အရေးပျေါ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲအတှငျး သမ်မတရုံးပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေးကို ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ သတငျးထောကျ တှကေ မေးမွနျးဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ ဒီနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ဒီကိစ်စကို မပွောဖို့ နိုငျငံတျောအကွီးအကဲတှကေ မှာထား တယျလို့ တုံ့ပွနျပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/family-members-of-three-NLD-candidates-abduct ed-in-Rakhine-10152020105102.html
ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ၌ မဲပေးနိုငျမညျ့ လူဦးရသေညျ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲထကျ လူဦးရေ ထကျဝကျခနျ့ တိုးလာကွောငျး ဖားကနျ့မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံမှ သိရသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ဖားကနျ့မွို့နယျတဈခုလုံး မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသညျ့ မဲဆန်ဒရှငျ ၈၉၄၈၈ ရှိခဲ့သျော လညျး လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ၁သိနျး ၈သောငျးကြျောရှိပွီဖွဈကွောငျး မွို့နယျရှေးကောကျပှဲ အရာရှိ ဦးအောငျကြျောသူ က ပွောသညျ။“လောလောဆယျ ကနြျောတို့စာရငျးတော့မပိတျသေးဘူး။ သို့သျောငွားလညျး ဘယျလိုအခွနေရှေိလဲဆိုတော့ တဈခြို့မဲဆန်ဒရှငျတှကေ မဲစာရငျးကိုသှားမကွညျ့ကွဘူး။ အဲလိုသှားမကွညျ့ကွတော့ မဲ စာရငျးမှာပါမှနျးမသိ မပါမှနျးမသိ အဲတော့ ပွနျပွနျပွီးလြှောကျခဲ့တာတှရှေိတယျ။ အဲကွောငျ့ တဈခြို့မဲစာရငျးတှကေ ထပျ တယျ။ အဲတော့ ကနြျောတို့က မဲစာရငျးကိုပွနျစဈ မဲစာရငျးမှာမပါဘူး။ သခြောပွီ ရှေးကောကျပှဲ ဥပဒပွေဌာနျးခကျြနဲ့ ကိုကျညီ ပွီဆိုမှ မဲစာရငျးထဲကိုထညျ့မယျ။ အဲတော့ ခုစီစဈဆဲကာလဖွဈတဲ့အတှကျ တိတိကကြတြော့ မသိရသေးပါဘူး။ လောလော ဆယျတော့ အကွမျးအားဖွငျ့တော့ ၁သိနျး ၈သောငျးကြျောရှိတယျ။” ဟု ဖားကနျ့မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အရာရှိ ဦးအောငျကြျောသူကပွောသညျ။
ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ မဲစာရငျးထကျဝကျခနျ့တိုးလာခွငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ကခငျြအမြိုးသားကှနျကရကျပါတီ KNC မှ ပွညျနယျ လှတျတျော ကိုယျသားလှယျလောငျး ဦး ဂနျြမာနောငျလတျ က ယခုလိုသုံးသပျပွောဆိုသညျ။“ဖားကနျ့မှာ မဲထညျ့ခှငျ့ရှိသညျ့ ဌာနလေူထုတှကေ ကနြျောသိရသလောကျ ၃သောငျးလောကျဘဲရှိတယျ။ ဒီရှပွေ့ောငျးကိစ်စက ကွံ့ခိုငျရေးအစိုးရက ၂၀၂၀ လုပျလာတယျ။ အဲဒါကို NLD ကလညျး အလိုကျသိ သူတို့မဲရဖို့ ကနြျောတို့ KNC တှေ ဒီလောကျထိကနျ့ကှကျ နတေဲ့ကွား ထဲကကို အတညျပွုဖွဈအောငျပွုပေးတယျ။ ဆိုတော့ နိုငျငံရေးအရ ဝငျရောကျစှကျဖကျခွငျး ခံနရေတယျလေ။ တိုငျးရငျး ဒသေမှာ ဒီရှပွေ့ောငျးက လုံးဝမဖွဈသငျ့တဲ့ကိစ်စပါ။”ဟု ကခငျြအမြိုးသားကှနျကရကျပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးဂနျြမာနောငျလတျ ကပွောသညျ။
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ နိုငျငံသားမြား မဲပေးပိုငျခှငျ့မဆုံးရှုံးစရေနျ မိမိရောကျရာဒသေတှငျ ရကျပေါငျး ၁၈၀ နထေိုငျသူ သညျ မဲပေးနိုငျကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ ထုတျပွနျခဲ့ပွီး ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျမူ ရကျပေါငျး ၉၀ သို့ လြှော့ခလြိုကျသညျ့အတှကျ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ ရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ကနျ့ကှကျမူမြားရှိခဲ့ သညျ။ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ပါတီမြားသညျ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ(KSPP)၊ ကခငျြအမြိုးသား ကှနျကရကျပါတီ(KNC)၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (USDP)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD)၊ တိုငျးလိုငျရှမျးနီအမြိုးသားမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ(TNDP) စသညျ့ ပါတီ ၆ ပါတီနှငျ့ တဈသီးပုဂ်ဂလ တဈဦးဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး သကျဆိုငျရာဌာန မှ သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/15/l2-9/
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျဦးမွို့ အစားအသောကျနှငျ့ ဆေးဝါးကှပျကဲရေး ဦးစီးဌာန FDA မှ ဝနျထမျး ၁ ဦးမှာ အောကျတို ဘာလ ၁၄ ရကျ ည ၉ နာရီကြျောအခြိနျခနျ့က မွို့ဝငျကားဂိတျ၊ ငှတေောငျပေါကျတံတားတှငျ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။
ဖမျးဆီးခံရသူမှာ အသကျ ၃၆ နှဈအရှယျ ကိုဦးကြျောတငျဖွဈပွီး ၎င်းငျးမှာ မွောကျဦး ကားဂိတျဘကျမှ ၎င်းငျးနထေိုငျရာ လကျကောငျဈေးရပျကှကျသို့ ဆိုငျကယျဖွငျ့ လာရောကျစဉျ လမျးတှငျ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ ၎င်းငျးသညျ မွောကျဦးမွို့နယျ အုတျဖိုကနျ ဇာတိ ဖွဈပွီး FDA ရုံးတှငျ စာရေးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနသေညျမှာ ၃ နှဈခနျ့ ရှိပွီ ဖွဈကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။ ဖမျးဆီးခံရသူ၏ ဖခငျဖွဈသူ ဦးမောငျသနျးရှကေ “မနညေ့ ၉ နာရီ ကြျောမှာ ကားဂိတျကနေ ဆိုငျကယျနဲ့ တဦးတညျး ပွနျလာတဲ့အခါ တံတားနားမှာ ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးသှားတာ။ သူက အုတျဖိုကနျအနီး က FDA ရုံးမှာ စာရေးအဖွဈ တာဝနျကနြတော ” ဟု ပွောသညျ။ ၎င်းငျးနှငျ့ ဆှမြေိုးတျောသူတဦးဖွဈသညျ့ အုတျဖိုကံကြေးရှာ နေ ဒျေါမသောငျးဌေးက “ သူ့မှာ ဝနျထမျး အထောကျအထား ကဒျတှေ အစုံရှိတယျ။ FDA တာဝနျရှိ အထကျလူကွီးတှကေို လညျး တိုငျကွားထားတယျ။ သူ့တို့ကလညျး ရဲစခနျးကို ဆကျသှယျထားပွီးတော့ ထောကျခံထားတယျ။ နောကျပွီး ကြေးရှာ လူကွီးတှကေလညျး ထောကျခံထားတာ ရှိတယျ ” ဟု ပွောသညျ။
ကိုဦးကြျောတငျကို လကျရှိတှငျ မွောကျဦးမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ ထိနျးသိမျးထားပွီး မညျ့သညျ့ ပုဒျမနှငျ့ အရေးယူမညျကို မသိရ သေးကွောငျး ဖခငျဖွဈသူက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ ဒီနေ့ ရဲစခနျးကို သှားတော့ အခြုပျထဲမှာ သားကို တှခေဲ့တယျ။ ရဲဘကျ ကတော့ သူ့ကိုခြုပျထားအုံးမယျလို့ ပွောတယျ။ ဘာကွောငျ့ဖမျးတယျ။ ပုဒျပုဒျမနဲ့အရေးယူမယျ ဆိုတာကိုတော့ မပွောဘူး။ သားကို မေးမွနျးဖို့ကွိုးစားလညျး မရခဲ့ဘူး ” ဟု ဆိုသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျး ဖွဈပှားခဲ့သော စဈပှဲကာလအတှငျး လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားထံ အရပျသားမြား ဖမျးဆီးခံရမှုမြားရှိကာ စဈဆေးရေးကာလအတှငျး သဆေုံးမှုမြား ရှိသညျ့အတှကျ ၎င်းငျး အတှကျ အလှနျစိုးရိမျမိကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။ မွောကျဦးမွို့နယျမှ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးသာစိနျက အရပျသားမြားကို သံသယနှငျ့ ဖမျးဆီးရာတှငျ ဥပဒလေုပျထုံးနှငျ့ အညီဆောငျရှကျသငျ့ကွောငျး ထောကျပွ သညျ။ ဦးထှနျးသာစိနျက “ အရပျသားပွညျသူတှေ ဖမျးခံရတဲ့ အပျေါမှာ ကနြျောတို့လညျး စိုးရိမျမှု မွငျ့တကျနတေယျ။ ဒသေခံ တှကေို သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးရငျလညျး တရားဥပဒေ ဘောငျအတှငျးက အလုပျပဲ လုပျစခေငျြတယျ ” ဟု ဆိုသညျ။ ဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီမှ မွောကျဦးမွို့မရဲစခနျး စခနျးမှူးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ရာတှငျ ဆကျသှယျ၍ မရှိခဲ့ပါ။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/10/15/231718.html
ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့နယျ မိုငျယု ၁၀၅ မိုငျ နယျစပျကုနျသှယျရေးဇုနျတှငျ အောကျတိုဘာ ၁၄ ရကျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီခနျ့က ဖောကျခှဲရေးသုံး ပစ်စညျးဖွဈသညျ့ Remote Mine Receiver မြား ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရရှိမှုဖွဈစဉျမှာ ယာဉျအမှတျ SHN-1G/—– ဖူဆိုအဖွူရောငျ ၁၂ ဘီး ကုနျတငျယာဉျသညျ မိုငျယု ၁၀၅ မိုငျ နယျစပျ ကုနျသှယျရေး ဇုနျအတှငျး သှငျးကုနျထုတျကုနျဌာနတှငျ အစဈဆေးခံရနျ ရောကျရှိလာခဲ့ရာမှ နမူနာ စဈဆေးရနျ ကားပျေါရှိ အမြိုးသားဝတျ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီတိုမြား ထညျ့ထားသညျ့ ဂကျြဖာကိုယူ၍ နမူနာစဈဆေးရာမှ ဂကျြဖာအတှငျး ဝိုငျယာကွိုးနှငျ့ ဆော့ကကျမြား သိုဝှကျသယျဆောငျလာသညျကို တှရှေိ့ခဲ့ရာမှ ပူးပေါငျးအဖှဲ့မြားက စဈဆေးရာ ဘောငျဘီ တို ဘူးမြားအတှငျး Remote Mine Receiver မြား စုစုပေါငျး ၁၇၀၀ ခုကို တှရှေိ့ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ တှရှေိ့မှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ သကျဆိုငျရာဌာနမြားက လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့အညီ လုပျဆောငျ‌နပွေီး တှရှေိ့ဖမျးဆီး ရခဲ့သူ ယာဉျမောငျး ယာဉျနောကျလိုကျနှငျ့ အေးဂငျြ့ တို့ကို အောကျတိုဘာ ၁၄ ရကျ ည ၇ နာရီ ကြျောခနျ့က မူဆယျမွို့မ ရဲစခနျးသို့ ချေါဆောငျလာပွီး စတငျစုံစမျးစဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနကော ဥပဒအေရ အရေးယူနိုငျရနျ သကျသခေံပစ်စညျးမြား သိမျးဆညျးမှုကို ဌာနဆိုငျရာ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့အညီ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနကွေောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/195578
လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျသူမြား ဘေးကငျးလုံခွုံစှာ မဲပေးနိုငျရေးနှငျ့ မဲစာရငျးကိုလညျးနောကျဆုံး အမွနျစဈဆေး ကွဖို့တိုကျတှနျးသော လူငယျအဖှဲ့မြားက စကျဘီးစီးလှုပျရှားမှုအစီစဉျကို မွဈကွီးနား မွို့နယျတှငျ ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ ကခငျြပွညျနယျလူငယျရေးရာကျောမတီအဖှဲ့နှငျ့ We Generation လူငယျအဖှဲ့တို့ ပူးပေါငျးဦးဆောငျပွီး အောကျတိုဘာလ ၁၁ ရကျနေ့ မနကျ လူငယျအယောကျ ၃၀ ခနျ့က မွဈကွီးနားစီတာပူရပျကှကျမှ အာလမျကြေးရှာအထိ စကျဘီးစီးကာ လမျးတဈလြှောကျ ပညာပေးစာစောငျမြား ကပျခဲ့သညျ။
“မွို့နယျပွညျသူမြားအနနေဲ့ကိုယျ့ရဲ့နာမညျ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျးထဲမှာ ပါမပါ သှားရောကျစဈဆေးကွဖို့နှငျ့ နောကျတဈခုက ခုခြိနျက ကိုဗဈကာလဖွဈတယျ။ ဒီကာလမှာ ဘေးကငျးလုံခွုံစှာမဲပေးနိုငျဖို့ ကြှနျမတို့ရညျရှယျပါတယျ။”ဟု ကခငျြပွညျနယျ လူငယျရေးရာ မွဈကွီးနားခရိုငျတှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး မဆိုငျးဆနျ့ က ပွောသညျ။ Covid ကာလ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မပကျြမကှကျဘဲ ဘေးကငျးလုံခွုံစှာ မဲပေးကွဖို့ လကျကမျးစာစောငျမြားကို အမြားတှမွေ့ငျနိုငျသောနရောမြားတှငျ လိုကျ ကပျခဲ့ကွသညျ။“ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲပေးကွဖို့ ပွညျသူအားလုံးမှာတာဝနျရှိတယျ။ အရေးကွီးတယျ။ ကိုဗဈကာလ လညျးဖွဈတယျ။ ရှေးကောကျပှဲလညျးရောကျလာပွီဆိုတော့ မဲသှားပေးတဲ့ခြိနျမှာ ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုမြိုး တှေ သှားရောကျပေးသငျ့တယျဆိုတဲ့အရာတှေ လိုကျလံအသိပေးတဲ့အရာမို့ ပါဝငျရခွငျးဖွဈတယျ။”ဟု လှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျ သူလူငယျ တဈဦး ပွောသညျ။
၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒအေောကျ ပေါကျထှကျလာသော တတိယအကွိမျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပတော့မညျဖွဈသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/13/l2-8/
ကယားပွညျနယျသို့ ဝငျထှကျ သှားလာနသေညျ့ ယာဉျလိုငျးမြားရပျနားထားသဖွငျ့ လှိုငျကျော အဝေးပွေး ယာဉျရပျနား စခနျးမှ ယာဉျမောငျး ယာဉျနောကျလိုကျအပါအဝငျ လူပေါငျး ၇၀၀ ခနျ့အားကယားပွညျနယျ ပုဂ်ဂလိက မျောတျောယာဉျ လုပျငနျးမြား စနဈတကြ ကွီးကွပျရေး ကျောမတီမှ ဆနျနှငျ့ ဆီမြားကို အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျနကေ့ တတိယအကွိမျအဖွဈ ထောကျပံ့ပေးခဲ့သညျ။
ယာဉျလိုငျးမြား ရပျနားထားသညျ့ အတှကျ စားဝတျနရေေးအခကျဖွဈနသေညျ့ ယာဉျမောငျး၊ ယာဉျနောကျလိုကျနှငျ့ ကားဝငျး အတှငျးရှိ ရုံးဝနျထမျးမြားအား တဈဦးလြှငျ ဆနျ ၁၂ ပွညျ၊ ဆီတဈပိသာနှုနျးဖွငျ့ ကူညီထောကျပံ့ပေးခွငျးဖွဈကွောငျး ကယား ပွညျနယျ ပုဂ်ဂလိက မျောတျောယာဉျလုပျငနျးမြား စနဈတကြ ကွီးကွပျရေး ကျောမတီ အမှုဆောငျအဖှဲ့ ဥက်ကဌ ဦးစံအေး က ပွောသညျ။ “ ၁၂ ရကျနကေ့နေ ဒီနေ့ အထိ ၁ လနဲ့ ၃ ရကျဖွဈသှားပွီးပေါ့ ။ ကနြျောတို့ ယာဉျမောငျး၊ ယာဉျ နောကျလိုကျ တှလေညျး ဒီလုပျငနျး တခုကိုသာ ဦးတညျလုပျနတော ဒီလုပျငနျး မလုပျတဲ့ အခါကတြော့ စားဝတျနရေေး ခကျခဲတဲ့ အတှကျကွောငျ့မလို့ ကနြျောတို့ ကျောမီတီတှကေ ဆငျ့ကဲ အစညျးအဝေးထိုငျပွီးတော့ ဒါပေးသငျ့တယျ၊ ဒီထကျကွာရငျ လညျး ထပျပေးဖို့ ကနြျောတို့ စီမံ ဆောငျရှကျထားတာရှိတယျ ”ဟု ပွောသညျ။
“ ကနြျောတို့ ကိုဗဈ ကငျးစငျတဲ့ ပွညျနယျဖွဈတဲ့ အလြောကျ ဒီလိုကငျးစငျအောငျ နနေိုငျဖို့အတှကျ ကနြျောတို့ ယာဉျ မောငျး၊ ယာဉျနောကျလိုကျ အားလုံးနဲ့ ကနြျောတို့ ထိနျးခြုပျနိုငျတယျ ဆိုတာကို ကနြျောတို့ ပွညျနယျ ကိုယျစား ကျောမတီ အနနေဲ့မြားစှာ ဂုဏျယူပါတယျ”ဟု ဦးစံအေးက ရှငျးပွသညျ။ ကယားပွညျနယျသို့ ဝငျထှကျသှားလာနသေညျ့ ခရီးသညျတငျ ယဉျလိုငျး အားလုံးကို စကျတငျဘာ ၁၂ ရကျမှ စတငျ၍ ယနအေ့ထိ ရပျဆိုငျးထားရနျ ပွညျနယျ အစိုးရမှ ညှနျကွားခွငျးဖွဈ ကာ ကယားပွညျနယျတှငျ ယာဉျလိုငျးပေါငျး ၇၀ နီးပါရှိကွောငျး သိရသညျ။ ကယားပွညျနယျသညျ ယနအေ့ထိ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ ကိုဗဈရောဂါ ကငျးစငျးနသေညျ့ တဈခုတညျးသော ပွညျနယျအဖွဈ ရပျတညျနဆေဲဖွဈပွီး ပွညျနယျအတှငျး အဝငျ အထှကျ စောငျ့ကွညျ့နသေညျ့ ဂိတျမြားကိုလညျး အထူး ကွပျမတျ ဆောငျရှကျထားကွောငျး သိရသညျ။ http://www. mizzimaburmese.com/art icle/74530
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါတှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ(NLD)ပါတီက ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေး အတှကျ စိုကျထူထားသညျ့ ဆိုငျးဘုတျအခု ၄၀ ရှိသညျ့အနကျ ၅ ခုမှာ ဖကျြဆီးခံလိုကျရကွောငျး ယငျးပါတီထံမှသိရသညျ။
ဆိုငျးဘုတျမြား ဖကျြဆီးခံရသညျမှာ သုံးကွိမျရှိပွီဖွဈပွီး ဖကျြဆီးသူမြားအား အရေးယူနိုငျရနျ ဘူးသီးတောငျမွို့မရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ၏ NLD ပါတီအတှငျးရေးမှူး ဦးအောငျငွိမျးက DMG သို့ ပွောသညျ။“ဖကျြဆီး ရတာ အခုတဈကွိမျနဲ့ဆို ၃ ကွိမျရှိပွီ။ နစှေဲ့တှေ မှတျမရတော့ဘူး။ မနကေ့ ၂ ခု ဖကျြဆီးခံ ရတယျ။ အောကျတိုဘာ ၁၅ မနကျမှာ သှားကွညျ့တော့ ၅ ခုအထိပကျြစီးနတေယျ”ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ အအေတေို့တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျရှိ ကြေးရှာအမြားစုတှငျ လူနထေိုငျခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ ပါတီအောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျမြားကို ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါ၌သာ ထောငျထားခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထို့အပွငျ တောငျကုတျနှငျ့ ရမျးဗွဲမွို့နယျတို့တှငျလညျး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ(ANP)၏ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ အခြို့ဖကျြ ဆီးခံရမှုရှိခဲ့ပွီး တောငျကုတျ၊ မွပေုံ၊ မာနျအောငျနှငျ့ စဈတှမွေို့နယျတို့တှငျလညျး NLD မှ စိုကျထူထားသညျ့ အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျအနညျးဆုံး ၁၀ ခုခနျ့ ဖကျြဆီးခံထားရကွောငျး သကျဆိုငျရာပါတီမြားထံမှ သိရသညျ။ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ တှငျကငျြးပမညျ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ ကာလကို စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ နံနကျ ၆ နာရီမှ နိုဝငျဘာလ ၆ ရကျနေ့ ည ၁၂ နာရီအခြိနျထိ ရကျပေါငျး ၆၀ ခှငျ့ပွုကွောငျး ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ကွငွောထားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76297